D. Specification and Services Grating ความหมาย การสั่งผลิต ติดตั้ง ออกแบบ ผลทดสอบการรับแรง-สารเคมี - My blog
Gully Grating กลุ่มเกรตติ้งตะแกรงทางเดินระบายน้ำ
1 Plastic PolyPropylene Grating ตะแกรงทางเดินระบายน้ำ พลาสติกชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษ PP *Best Seller No.1
2 Galvanised Steel Grating ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปชุบกันสนิม สำหรับ รางระบายน้ำ ทางเดิน *Best Seller No.2
3 FRP FiberGlass Mould Grating ตะแกรงระบายน้ำ ไฟเบอร์กล๊าส พื้นทางเดินในโรงงาน *Best Seller No.3
4 ABS Swimming Overflow Drainage Grating แผ่น ฝาปิดตะแกรง ระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ เอบีเอส พีวีซี **
5 Curbed Drainage Grating Scupper ตะแกรงดักขยะ ใบไม้ในคันหินด้านข้างริมฟุตบาท ( Drive HighWay Drain Grating)
6 Tree Guard Grating Paver Frame Cover กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ มีทั้งแบบตัวต่อและสำเร็จรูป
Manhole Cover ฝาบ่อปิดครอบท่อพักระบบบำบัดน้ำเสียทิ้ง
7 FRP FibreGlass Manhole Cover ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อไฟเบอร์กล๊าส ผสมเรซิ่น (ไม่เป็นสนิม รับแรงสูง ทดแทนแสตนเลส)
8 Ductile Cast Iron Manhole Cover (Round/Square) ฝาปิดท่อ ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ เหนียวระบบบำบัดน้ำ
9 FRP Diamond Top Cover (Special Cut) ฝาทึบปิดบ่อครอบท่อ พักไฟเบอร์กล๊าสชนิดสั่งตัดตามขนาดได้ทันที
Grating Equipment กลุ่มอุปกรณ์ตะแกรง เพ็กบอร์ด
10 Egg Crate Grille Diffuser Divider ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม *** New Product !
11 Facade Cladding Ceiling Sun Screen หน้ากากตึก แผ่นกั้นกรองแสง รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตา
12 PegBoard Display Tools Hooks Shelves แผ่นกระดาน เพ็กบอร์ด เจาะรูแขวนเก็บเครื่องมือช่าง ตะขอขาแขวนฮุก *** New!
13 FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector เทปกันลื่น แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส *** New Product !
14 HDG Steel Grating clip lock clamp fastener ตัว คลิปล็อค ยึดจับแผงตะแกรงมีฐานตีนเป็ด ชนิดแสตนเลส/เหล็กชุบซิงค์ ***
15 FormWork Ties System TieRod/ThreadBar WingNut WaterStopper อุปกรณ์ยึด แบบชนิดเหล็กรับแรงทนดึงสูง
Contact & Enquiry ติดต่อสั่งซื้อ แผนที่ ราคาส่วนลด
A: Contact us [Premium Grating Manhole Cover]: ช่องทางติดต่อสั่งซื้อ แผนที่รับสินค้า บัญชีธนาคาร เงื่อนไขการจัดส่ง
B. Grating- Manhole Price : เช็คราคาสินค้า ขอใบเสนอราคา ส่วนลดพิเศษ
C. Projects Reference Steel FibreGlass Grating Manhole Cover : ตัวอย่างลูกค้า การประยุกต์ใช้ วิธีการเลือกซื้อ
D. Specification and Services Grating ความหมาย การสั่งผลิต ติดตั้ง ออกแบบ ผลทดสอบการรับแรง-สารเคมี
E. About Us : Grating Thai | Chancon Company
F. Steel Dealer Sales Wanted : ขอเป็นตัวแทนจำหน่าย รับสมัครพนักงานขาย
G. Shopping Site Map : ราคาสินค้าทั้งหมดของ ตะแกรงระบายน้ำ ฝาปิดบ่อครอบท่อพัก
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแชนคอน Product/CHANCON PROFILE Grating
FRP FibreGlass Grating Services and Specification(Chemical Resitance, Load Ability, Cutting Method)
ระยะเผื่อของบ่ารับตะแกรง – การสั่งปิดขอบ – วิธีตัดตะแกรง – ผลทดสอบการรับแรง ตารางการทนต่อสารเคมี ของตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส
Designing Space between Grating and L-Angle
วิธีการติดตั้งตะแกรงระบายน้ำ ควรออกแบบเตรียมบ่ารับให้กว้างและสูงพอดีกับแผ่นตะแกรง เพื่อความแข็งแรงและปลอดภัยของการใช้งาน การติดตั้งตะแกรงระบายน้ำจะต้องออกแบบเตรียมบ่ารองรับให้กว้างและสูงพอดีกับแผ่นตะแกรงระบายน้ำ โดยมาตรฐานทั่วไป ตะแกรงเหล็กและพลาสติคมีความกว้าง2ขนาด ได้แก่กว้าง 25cm. และ 30cm. ดังนั้นบ่ารับตะแกรง(รูปตัว L) จะต้องใช้เหล็กฉากวางลงไปก่อนเทคอนกรีต โดยเว้นความสูงไว้ 25-30mm. (ขึ้นอยู่กับประเภทของตะแกรง)เพื่อให้ตะแกรงที่วางลงไปเสมอพอดีกับพื้น ไม่สะดุดเวลารถเข็นหรือคนเดินผ่าน ส่วนความกว้างของบ่ารับเมื่อวัดแล้วจะต้องเว้นเผื่อไว้ 5-10mm. ดังนี้
ระยะความกว้างของบ่ารับแผ่นเกรตติ้ง จะต้องบวกเพิ่มข้างละ 3-5mm. รวม2ข้างเป็น 6-10mm.
Ex-1 กรณีใช้ตะแกรง กว้าง 25cm. จะต้องเตรียมบ่ารับเผื่อไว้ = 25.5-26.0 cm.
Ex-2 กรณีใช้ตะแกรง กว้าง 30cm. จะต้องเตรียมบ่ารับเผื่อไว้ = 30.5-31.0 cm.
How to install the drainage grille should be designed to accommodate the width and height of the sieve plate. For strength and safety of use. The installation of the drainage grille must be designed to accommodate the wide and high fit to the drainage grille. By standard Steel and plastic grids are2widths, 25cm wide and 30cm wide. Therefore, the sieve grille (L shape) will requireasteel frame to place before pouring the concrete. The height is 25-30mm (depending on the type of grate) so that the grille is always down to the floor. Do not stumble atawheelchair or walk through. The width of the shoulder when measured must be left for 5-10mm.
The width of the shoulder to get the grating. Must be added 3-5mm each side.2sides are 6-10mm.
Ex-1 fora25cm wide grate. Should be prepared forashoulder = 25.5-26.0 cm.
Ex-2 witha30cm wide grate. Must be prepared forashoulder = 30.5-31.0 cm.
ตารางการออกแบบ ตรวจสอบ การสั่งตัดให้ปิดขอบพอดี ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส FRP Grating Cutting Design for 4-Sides-Close-End
ตะแกรง FRP สามารถสั่งตัดได้ทุกขนาด จากแผ่นใหญ่มาตรฐาน 1.5×4 เมตร หลังการตัดถ้าไม่ออกแบบให้พอดีจะทำให้เกิดเป็นรอยแง่งที่ไม่ลงตัว ลักษณะเหมือนการเปิดขอบ ดังนั้นถ้าหากต้องการให้ปิดขอบพอดี จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับตารางการปิดขอบก่อนสั่งตัด
FRP grating can be cut to any size. From the large sheet of standard 1.5×4 meters after cutting, if not designed to causeafractious irregularity. Like opening the edge. So if you want to close the edges. Compared with the cutting table before cutting.
***** คำแนะนำหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อจากบริษัท
Ready Stock Sales Wareshouse of FRP grating & Hotdip Galvanized Bar Steel Grating สต๊อคพร้อมส่ง ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูป ขนาด 25×100ซม. และ 30×100ซม.
ตะแกรงระบายน้ำขนาด 25×100ซม. และ 30×100ซม. ถือเป็นขนาดมาตรฐาน ที่ทางบริษัทฯมีสต๊อคพร้อมให้ลูกค้ารับสินค้าได้ทันทีโดยไม่ต้องรอผลิต นอกเหนือจากตะแกรงเหล็กเชื่อมชุบกันสนิม Hot Dip Galvanized Steel Grating ลูกค้ายังสามารถเลือกประเภทวัสดุของตะแกรงระบายน้ำได้อีกหลากหลายแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานในแต่ละพื้นที่ เช่น ตะแกรงน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ ABS Overflow Swimming Grating, ตะแกรงพลาสติคพีพีชนิดแข็งเหนียวพิเศษ PP Polypropylene Grating และ ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส FRP FibreGlass Grating เราเป็นบริษัทผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะงานตะแกรงระบายน้ำมาตรฐานสำเร็จรูปทุกประเภท ประกอบไปด้วย เหล็กบันไดกันลื่น ราวกันตก ตะแกรงระบายน้ำ ตะแกรงทางเดิน ฝาท่อระบายน้ำ เหมาะสำหรับห้องครัว โรงอาหาร โรงงาน ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด สระว่ายน้ำ บ่อเลี้ยงปลา ทางเดินยกระดับในสนาม ฯลฯ
25×100 cm and 30×100 cm drainage baskets are standard sizes. The company has stock available to customers to receive the goods immediately without waiting for production. In addition to hot dipped galvanized steel gratings, customers can also select different types of drainage grids. It is suitable for use in areas such as Overflow Swimming Grating, PVC Overlay Swimming Grating, PP Polypropylene Grating and FRP FibreGlass Grating. Manufacturers who specialize in all types of standard drainage grilles include steel ladder, anti-slip rails, drainage. Grille Drain hose Suitable for kitchen, cafeteria, factory, department store, bazaar, swimming pool, fish pond, raised walkway, etc.
วิธีการตัดเกรตติ้งตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส / Frp Grating Cutting Method YouTube-VDO
FRP Grating Cutting วิธีการตัดโดยเครื่องตัดไฟเบอร์ #1
FRP Grating Cutting Method ตัดโดยเลื่อยวงเดือนใช้ใบตัดเพชร #2
FRP Grating Measuring Process วิธีวัดชิ้นงานและการตัด #3
FRP FibreGlass Grating Test Certificates ผลทดสอบ การรับแรง การทนสารเคมี ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง
CHANCON provides consultation and complete know-how for Technical Solutions that match your site conditions, upon request.
FiberGlass Grating Loading Data Sheet
ความสามารถในการรับน้ำหนักของตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส ***** ความสามารถในการรับแรงของตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส ขึ้นอยู่กับ 1) หน้ากว้างของตะแกรงยิ่งกว้างมากยิ่งรับแรงได้น้อย 2)ความหนาของแผ่นตะแกรง การเลือกใช้ตะแกรงที่หนามากขึ้นก็จะรับแรงได้มากขึ้น 3)รูปแบบของแรงกด เป็นแบบกระจายน้ำหนักหรือเป็นแบบกดที่จุดเดียว ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อจากบริษัท
***** The strength of the fiberglass grating depends on: 1) The width of the grate is wider, the less the force. 2) Thickness of grate plate Choosingathicker sieve will give you more strength. 3) Form of pressure It isaweight distribution orasingle point press. For more information please contact us.
FRP Molded Grating Chemical Resistance Guide
***** สารเคมีที่สามารถทนการกัดกร่อนได้ในตารางที่แสดงนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น สารเคมีอื่นๆ กรุณาขอข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทได้โดยตรง
***** Corrosion-resistant chemicals in the table shown here are only some of the other chemicals. Please ask for more information directly from the company.
Manhole Cover Test Certificate
Material FRP FibreGlass Comparison / เปรียบเทียบคุณสมบัติวัสดุไฟเบอร์กล๊าส เหล็กหล่อเหนียว พลาสติค
Manhole Cover with Frame Installation Method
วิธีการบำรุงรักษา ยกเปิดปิด ฝาบ่อปิดท่อพักระบายน้ำ
How to open-close Manhole Cover with Frame
1. No recover value: It will solve steal problem thoroughly since no value for recycle Good wear and corrosion resistance: It will never rusts because it has good wear and corrosion resistance
2. Long service life: It can be used more than 30 years and there is no any crack in the experiment of 2,000,000 fatigue shocks Well sealed: It can be used hermetically, and effectively prevent those poisonous gases leaking out from cesspool
3. Light weight high tensile for easy installation High load capacity: Its high load capacity exceeds the ductile iron and insulation
4. Free Design: It can be designed according to users’s demands. Including color, pattern, specification No any jangle: There is neither nor rebound when cars pass through
5. Made to order for any sizes and your own Logo are optional Competitive Price as compare to ductile iron material
คุณสมบัติ ที่มา ความหมายของไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง GFRP FiberGlass Vinyl Resin Food Grade
ไฟเบอร์กล๊าสคืออะไร | FibreGlass Definition
ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส เป็นคำแปลมาจากคำว่า Fiberglass Reinforced Plastic หรือ Glass Reinforced Composite หรือผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใส่วัสดุอื่นเพื่อเสริมความแข็งแรง (มีวัสดุมากกว่า2ชนิดมาประสานกัน) วัสดุที่นำมาเสริมแรงให้พลาสติกคือ “ใยแก้ว” ซึ่งมีลักษณะอ่อนนุ่มแต่เหนียว ทนความร้อนได้สูง ส่วนพลาสติกที่นำมาใช้เป็นเนื้อ ต้องเป็นชนิดที่มีความแข็งมาก ซึ่งถ้าไม่มีการเสริมแรงแล้วจะเปราะ ดังนั้นเราจึงเลือกเอาพลาสติกประเภท โพลิเอสเทอร์เรซิ่น ไวนิลเอสเทอร์เรซิ่น และอีพอกซี่เรซิ่น พลาสติกจำพวกนี้เป็นพลาสติกเหลวซึ่งภายหลังจากการผสมกับ ตัวช่วยเร่งปฏิกิริยา หรือ ตัวทำให้แข็ง แล้วจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมี มีความร้อนเกิดขึ้นสูงกว่า100?C. แล้วจะเปลี่ยนเป็นพลาสติกแข็งและจะไม่คืนรูปอีกซึ่งเรียกว่ากระบวนการ เทอร์โมเซ็ตติ้ง(Thermoseting)
ดังนั้นการสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาโดยวิธีการดังกล่าวแล้ว จึงเรียกได้ว่าเป็น ผลิตภัณฑ์พลาสติกเสริมแรง ด้วยใยแก้ว หรือ FRP ซึ่งเราเรียกง่ายๆ ว่า ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส หรือ ผลิตภัณฑ์เอฟอาร์พี
ไฟเบอร์กลาสหรือเส้นใยแก้วแบ่งได้เป็นสองประเภทตามลักษณะของเส้นใย คือเส้นใยต่อเนื่องคล้ายกับเส้นด้าย (ดังรูป 1) ที่สามารถนำมาถักทอให้เป็นผืนผ้า (fiberglass fabric) (ดังรูป 2) ผ้าที่ได้จะไม่ดูดซึมน้ำ ไม่หดตัว ป้องกันความร้อนได้ดี ส่วนมากจะนำไปใช้ในด้านอุตสาหกรรม เช่น ทำเป็นผ้าม่านกันสะเก็ดไฟ ส่วนเส้นใยแก้วอีกประเภทหนึ่งจะเป็นเส้นใยที่สั้นไม่ต่อเนื่อง มักนำมาใช้ทำเป็นฉนวนกันความร้อน และ ฉนวนกันเสียง ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นหนานุ่ม (ดังรูป 3)
ส่วนผสมหลักที่ใช้ผลิตเส้นใยแก้วคือ ทรายแก้ว (silica sand) ใช้เป็นสารสร้างแก้ว โซดาแอช (soda ash)และ หินปูน (limestone) สารสองอย่างหลังจะช่วยลดจุดหลอมเหลว นอกจากส่วนผสมหลักทั้งสามแล้วอาจมีส่วนผสมอื่นๆที่ใช้เพื่อปรับปรุงสมบัติต่างๆของเส้นใยแก้วเช่น บอแรกซ์ (borax) ฟันหินม้า (feldspar) แคลไซน์อะลูมินา (calcined alumina) แมกนีไซต์ (magnesite) เนฟฟีลีนไซยาไนต์ (nepheline syenite) และ ดินขาวเคโอลิน (kaolin clay)
Definition of polyester resin
any of various synthetic resins or plastics consisting of or made from polyesters: such asaresin that has the same chemical composition as the common polyester fiber but that is extruded asafilm (as for use in packaging, as electrical insulation, or asabase for magnetic recording tapes) c :athermosetting resin that is made from an unsaturated polyester (as one formed fromaglycol and maleic acid or fumaric acid), cured by copolymerization (as with styrene), and often reinforced with fillers (as glass fibers) and that is used chiefly in impregnating and laminating and in making cast and molded products
For the thermal insulation material sometimes called fiberglass, see glass wool. For the glass fiber itself, also sometimes called fiberglass, see glass fiber. For similar composite materials in which the reinforcement fiber is carbon fibers, see carbon-fiber-reinforced polymer. Fiberglass (or fibreglass) isatype of fiber-reinforced plastic where the reinforcement fiber is specifically glass fiber. The glass fiber may be randomly arranged, flattened intoasheet (calledachopped strand mat), or woven intoafabric. The plastic matrix may beathermosetting plastic – most often epoxy, polyester resin – or vinylester, orathermoplastic.
The glass fibers are made of various types of glass depending upon the fiberglass use. These glasses all contain silica or silicate, with varying amounts of oxides of calcium, magnesium, and sometimes boron. To be used in fiberglass, glass fibers have to be made with very low levels of defects.
Fiberglass isastrong lightweight material and is used for many products. Although it is not as strong and stiff as composites based on carbon fiber, it is less brittle, and its raw materials are much cheaper. Its bulk strength and weight are also better than many metals, and it can be more readily molded into complex shapes. Applications of fiberglass include aircraft, boats, automobiles, bath tubs and enclosures, swimming pools, hot tubs, septic tanks, water tanks, roofing, pipes, cladding, casts, surfboards, and external door skins.
Other common names for fiberglass are glass-reinforced plastic (GRP), glass-fiber reinforced plastic (GFRP) or GFK (from German: Glasfaserverst?rkter Kunststoff). Because glass fiber itself is sometimes referred to as “fiberglass”, the composite is also called “fiberglass reinforced plastic.” This article will adopt the convention that “fiberglass” refers to the complete glass fiber reinforced composite material, rather than only to the glass fiber within it.
ที่มาเกี่ยวกับไฟเบอร์กลาส | History of FRP FibreGlass
บางคนรู้จัก”ไฟเบอร์กลาส”ว่าเป็นวัสดุผสม หรือพลาสติกเสริมแรง ใช้ผลิตเป็นหลังคา รถกระบะ หรืออ่างอาบน้ำ แต่แท้จริงแล้ว “ไฟเบอร์กลาส” ก็คือ “เส้นใยแก้ว” มีความหมาย ที่แปลตรงตัว เส้นใยแก้วถูกนำไปใช้เป็นวัสดุช่วยเสริมแรงให้กับพลาสติกเรซิน และขึ้นรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น หลังคารถกระบะ อ่างอาบน้ำ เรือ ชิ้นส่วนเครื่องบินเล็ก ถังน้ำขนาด ใหญ่ ชิ้นส่วนรถแข่ง ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว(Glass Reinforced Concrete, GRC) เป็นต้น นอกจากสมบัติความแข็งแรง ทนแรงดึงได้สูงมากแล้ว เส้นใยแก้วยังมีสมบัติด้าน การเป็นฉนวนความร้อน ถูกใช้เป็นฉนวนในเตา ตู้เย็น หรือวัสดุก่อสร้าง นอกจากนั้น เส้นใยแก้วสามารถทอเป็นผืนผ้า เย็บเป็นชิ้น และด้วยโครงสร้างที่ทำให้ ผลิตภัณฑ์ทำจาก เส้นใยแก้วมีช่องว่างภายใน ที่ถูกดักเก็บไว้ทำให้มีความสามารถในการป้องกันความร้อนได้ดี เหมาะที่จะทำผ้าหนุนด้านใน เพื่อเป็นฉนวนที่ดีเช่นเดียวกับที่ใช้กับตู้เย็นหรือเสื้อหนาว ผ้าจากเส้นใยแก้วไม่มีการดูดซึมน้ำ ใช้เป็นผ้ากันน้ำ ไม่เกิดการหดตัวและไม่เกิดผลเสีย จากน้ำ
เส้นใยแก้วมีขนาดและความยาวหลากหลายขนาด เส้นใยอาจยาวเหมือนเส้นด้าย ยาวมากไปจนถึงเส้นใยที่สั้นมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เส้นใยแก้วผลิตจากส่วนประกอบ ของทรายแก้ว หินปูน หินฟันม้า เติมกรดบอริกและสารเติมแต่งอื่นๆ ถูกหลอมเหลวภายใน เตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิสูงมากถึง 1370 องศาเซลเซียส ซึ่งหากมีการควบคุมคุณภาพส่วนผสม เป็นอย่างดี ให้มีความบริสุทธิ์ ก็ไม่จำเป็นต้องทำให้เป็นลูกแก้วเพื่อคัดเลือกลูกแก้วที่ดี มาหลอมเป็นน้ำแก้วใหม่อีกครั้ง หลังจากนั้น จะเข้าสู่กระบวนการรีดเป็นเส้นใยยาว โดยเส้นใยถูกดึงออกจากหัวรีด และถูกม้วนเก็บด้วยความเร็วที่สูงกว่าความเร็วของใยแก้ว ที่ถูกอัดออกจากหัวรีด ซึ่งเท่ากับเป็นการยืดดึงในขณะที่เส้นใยยังอ่อนตัว ได้เส้นใยขนาด เล็กลงก่อนการแข็งตัว เส้นใยยาวนี้มักนิยมใช้ทำผ้าม่าน หากต้องการทำเป็นเส้นใยสั้น ก็จะถูกตัดด้วยแรงลมให้มีความยาวแตกต่างกันออกไป ซึ่งนิยมนำไปทำผลิตภัณฑ์เทปหรือผ้า ในงานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันเสียง อุณหภูมิและไฟ
“ไฟเบอร์กลาส” ในภาษาของวัสดุเสริมแรงที่รู้จักทั่วไป ในการทำหลังคารถกระบะ หรือชิ้นส่วนที่ต้องการความแข็งแรงนั้น ผลิตจากการนำชิ้นส่วนต้นแบบมาขัดผิวด้านนอกด้วย ขี้ผึ้งถอดแบบ วางผ้าใยแก้วบนชิ้นส่วนต้นแบบ ทาด้วยเรซินที่ผสมตัวทำให้แข็งให้มีความหนา ตามต้องการ เมื่อเรซินแข็งตัวแล้วดึงชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาสออกจากชิ้นส่วนต้นแบบ นำมาขัด แต่งผิวด้านนอกให้เรียบร้อย การสร้างชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาสจากวิธีนี้จะขาดรายละเอียดและ ความสวยงาม แตกต่างจากวิธีที่ใช้แม่พิมพ์ ซึ่งเหมาะสำหรับชิ้นส่วนจำนวนมาก แต่มีขั้นตอน ยุ่งยากกว่าวิธีแรก โดยเราต้องสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาจากชิ้นส่วนต้นแบบเสียก่อน เมื่อได้แม่พิมพ์ แล้วจึงนำมาสร้างชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาสที่ต้องการ ชิ้นส่วนที่สร้างขึ้นมามีความสวยงามเหมือนกับ ต้นแบบทุกประการ และสามารถเสริมความแข็งแรงในบริเวณที่ต้องการโดยเพิ่มความหนา ของใยแก้วหลายๆ ชั้น
ไฟเบอร์กลาสผลิตขึ้นจากสารเคมีและวัสดุหลายชนิด ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ดวงตา ผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ดังนั้น จึงควรระมัดระวังและใส่อุปกรณ์ป้องกัน ในขณะที่ทำ ชิ้นส่วนจากไฟเบอร์กลาส
Glass fibers have been produced for centuries, but mass production of glass strands was accidentally discovered in 1932 when Games Slayter,aresearcher at Owens-Illinois, directedajet of compressed air atastream of molten glass and produced fibers. A patent for this method of producing glass wool was first applied for in 1933.Owens joined with the Corning company in 1935 and the method was adapted by Owens Corning to produce its patented “fibreglas” (one “s”) in 1936. Originally, fibreglas wasaglass wool with fibers entrappingagreat deal of gas, making it useful as an insulator, especially at high temperatures.
A suitable resin for combining the “fibreglass” withaplastic to produceacomposite material was developed in 1936 by du Pont. The first ancestor of modern polyester resins is Cyanamid’s resin of 1942. Peroxide curing systems were used by then. With the combination of fiberglass and resin the gas content of the material was replaced by plastic. This reduced the insulation properties to values typical of the plastic, but now for the first time the composite showed great strength and promise asastructural and building material. Confusingly, many glass fiber composites continued to be called “fiberglass” (asageneric name) and the name was also used for the low-density glass wool product containing gas instead of plastic.
Ray Greene of Owens Corning is credited with producing the first composite boat in 1937, but did not proceed further at the time due to the brittle nature of the plastic used. In 1939 Russia was reported to have constructedapassenger boat of plastic materials, and the United Statesafuselage and wings of an aircraft. The first car to haveafiber-glass body wasa1946 prototype of the Stout Scarab, but the model did not enter production.
ขั้นตอนการผลิตไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง Fiber Glass
นำส่วนผสมทั้งหมดหลอมในเตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิสูงมากถึง 1370 องศาเซลเซียสเพื่อให้ได้น้ำแก้ว จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการรีดเป็นเส้นใยยาวโดยเส้นใยจะถูกดึงออกจากหัวรีดและถูกม้วนเก็บด้วยความเร็วที่สูงกว่าความเร็วของใยแก้วที่ถูกอัดออกจากหัวรีด ซึ่งเท่ากับเป็นการยืดดึงในขณะที่เส้นใยยังอ่อนตัวทำให้ได้เส้นใยขนาดเล็กลงก่อนการแข็งตัว หากต้องการทำเป็นเส้นใยสั้นก็ทำได้โดยการตัดด้วยแรงลม สามารถทำให้เส้นใยมีความยาวแตกต่างกันออกไป
อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการหลอม ถ้าหากไม่มีการควบคุมคุณภาพของส่วนผสมให้บริสุทธิ์แล้วก็จำเป็นต้องหลอมและทำน้ำแก้วให้เป็นลูกแก้วก่อนเพื่อคัดลูกแก้วที่บริสุทธิ์มาหลอมให้เป็นน้ำแก้วใหม่อีกครั้ง แต่ถ้าหากมีการควบคุมคุณภาพของส่วนผสมแล้ว ก็สามารถรีดเส้นใยจากน้ำแก้วในเตาได้เลย
ส่วน”ไฟเบอร์กลาส”ในความหมายของวัสดุเสริมแรงนั้น ผลิตได้สองวิธี คือ วิธีแรกนำชิ้นส่วนต้นแบบมาขัดผิวด้านนอกด้วยขี้ผึ้งถอดแบบ วางผ้าใยแก้วบนชิ้นส่วนต้นแบบ ทาด้วยเรซินที่ผสมตัวทำให้แข็งให้มีความหนาตามต้องการ เมื่อเรซินแข็งตัวแล้วดึงชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาสออกจากชิ้นส่วนต้นแบบ นำมาขัดแต่งผิวด้านนอกให้เรียบร้อย การสร้างชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาสด้วยวิธีนี้จะขาดรายละเอียดและความสวยงามแตกต่างจากวิธีที่สองที่ใช้แม่พิมพ์ วิธีนี้จะเหมาะสำหรับชิ้นส่วนจำนวนมาก แต่มีขั้นตอนยุ่งยากกว่าวิธีแรก โดยเราต้องสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาจากชิ้นส่วนต้นแบบเสียก่อน เมื่อได้แม่พิมพ์ แล้วจึงนำมาสร้างชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาสที่ต้องการ ชิ้นส่วนที่สร้างขึ้นมามีความสวยงามเหมือนกับต้นแบบทุกประการ และสามารถเสริมความแข็งแรงในบริเวณที่ต้องการโดยเพิ่มความหนาของใยแก้วหลายๆ ชั้น
The process of manufacturing fiberglass is called pultrusion. The manufacturing process for glass fibers suitable for reinforcement uses large furnaces to gradually melt the silica sand, limestone, kaolin clay, fluorspar, colemanite, dolomite and other minerals to liquid form. It is then extruded through bushings, which are bundles of very small orifices (typically 5–25 micrometres in diameter for E-Glass,9micrometres for S-Glass). These filaments are then sized (coated) withachemical solution. The individual filaments are now bundled in large numbers to providearoving. The diameter of the filaments, and the number of filaments in the roving, determine its weight, typically expressed in one of two measurement systems: yield, or yards per pound (the number of yards of fiber in one pound of material; thusasmaller number meansaheavier roving). Examples of standard yields are 225yield, 450yield, 675yield. tex, or grams per km (how many grams 1 km of roving weighs, inverted from yield; thusasmaller number meansalighter roving). Examples of standard tex are 750tex, 1100tex, 2200tex.
These rovings are then either used directly inacomposite application such as pultrusion, filament winding (pipe), gun roving (where an automated gun chops the glass into short lengths and drops it intoajet of resin, projected onto the surface ofamold), or in an intermediary step, to manufacture fabrics such as chopped strand mat (CSM) (made of randomly oriented small cut lengths of fiber all bonded together), woven fabrics, knit fabrics or uni-directional fabrics. Chopped strand mat
Chopped strand mat or CSM isaform of reinforcement used in fiberglass. It consists of glass fibers laid randomly across each other and held together byabinder.
It is typically processed using the hand lay-up technique, where sheets of material are placed inamold and brushed with resin. Because the binder dissolves in resin, the material easily conforms to different shapes when wetted out. After the resin cures, the hardened product can be taken from the mold and finished. Using chopped strand mat givesafiberglass with isotropic in-plane material properties.
Grating Know-How ดูข้อมูลเพิ่มเติม www.GratingThai.com
Grating Know-How ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.com
1. Corrosion Resistance:ไม่เป็นสนิม และทนต่อการกัดกร่อน
2. Temperature Resistance:ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสทนความร้อนได้ดีมาก สามารถทนอุณหภูมิตั้งแต่ -30ถึง +120 ขึ้นอยู่กับชนิดของเรซิ่นที่เลือกใช้
3. Lightweight:น้ำหนัก เบาประหยัดค่าก่อสร้าง ด้วยน้ำหนักที่เบากว่าเหล็กถึง4เท่า ทำให้สะดวกต่อการยก ประกอบและติดตั้ง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
4. Flextural Strength:โครงสร้างแข็งแรงให้ตัวได้ ป้องกันการรั่วซึมหรือร้าว
5. Long-lasting:ไม่เน่าเปื่อยหรือผุกร่อนทนทุกสภาวะสิ่งแวดล้อมคงรูปเดิมได้ดี ไม่มีการหด
6. Low coefficient of friction:ผิวเรียบเนียนทำให้แรงเสียดทานต่ำ
8. Repair:ในกรณีสุดวิสัย เมื่อเกิดการชำรุดเสียหายสามารถซ่อมได้
9. Engineering Design:การออกแบบและคำนวณตามมาตรฐานของASTM ,JIS,BSและDIN
10. UV-Resistance and Grossy:สีสวยสดใส ทนต่อแสงแดดและแสงยูวี
An individual structural glass fiber is both stiff and strong in tension and compression—that is, along its axis. Although it might be assumed that the fiber is weak in compression, it is actually only the long aspect ratio of the fiber which makes it seem so; i.e., becauseatypical fiber is long and narrow, it buckles easily. On the other hand, the glass fiber is weak in shear—that is, across its axis. Therefore, ifacollection of fibers can be arranged permanently inapreferred direction withinamaterial, and if they can be prevented from buckling in compression, the material will be preferentially strong in that direction.
Furthermore, by laying multiple layers of fiber on top of one another, with each layer oriented in various preferred directions, the material’s overall stiffness and strength can be efficiently controlled. In fiberglass, it is the plastic matrix which permanently constrains the structural glass fibers to directions chosen by the designer. With chopped strand mat, this directionality is essentially an entire two dimensional plane; with woven fabrics or unidirectional layers, directionality of stiffness and strength can be more precisely controlled within the plane.
A fiberglass component is typically ofathin “shell” construction, sometimes filled on the inside with structural foam, as in the case of surfboards. The component may be of nearly arbitrary shape, limited only by the complexity and tolerances of the mold used for manufacturing the shell.
The mechanical functionality of materials is heavily relied on the combined performances of both the resin (AKA matrix) and fibres. For example, in severe temperature condition (over 180 ?C) resin component of the composite may lose its functionality partially because of bond deterioration of resin and fibre. However, GFRPs can show still significant residual strength after experiencing high temperature (200 ?C).
Grating Know-How ดูข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon
Molded Fiberglass Grating เกรตติ้งตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส
Our molded fiberglass grating and pultruded fiberglass grating provide unmatched corrosion resistance properties, especially when compared to steel flooring products. Strength, long life and safety are also superior qualities of our fiberglass grating products, and their electrically non-conductive properties make them the ideal option for floor grating. We offer many types of fiberglass grating for all your different loading applications. Fiberglass grating applications range from architectural sun screening and fiberglass flooring to standard walkways and high load rolling applications. Grit surfaces and standard stock colors or custom colors are provided to suit your fiberglass application. Choose from our custom resin types forafiberglass flooring product that is tailored to suit your corrosion resistance needs.
Molded fiberglass grating isafiberglass-reinforced plastic (FRP) that combines fiberglass rovings with thermosetting resins to formastrong, one-piece molded panel. A 65%/35% resin to glass weight ratio provides high corrosion resistance. Meniscus surfaces or applied grit surfaces provide slip resistance when compared to steel flooring and other flooring products. This fiberglass grating product is better suited for corrosive environments. Pultruded Pultruded Fiberglass Grating
Pultruded fiberglass grating is made using premium grade isophthalic polyester, vinyl ester or phenolic resin systems withasynthetic surfacing veil, making it corrosion resistant, lightweight and durable. Pultruded fiberglass hasagrit surface for safety andagreater strength to weight ratio than molded fiberglass grating. A 35%/65% resin to glass ratio provides greater strength and less corrosion resistance than molded fiberglass grating. This product is better suited for longer spans of fiberglass flooring.
Fiberglass Covered Grating Our fiberglass covered grating isalong-lasting, molded fiberglass flooring product that combines smooth, gritted or checker plate and molded grating manufactured with any of our resin systems. It is the ideal choice when floor grating needs to be 100% covered. Our fiberglass covered grating is often used in loading and storage areas with high foot and cart traffic, whereastrong, level surface is ideal. It offers approximately 50% higher stiffness values than that of open mesh grating and its standard grit-top cover assures secure footing.
Bullet Resistant Fiberglass Plate Our bullet resistant fiberglass plate offers superior ballistic resistance ataweight less than 25% that ofacomparable steel panel. Now available for commercial security fiberglass applications for your business, home or governmental facility, these fiberglass panels offer ballistic resistant security with the additional performance advantages of durability, corrosion resistance, electrical non-conductivity, low thermal conductivity and light weight.
Heavy Duty Fiberglass Grating Our heavy duty fiberglass grating is available in both molded and pultruded grating systems. Both types of heavy duty fiberglass grating are designed to carry forklift and tractor-trailer loads that traditional molded and pultruded FRP grating products are not designed to support. Heavy duty fiberglass grating provides greater durability for higher volume traffic areas as well. Additionally, Heavy Duty Fiberglass Grating can be used to free span longer distances than traditional fiberglass grating.
Fiberglass Stair Treads and Fiberglass Stair Tread Covers Lightweight and easy to install, fiberglass stair treads are available in both molded and pultruded types to match the fiberglass floor grating platforms. Fiberglass stair tread covers are made fromamolded glass and resin system that is corrosion and impact resistant, fire retardant and non-conductive. They provideacost effective, slip-resistant protective surface for concrete, metal and wood steps.
Fiberglass Grating Handrails and Fiberglass Ladders Fiberglass Grating Handrails and Fiberglass Ladders Fiberglass handrail systems are fabricated from pultruded fiberglass components and molded thermoplastic connectors. Our modular fiberglass grating handrail systems are available in 2-inch square or 2-inch round configurations that are easy to grip, making them ideal for any high traffic area. Our fiberglass ladders and cages can be installed inavariety of applications from sump pumps to tanks, buildings, piers, portable equipment, etc., providing years of strength and dependability.
Fiberglass Attachments and Fiberglass Clips Our fiberglass grating attachments and clips are specially designed to secure fiberglass grating or plates to the supporting structures. Additionally, they are used to fasten together adjacent grating panels, which minimizes load-induced differential deflection. All fiberglass attachments and clips are made of Type 316 stainless steel and are available in 1-, 1-1/2- and 2-inch sizes.
Fiberglass plates featureanon-conductive surface that makes them an economical and safe solution to walking surfaces. In caustic and/or acidic conditions, fiberglass plates providealevel of corrosion resistance that is unequaled and more cost effective than stainless steel. Fiberglass plate is available withanon-grit surface or withagrit surface where anti-slip traction is needed.
Fiberglass Structural Shapes Our fiberglass structural shapes and pultruded fiberglass profiles are made fromacombination of fiberglass and thermosetting resin systems. All shapes are lightweight, impact resistant, low maintenance, non-magnetic, low conductive and have dimensional stability, making them easy to install and ideal for several applications. Custom shapes are available upon request.
Composite (GFRP) Gratings : What is GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic)? GFRP isacomposite material made ofapolymer matrix reinforced with fiber, aiming to form better physical and chemical properties. GFRP isaproduction material such as metal, wood, glass, concrete. GFRP materials has important advantages as against other production materials, new features can be acquired according to requirements. What is GFRP Grating? Molded GFRP gratings are produced in special molds with wet lamination process, consist of glass fiber, resin, additives and pigment. After these raw materials harden, GFRP gratings are pressed out of the mold. Molded GFRP gratings are light, anti-corrosive, have high chemical and physical resistances and electrically non-conductive. Components: Resin, glass fiber, additives and pigment are the basic components of the GFRP materials. It can be produced any material which are proper for the requirements by changing these components. Resin: Chemical resistance, flexibility and UV resistance of the GFRP gratings are determined by the resin. Resins are chose according to the environment; orthophthalic resin for general usage, isophthalic resin for chemical environment and vinyl ester resin for extremely heavy chemical environment. Glass Fiber: Multi-layered continuous glass fibers are used in production. Molded GFRP gratings have high mechanical resistance due to glass fiber. Additives: Additives such as UV stabilizers, flame retardants and low smoke density retardants increase mechanical and chemical resistance and add new superior features. Pigment: Pigments make it possible to give the GFRP gratings any color. This makes it happen to use GFRP gratings in architectural projects.
Molded Grating Pedestals Fibergrate Adjustable Grating Pedestals are high quality components designed to support elevated grating applications. Infinitely adjustable within their specified range, standard pedestals raise grating platforms and custom pedestals with cross bracing can raise floors above the base elevation. Pedestals are available for 1″, 1-1/2″ and 2″ deep square mesh Fibergrate or Chemgrate molded fiberglass gratings. Pedestal heads are stocked in “single head” and “quad head” designs facilitating quick, safe and economical installation of elevated platforms. • ADJUSTABLE – Create level walking surfaces on sloping floors • VERSATILE – Available for all Fibergrate and Chemgrate square mesh gratings • COST EFFECTIVE – Low installation cost, easily relocated to other areas • LIGHTWEIGHT – Modular, adjustable components are lightweight and reduce lifting • CORROSION RESISTANT – Thermoplastic polyester and pultruded vinyl ester are resistant to most industrial wet-floor applications
Grating Pedestal Supports Fibreglass Grating ? Grating Pedestal Supports From time to time, FRP grating will need to be supported in walkway areas where using traditional support and framing methods either cannot be used or are unsuitable to the working environment. Areas, such as, Chemical bunds, Raised floor platforms & work stations, Chemical Treatment Dosing Plant Rooms, Raised non slip walkway access across drainage floors and work spaces, Suspended floor grating, cable ladder runs, concealing pipe work and electrical services underneath, Areas required to be non conductive. our FRPP pedestal supports that can raise our FRP floor grating, and link into the mesh pattern of our grating. The panels of our grating can be joined, on the one pedestal eliminating multiple pedestals in the same area. The wide based pedestals can be fixed to the floor if required, and also to the top of our grating, using our 316 s/s hold down clips to suit. This provides an extremely solid base, which can take high loads. Available inarange of heights, and completely adjustable to accommodate uneven floors, we can supplyapedestal to suit your application.
FRP Stair Solutions – Stair Treads Fiberglass stair treads and stair covers are an essential complement to molded and pultruded grating installations. These corrosion and slip resistant treads are manufactured withadefined visible nosing and provide safe footing in the most challenging environments. Stair treads and covers can be supplied cut to precise customer specified sizes or in stock panels that are easily field fabricated.
stair tread covers areaconvenient way to provide solid slip-resistant footing for existing treads that are still structurally sound. Stair tread covers may be installed over wood, concrete or metal treads. Standard industrial color is dark gray withahighly visible safety yellow nosing and light gray for architectural applications. An integral aluminum oxide grit-top surface provides secure footing for maximum safety andahighly durable tread. Reinforced withawoven glass mat for durability and impact resistance, these tread covers come in made to order widths. The standard thickness is various thick covers available for heavy duty applications. Standard long panels are easily cut to size during installation, or are available precut to custom lengths.
Phosphorescent Nosing :Fiber plate stair tread covers can be ordered withaspecial phosphorescent coating for the nosing area, causing it to glow even after the primary light source has been removed. The special nosing is perfect in stairways which serve as emergency exits during power outages, outdoor accessways where lighting is periodically dimmed as in arenas and concert halls or asasafety measure for nighttime operation in outdoor applications such as on passenger ships. This special nosing has been tested in accordance with ISO/TC Ships and Marine Technology – Low Location Lighting on Passenger Ships.
Fibreglass Grating > FRP Tread Covers > Tread Grip Some superior features of TreadGrip are. Durability: TreadGrip isahigh quality composite of glass woven matting impregnated with isophthalic polyester resin. The energy absorption and flexibility of TreadGrip. ensures its long life, even in the busiest of environments. Slip Resistant: A compound of carbon and silicon grit is added in the final layer of laminate providingasuperb slip resistant and hard wearing surface. Corrosion Resistant: TreadGrip is resistant toawide range of chemicals and is perfectly suited for use even in the harshest of environments. Chemical resistance guides available on request. Simple to install: The versatility of TreadGrip. allows it to be applied to almost any surface such as concrete, steel or wood. The fact that it is supplied asafinished product means that it can be walked on straight away thus keeping disruption toaminimum.
supply FRP stair treads in both molded and pultruded grating profiles. Available in isopthalic, vinyl ester and phenolic fire retardant resin systems, to suit both industrial and domestic applications. Molded FRP stair treads come withacontrast nose edge as required by the Australian Standards for stairways to haveacontrasting front edge (nosing) colour for ascending and descending stairs resulting inasafer stairway. Generally our stair treads colours are: Grey with yellow nosing. Other colours are available should you wish to match up with aesthetics and / or the environment. Available in our standard tread panels or we can cut to size, we welcome your enquiry. Our standard treads have an anti slip grit top surface, but we can also supply treads withaconcave top which is also anti slip, but easy to clean, for example, for the food and beverage industry. Our treads are secured to the angle supports underneath using our 316 s/s Type M hold down clips – you can see those in the molded grating index on the “Installation Accessories” page.
If you ownabuilding, runabusiness or manageapublic space that has stairs then you are obliged to ensure that everyone using the stairs is safe. Anti Slip Stair Nosing is an excellent way to ensure that the stairs are as safe as possible. Anti Slip Stair Nosing can reduce the chances of accidents occurring dramatically. The leading edge ofastair can become slippery when wet and even internal stairs can become slippery during rain as people track the water inside. With high quality Edge Grip FRP Anti Slip Stair Nosing from Monaco you can make sure that the leading edge of the stairs are not slippery even in the wettest conditions. These anti slip stair nosings can be fitted in many different situations, including the following, public spaces, commercial areas and industries: Railway stations , Public squares and parks, Milking sheds,Industrial tank stairs,Industrial and commercial sites,Schools,Ski fields,Fire escapes, Oil rigs Ports Our Edge Grip FRP Anti Slip Stair Nosing comes in pre-formed robust fibreglass panels that are incredibly durable and the silicone carbon grit top finish providesahighly slip resistant surface. We offer two slip resistant surfaces, one light grit made for interior situations and the other heavier grit made for exterior uses. Edge Grip FRP Anti Slip Stair Nosing hasapatented featheredge meaning that it can be fitted to virtually every type of step without creatingatrip hazard making it the safest all-round Anti Slip Stair Nosing.
Applications of Fibre Glass Grating ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส
A cryostat made of fiberglass Fiberglass is an immensely versatile material due to its light weight, inherent strength, weather-resistant finish and variety of surface textures.
The development of fiber-reinforced plastic for commercial use was extensively researched in the 1930s. It was of particular interest to the aviation industry. A means of mass production of glass strands was accidentally discovered in 1932 whenaresearcher at Owens-Illinois directedajet of compressed air atastream of molten glass and produced fibers. After Owens merged with the Corning company in 1935, Owens Corning adapted the method to produce its patented “Fiberglas” (one “s”). A suitable resin for combining the “Fiberglas” withaplastic was developed in 1936 by du Pont. The first ancestor of modern polyester resins is Cyanamid’s of 1942. Peroxide curing systems were used by then. During World War II, fiberglass was developed asareplacement for the molded plywood used in aircraft radomes (fiberglass being transparent to microwaves). Its first main civilian application was for the building of boats and sports car bodies, where it gained acceptance in the 1950s. Its use has broadened to the automotive and sport equipment sectors. In production of some products, such as aircraft, carbon fiber is now used instead of fiberglass, which is stronger by volume and weight. Advanced manufacturing techniques such as pre-pregs and fiber rovings extend fiberglass’s applications and the tensile strength possible with fiber-reinforced plastics.
Fiberglass is also used in the telecommunications industry for shrouding antennas, due to its RF permeability and low signal attenuation properties. It may also be used to conceal other equipment where no signal permeability is required, such as equipment cabinets and steel support structures, due to the ease with which it can be molded and painted to blend with existing structures and surfaces. Other uses include sheet-form electrical insulators and structural components commonly found in power-industry products. Because of fiberglass’s light weight and durability, it is often used in protective equipment such as helmets. Many sports use fiberglass protective gear, such as goaltenders’ and catchers’ masks.
Several large fiberglass tanks at an airport Storage tanks can be made of fiberglass with capacities up to about 300 tonnes. Smaller tanks can be made with chopped strand mat cast overathermoplastic inner tank which acts asapreform during construction. Much more reliable tanks are made using woven mat or filament wound fiber, with the fiber orientation at right angles to the hoop stress imposed in the side wall by the contents. Such tanks tend to be used for chemical storage because the plastic liner (often polypropylene) is resistant toawide range of corrosive chemicals. Fiberglass is also used for septic tanks.
Glass-reinforced plastics are also used to produce house building components such as roofing laminate, door surrounds, over-door canopies, window canopies and dormers, chimneys, coping systems, and heads with keystones and sills. The material’s reduced weight and easier handling, compared to wood or metal, allows faster installation. Mass-produced fiberglass brick-effect panels can be used in the construction of composite housing, and can include insulation to reduce heat loss.
1. การสูดผงใยแก้วเข้าไป ควรใช้ผ้าหรือหน้ากากกรองอากาศ ขณะทำงาน
2. ไม่ควรเปิดพัดลมจนเกิดการฟุ้งกระจาย ถ้าจำเป็นต้องเปิดให้อยู่เหนือลม
4. เมื่อมีการเจียร หรือขัดงานไฟเบอร์กลาส ควรใช้แว่นตาสำหรับป้องกันเศษใยแก้ว
5. กรณีที่มีการสัมผัสจนเกิดอาการคันแล้ว ให้ใช้ดินน้ำมันหรือก้อนขี้ผึ้งเตะที่บริเวณคัน หรือใช้สบู่หรือผงซักฟอกฟอกบริเวณที่คัน แล้วใช้แปรงถูและน้ำฉีดแรง ๆ หรืออาจใช้น้ำอุ่นทำให้รูขุมขนขยายตัว
Types of glass fiber used Main article: Glass fiber Composition: the most common types of glass fiber used in fiberglass is E-glass, which is alumino-borosilicate glass with less than 1% w/w alkali oxides, mainly used for glass-reinforced plastics. Other types of glass used are A-glass (Alkali-lime glass with little or no boron oxide), E-CR-glass (Electrical/Chemical Resistance; alumino-lime silicate with less than 1% w/w alkali oxides, with high acid resistance), C-glass (alkali-lime glass with high boron oxide content, used for glass staple fibers and insulation), D-glass (borosilicate glass, named for its low Dielectric constant), R-glass (alumino silicate glass without MgO and CaO with high mechanical requirements as Reinforcement), and S-glass (alumino silicate glass without CaO but with high MgO content with high tensile strength) Naming and use: pure silica (silicon dioxide), when cooled as fused quartz intoaglass with no true melting point, can be used asaglass fiber for fiberglass, but has the drawback that it must be worked at very high temperatures. In order to lower the necessary work temperature, other materials are introduced as “fluxing agents” (i.e., components to lower the melting point). Ordinary A-glass (“A” for “alkali-lime”) or soda lime glass, crushed and ready to be remelted, as so-called cullet glass, was the first type of glass used for fiberglass. E-glass (“E” because of initial Electrical application), is alkali free, and was the first glass formulation used for continuous filament formation. It now makes up most of the fiberglass production in the world, and also is the single largest consumer of boron minerals globally. It is susceptible to chloride ion attack and isapoor choice for marine applications. S-glass (“S” for “stiff”) is used when tensile strength (high modulus) is important, and is thus an important building and aircraft epoxy composite (it is called R-glass, “R” for “reinforcement” in Europe). C-glass (“C” for “chemical resistance”) and T-glass (“T” is for “thermal insulator”—a North American variant of C-glass) are resistant to chemical attack; both are often found in insulation-grades of blown fiberglass. ใยแก้วหรือไฟบอร์กลาสเป็นวัสดุสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการขึ้นรูปงานไฟเบอร์กลาส โดยทั่วไปจะแบ่งประเภทใยแก้วออกเป็นชนิต่างๆตามคุณสมบัติ ดังนี้
1. ชนิด A glass ( Alkali ) ใช้สำหรับงานที่ต้องการทนสารเคมีที่เป็นด่าง
2. ชนิด C glass ( Chemical ) ใช้สำหรับงานที่ต้องการทนสารเคมีที่เป้นกรดและกัดกร่อน
3. ชนิด E glass ( Electrical ป ใช้สำหรับงานที่ต้องการรับแรงและเป็นฉนวนป้องกันไฟฟ้าได้ดี
4. ชนิด S glass ( High Strength ) ใช้สำหรับงานที่ต้องการรับแรงสูงที่สูงกว่าชนิด E glass
1. ใยแก้วชนิดผืนเส้นสั้น ( Chopped strands mat ) เป็นใยแก้วเส้นสั้นยาวประมาณ 1-2 นิ้ว โปรยลงบนผืนแบบ กระจาย เกาะตัวโดยประสานกาว(binder) มีสองแบบคือ
• แบบEmution มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบแน่น เหมาะกับงาน ที่ต้องการ ความเรียบสมำเสมอ ไม่เคลื่อนตัว
• แบบ Powder มีลักษณะเป็นแผ่นเส้นใยทอแบบหลวม เหมาะกับงานที่ต้องเข้าซอก มีมุมและซอกมาก ขนาดเรียกตามน้ำหนักต่อ ตารางเมตร มีขนาด 100 200 300 450 600 และ900 กรัม/ตารางเมตร ใช้กับงานไฟบอร์กลาสทั่วไป
2. ใยแก้วตาสาน ( Woven roving ) เป็นใยแก้วเส้นสั้นทอเป็นผืน เป็นรูปตาสาน มีขนาด 400 600 800 900 1,000 และ 1,200 กรัม/ตารางเมตรช่วยรับแรง เสริมกำลังให้สูงขึ้น ในทิศทางของเส็นใยแก้ว(2 ทิศทาง)
3. ใยแก้วผ้าทอ ( Glass cloth ) เป็นใยแก้วเส้นเหมือนด้ายนำมาทอเป็นผืนผ้า เนื้อแน่น มีขนาด 30 60 90 100 160 200 และ 300 กรัม/ตารางเมตร ช่วยรับแรงกำลังได้ดี สามารถทำชิ้นงานได้บางเบา ใช้เสริมความแข็งแรงบริเวณขอบชิ้นงาน และบริเวณผิวบนและล่างสุดของงาน
4. ใยสานแบบเย็บติด ( Stitch mat ) เป็นใยแก้วแบบผืน chopped strand mat เย็บด้วยเส้นใยโพลีเอสเตอร์ทั้งผืน เวลานำไปใช้งานแล้วใยแก้วจะไม่เคลื่อนตัว ทำให้ได้ชิ้นงานที่รับแรงและกำลังได้สมบูณณ์ขึ้น มีขนาด 300 450 600 และ 900 กรัม/ตารางเมตร
5. ใยแก้วผิว ( Surfacing mat ) เป็นใยแก้วแบบผืนบางเหมือนกระดาษทิชชู มีขนาดน้ำหนัก 20 30 50 กรัม/ตารางเมตร ช่วยยึดเกาะผิวชั้นเจลโค๊ทให้แข็งแรงขึ้น และช่วยลดปริมาณฟองอากาศของชั้นเจลโค๊ทกับใยแก้วได้
6. เทปไฟเบอร์ ( Glass tape ) เป็นเส้นใยแก้วนำมาทอเป็นผืน มีขนาดกว้าง 2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว ไว้ใช้สำหรับเชื่อมรอยต่อระหว่างแผ่นใยแก้ว และเสริมกำลังบริเวณขอบของชิ้นงาน
7. ใยแก้วเส้นด้าย ( Roving ) เป็นเส้นใยแก้วยาวตลอดทั้งม้วน เรียกตามน้ำหนัก/ความยาว 1 กม. เช่น TEX1200 = ความยาว 1 กม. หนัก 1 กก. ที่นิยมใช้มีขนาด 1200 2200 2400 4800 เป็นต้น แบ่งตามลักษณะการใช้งานดังนี้
• แบบพ่น ( spray up roving ) ใช้กับเครื่องพ่นใยแก้วนิยมใช้เบอร์ 2400
• แบบพัน ( filament roving ) ใช้ในการพันท่อทำถังน้ำกับเครื่องพัน นิยมใช้เบอร์ 600 800 1100 2200 2400 4800
• แบบดึง ( pultrution roving ) ใช้ในกระบวนการผลิตแบบดึงยาว นิยมใช้เบอร์ 2400 4800
• แบบSMC ( sheet moulding compound ) ใช้ทำแผ่น SMC นิยมใช้เบอร์ 2400
• แบบ PANEL ( corrugated sheet ) ใช้ทำหลังคาโปร่งแสง นิยมใช้เบอร์ 2400
8. ใยแก้วเส้นสั้น ( Chopped strand ) เป็นเส้นใยแก้วเส้นสั้น ขนาดความยาวเส้น36912 มิลลิเมตร ใช้เพิ่มความแข็งแรงของชิ้นงาน
9. ใยแก้วผง ( Glass powder ) เป็นผงใยแก้วสีขาว ใช้เพิ่มความแข็งแรง ป้องกันการขีดข่วนและแรงกระแทกบนผิวงาน
10. ใยแก้วแบบทิศทางเดียว ( Unidirection mat ) เป็นเส้นใยแก้วเรียงเป็นแถวในแนวเดียวกันตลอดทั้งผืน เย็บติดกันด้วยเส้นด้าย ( polyester yarn ) มีการเรียงเส้น2แบบ คือแบบแนวยาว และแบบแนวขวาง รับแรงและกำลังได้สูงในแนวยาวของเส้นใยแก้ว ทางใดทางหนึ่ง
Grating Know-How ดูข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover
เป็นพลาสติกเหลวชนิดหนึ่ง มีลักษณะค้นคล้ายน้ำมันเครื่อง กลิ่นฉุนแข็งตัวด้วยความร้อนสูง เป็นวัตถุไวไฟชนิดหนึ่ง มีอตราการหดตัว 2-8% หลังเซทตัวเต็มที่ เรซิ่นสามารถหล่อขึ้นรูปได้มากมายหลากหลายรูปแบบ เรซิ่นสำหรับหล่องานทั่วไป หล่อพระ หล่อของที่ระลึก หล่อตุ๊กตาฯลฯ เรซิ่นสำหรับหล่องานไฟเบอร์กลาส และเรซิ่นสำหรับงานเคลือบ เช่น งานเคลือบกรอบรูปวิทยาศาสตร์ ในขณะทำการหล่อ เรซิ่นจะปล่อยกลิ่นเคมีออกมาซึ่งมีกลิ่นเหม็นฉุน ดังนั้นสถานที่ทำงานควรเป็นที่โปร่งอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ควรทำงานในสถานที่ที่เป็นห้องทึบตัน และไม่มีการไหลเวียนของอากาศหรือการระบายอากาศที่ดีพอ
1. เกรด ortho-phthalic type คือชนิดเกรดใช้งานได้ทั่วไป
2. เกรด isophthalic type คือชนิดที่ทนกรด-ด่างได้ดี
3. เกรด bisphenol type คือชนิดที่ทนกรด-ด่างสูง
4. เกรด chlorendics type ชนิดทนดรก-ด่าง สูง
5. เกรด vinyl ester คือชนิดที่ทนกรด-ด่างสูงมาก แข็งแรง มีคุณสมบัติที่เป็นรองแค่ epoxy resin
เรซิ่นแยกตามเนื้อเป็น2แบบ คือ
1. nonpromote คือเรซิ่นชนิดที่ยังไม่ผสมสารช่วยเร่งปฏิกิริยา ลักษณะของเนื้อเรซิ่นจะเป็นของเหลวค้นคล้ายน้ำมัน มีใสใสอมเหลือง จุดเด่นคือมีอายุการเก็บ3เดือน( สำหรับประเทศไทยซึ่งมีอากาศร้อนชื้นควรใช้ให้หมดภายใน 1เดือน เพราะเมื่อเข้าสู่เดือนที่2และ3 เรซิ่นจะเริ่มมีความหนดข้นขึ้นเรื่อยๆ) และยังสามารถประยุกต์สูตรได้อีกมากมาย เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบงานต่างๆ โพลีเอสเทอร์เรซิ่น ชนิด non promote
2. promote คือเรซิ่นชนิดที่ผสมสารช่วยเร่งฯ มาแล้ว ลักษณะของเนื้อเรซิ่นจะเป็นของเหลวค้นคล้ายน้ำมันเครื่อง แต่มีสีชมพูบานเย็นเพราะเป็นเรซิ่นที่ได้ผสมสารช่วยเร่งปฏิกิริยาแล้ว เมื่อนำมาใช้งานก็แค่เติมสารเร่งฯลงไป ในเรื่องของสีเรซิ่นนั้นบางบริษัทผู้ผลิดอาจมีการใช้สารช่วยเร่งที่แตกต่างดังนั้นเรซิ่นชนิดผสมสารช่วยเร่งบางตัวจะมีสีอล้ำคล้ายน้ำเฉาก๊วย และสำหรับชนิดที่ใช้กับงานหล่อใสแล้วเรซิ่นจะมีสี ใสอมน้ำเงินอ่อนๆ จุดเด่นคือใช้งานง่ายและคล่อง ไม่ยุ่งยาก แต่ข้อเสียคือมีอายุการเก็บสั้น อายุการเก็บไม่เกิน2เดือน ในการใช้งานจริงควรใช้ให้หมดภายใน 1 เดือน
Grating Know-How ดูข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/GratingThai
เรซิ่นเป็นพลาสติกหล่อที่มีคุณสมบัติทั้งทางกายภาพ ทางไฟฟ้า และทางเคมี
คุณสมบัติทางกายภาพ มีคุณสมบัติให้เนื้อแข็ง ใส เงา ทนอุณหภูมิสูงดีกว่าพลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติก ( termoplastic ) แต่น้อยกว่าโลหะ เมื่อเสริมแรงด้วยใยแก้ว จะได้ความแข็งแรงที่เพิ่มมากขึ้น มีความเบา แข็งแรงเหนียว ไม่เปราะ คุณสมบัติทางไฟฟ้า เรซิ่นมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ครบถ้วน สามารถนำไปใช้เป็นฉนวนไฟฟ้า ( insulator ) ได้
เรซิ่นนำไปใช้งานได้มากมายหลายกลุ่มงาน แต่แบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆที่นิยมใช้ในบ้านเรา ได้แก่
1. กลุ่มงานหล่อ ( casting ) เช่นหล่อพระ หล่อของชำร่วย หล่อตุกตา หล่อกระดุม หล่อแก้วเทียม ฯลฯ
2. กลุ่มงานเคลือบ ( laminate ) เช่นงานเคลือบกรอบรูปวิทยาศาสตร์
3. กลุ่มงานขึ้นรูปแบบ ( molding ) เช่นการผลิตงานไฟเบอร์กลาส หรือ FRP ( fiberglass reinforce plastic ) พลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว
1. โดยใช้ตัว catalyst หรือตัวทำให้แข็ง + ความร้อน
2. โดยใช้ตัว catalyst หรือตัวทำให้แข็ง + ตัวช่วยเร่งปฏิกิริยา promote/accelerator ที่อุณหภูมิห้อง
โดยทั่วไปการแข็งตัวของเรซิ่นแบ่งออกเป็น2ช่วงคือ ช่วงที่ 1. gel time คือช่วงหลังจากเติมตัว catalyst แล้วจนเรซิ่นจับตัวเป็นวุ้น ช่วงที่ 2. cure time คือช่วงที่เรซิ่นแข็งตัวเต็มที่และเป็นช่วงที่เรซิ่นเย็นตัวลงหลังจากที่มีความร้อนสูงในขณะทำปฏิกิริยา
1. อุณหภูมิ อุณหภูมิสูงเรซิ่นแข็งตัวเร็วกว่าอุณหภูมิต่ำ
2. ปริมาณตัวเร่งฯ และ ตัวช่วยเร่งฯ ปริมาณที่มากแข็งตัวเร็วกว่าปริมาณที่น้อย
3. ความชื้นหรือน้ำ ความชื้นสูงการแข็งตัวของเรซิ่นจะช้าลง ผิวงานขึ้นฝ้ามัว โดยปกติปริมาณน้ำที่อยู่ในเรซิ่นจะต้องมีค่าไม่เกิน 0.05%
4. ปริมาณออกซิเจน ออกซิเจนเป็นตัวป้องกันการแข็งตัวของเรซิ่น ถ้าปริมาณออกซิเจนสูง เช่นการกวนเรซิ่นมากๆ นานๆ การแข็งตัวของเรซิ่นจะช้าลง และออกซิเจนมีประโย๙น์มากในเรื่องการยืดอายุการเก็บของเรซิ่น หากเริ่มเก็บเรซิ่นไว้นานขึ้น ควรสร้างออกซิเจนให้เกิดในถังหรือปีบดว้ยการกลิ้งถังไปมา เพื่อให้เรซิ่นข้างในเกิดการเคลื่อนไหว จะเกิดออกซิเจน และจะทำให้เรซิ่นมีอายูการเก็บเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
Grating Know-How ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.youtube.com/mktchancon
1. พลาสติก(Plastic) 2. คอมโพสิท(Composite) 3. เคฟล่าร์ “Kevlar” 4. คาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fibers) 5. โพลียูรีเทนโฟม (Polyurethane Foam) 6. ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) 7. Polypropylene (PP) Plastic
พลาสติกคือวัสดุสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความหมายกว้างมาก (เหมือนกับคำว่าสิ่งมีชีวิต ซึ่งหลากหลายมาก) พลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มนุษย์รู้จักมานานกว่า ๑๓๐ ปี และนำมาใช้ประโยชน์ แทนโลหะ ไม้ หรือวัสดุธรรมชาติอื่นๆ เช่น สิ่งทอ เรือและวัสดุ บรรจุภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆอีกมาก พลาสติกเป็นวัสดุที่สังเคราะห์วัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ เช่น น้ำมันปิโตรเลียม มาแยกเป็นสารประกอบ บริสุทธิ์หลายชนิด เมื่อนำเอาสารประกอบแต่ละ ชนิดมาทำปฏิกิริยาก็จะได้ “พลาสติก” พลาสติกที่เกิดจากสารประกอบที่ต่างกันจะมีสมบัติแตกต่างกันไปด้วย
1. Thermoplastic (พลาสติกอ่อน)
พลาสติกอ่อนเมื่อถูกความร้อนแล้วจะอ่อนตัวหลอมละลาย และขณะเย็นตัวจะมีความแข็ง พลาสติกชนิดนี้สามารถนำไปหลอมละลายกลับไปใช้ใหม่อีกครั้งก็ได้ ดังนั้นเศษหรือของที่ใช้แล้วที่ทำจากพลาสติกชนิดนี้จึงสามารถนำไปบดแล้วหลอม ใช้ใหม่ได้ ได้แก่ โพลีเอทเทลีน(Polyethelene) โพลีโพรไพลีน( Polypropylene)โพลีไวนิลคลอไรด์(Polyvinyl Chloride) เป็นต้น
2. Thermoseting (พลาสติกแข็ง)
พลาสติกแข็งเมื่อถูกความร้อนแล้วไม่อ่อนตัว แต่จะไหม้เกรียมไป ผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดนี้ เมื่ออัดขึ้นรูปหรือผสมใช้งานแล้วจะนำมาหลอมใช้อีกไม่ได้ ดังนั้นเศษหรือของที่ใช้แล้วที่จะทำพลาสติกประเภทนี้ จึงไม่สามารถนำมาบดหลอมใช้อีกได้ เนื่องจากแข็งตัวทำให้เนื้อพลาสติกเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี พลาสติกชนิดนี้ทำมาจากพลาสติกอ่อน โดยการเติมตัวเร่งที่เรียก ว่า Hardener ลงไปในเนื้อพลาสติกอ่อน ก็จะทำให้เนื้อแข็งขึ้นทันที มีความแข็งแรงค่อนข้างสูง เช่น เมลามีนฟอร์มาเดลไฮด์ (Melamine Formaldehyde) ฟีโนลิค(Phenolic ),โพลีเยสเตอร์( Polyester )รู้จักโพลีเยสเตอร์ดีในรูปของผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กล๊าส ยูรีเทน(Urethane ) อีฟอกซี่ ( Epoxy )
Composite เป็นชื่อเรียกของผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยวัสดุ ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป มาประกอบหรือร่วมมือกัน เพื่อใช้คุณสมบัติเด่นของแต่ละวัสดุ ตัวอย่างของวัสดุคอมโพสิท ที่เข้าใจได้ชัด ได้แก่ ยางรถยนต์ ซึ่งประกอบมาจากวัสดุหลักสองชนิดคือยางและเส้นลวดเหล็ก โดยใช้คุณสมบัติความแข็งแรงของเหล็กและการยืดหยุ่นของยางเพื่อความนุ่มนวล โดยใช้อย่างไดอย่างหนึ่งไม่ได้ หรือได้แต่ไม่ดี เช่น ถ้าใช้เหล็กอย่างเดียวก็จะไม่นุ่มนวล หรือใช้ยางอย่างเดียวก็จะน้ำหนักเยอะ และไม่แข็งแรง คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นอีก ตัวอย่างที่ใช้คุณสมบัติเด่น คอนกรีตในด้านการรับแรงอัดและราคาที่ถูกทนทาน หาง่าย กับเหล็กที่เด่นทั้งการรับแรงอัดและแรงดึงแต่ราคาสูงและ การซ่อมบำรุงสูงเนื่องจากเป็นสนิมได้ง่าย
หลายคนรู้จักไฟเบอร์กลาส ว่าเป็นวัสดุคอมโพสิตหรือพลาสติกเสริมแรง อย่างพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใย (fiber-reinforced plastic, FRP) หรือ พลาสติกเสริมแรงด้วยแก้ว (glass-reinforced plastic, GRP) แต่แท้จริงแล้วไฟเบอร์กลาส คือ เส้นใยของแก้วที่ปั่นให้เป็นเส้นละเอียดบางๆ เพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุเสริมแรงในพอลิเมอร์หลายประเภท รวมทั้งพลาสติกเรซินที่สามารถนำมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น หลังคารถกระบะ อ่างอาบน้ำ เรือ ชิ้นส่วนเครื่องบินเล็ก ถังน้ำขนาดใหญ่ ชิ้นส่วนรถแข่ง เป็นต้น เพราะเส้นใยแก้วมีสมบัติความแข็งแรง ทนแรงดึงได้สูง ไม่เป็นสนิม และทนต่อการกัดกร่อน นอกจากนี้เส้นใยแก้วยังมีสมบัติด้านการเป็นฉนวนความร้อนที่ดีเหมาะที่จะนำมาใช้เป็นฉนวนในเตา ตู้เย็น หรือวัสดุก่อสร้างอีกด้วย
Grating Know-How ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.youtube.com/FRPGratingFiberglass
3. เคฟล่าร์ “Kevlar”
เป็นเส้นใยชนิด aramid ค้นพบโดย Stephanie Kwolek บริษัทดูปองท์ในปี 2514(ค.ศ.1971) ด้วยการสังเคราะห์ โดยอาศัยปฎิกิริยาควบแน่นจาก acid chloride ของ terephthaloylchloride(TPC) กับ p-phenylene diamine(PDA) เส้นใยเคฟล่าร์มักเน้นการใช้งานเพื่ออุตสาหกรรม กรณีของเคฟล่าร์ที่เป็นเส้นใยยาวใช้ในการทำผ้าใบยางรถยนต์ ท่อ และสายพานในอุตสาหกรรม เคฟลาร์ 29 ก็เช่นเดียวกันอยู่ในรูปของเส้นใยยาวใช้ทำสายเคเบิ้ล ร่มชูชีพ และเทปเสริมแรง ส่วน เคฟลาร์ 49 ในรูปของเส้นใยยาวและเส้นใยสั้นที่ทำเป็นแผ่น ใช้งานส่วนใหญ่ในด้านของพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใย งานด้านอวกาศ ลำเรือ และงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง มีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงได้เป็นย่างดี และแข็งแกร่งเป็นเลิศ ซึ่งทนความร้อนได้ถึง 427 องศาเซลเซียส ทนกว่าเหล็กถึง7เท่า แต่ไม่ทนต่อแรงขูดขีด และไม่ยืดหยุ่น ซึ่งทำให้แตกหักได้ง่าย เมื่อถูกโค้งงออย่างแรง
4. คาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fibers)
จัดอยู่ในกลุ่มของพวกcomposite และมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของการผลิต โครงสร้างพื้นฐานจะมีลักษณะเป็นเส้นใยเดี่ยวๆที่เล็กมาก ความแข็งแรงในแนวเส้นใยนั้นจะสูงมาก โดยสูงกว่าโลหะที่มีน้ำหนักเท่าๆกัน เมื่อนำคาร์บอนไฟเบอร์มาเรียงแนวไฟเบอร์ในทิศเดียวกัน โดยใช้กาวในกลุ่มEpoxy resin เป็นตัวประสาน ก็จะได้วัสดุที่มีลักษณะคล้ายๆกับไม้กระดานที่เราสามารถฉีกให้แยกจากกันได้ในแนวเสี้ยนไม้ แต่ไม่สามารถหักขวางแนวของไยไม้ได้ การนำคาร์บอนไฟเบอร์มาใช้งานนั้นจึงจำเป็นต้องมีการนำมาสานกันในแนวที่เส้นใยขวางกัน หรือไขว้กัน คล้ายๆกับกระดานไม้อัด จึงทำให้สามารถรักษาแนวความแข็งแรงไว้ได้ การออกแบบจึงต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะของการใช้งานและแนวการรับแรงเป็นสำคัญ สำหรับการนำคาร์บอนไฟเบอร์มาใช้งาน การผลิตขึ้นมาจึงต้องคำนึงถึงลักษณะของการใช้งานเป็นสำคัญ ความแข็งแรงของวัสดุที่ทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ เช่น ท่อ หรือ ขาจาน จะมีความแข็งแรงมากกว่าโลหะ จึงสามารถทำให้เบาลงได้โดยที่ยังคงความแข็งแรงได้มากกว่าโลหะที่มีขนาดเท่าๆกันนั้น อายุการใช้งานของคาร์บอนไฟเบอร์นั้นจัดว่าทนทานมาก ความแข็งแรงหรือความทนทานของคาร์บอนไฟเบอร์นั้นส่วนหนึ่งเกิดมาจากepoxy resin ที่เป็นตัวประสานระหว่างเส้นใยและระหว่างชั้น
5. โพลียูรีเทนโฟม (Polyurethane Foam)
เป็นพลาสติกเหลวชนิดทอร์โมเซ็ตติ้ง (Thermosetting) ที่นิยมนำมาใช้งานประดิษฐ์ เช่น ทำเลียนแบบไม้เทียม (ขนาดของเม็ดโฟมจะเล็กมาก) ทำกันชนรถยนต์ ส่วนประกอบภายในรถ เช่น พวงมาลัยและแผงคอนโซล การทำขาเทียม และการสร้างความแข็งแรงให้กับชิ้นงานหรือแม่พิมพ์(เม็ดโฟมมีขนาดใหญ่กว่า) ตลอดจนการนำมาฉีดเพื่อเป็นฉนวนของห้องเย็น มีลักษณะเป็นของเหลว2ชนิด
ชนิดที่ 1 มีสีเหลืองคล้ายโพลีเอสเทอร์เรซิ่น เรียกว่า โฟมขาว หรือ โพลิออล (polyol)
ชนิดที่2มีสีน้ำตาลไหม้เกือบดำ เรียกว่า โฟมดำ หรือ ไดไอโซไซยาเนต (diisocyanate)
โพลียูรีเทน เป็นกลุ่มโพลีเมอร์ ที่ใช้กันแพร่หลายเนื่องจาก เป็นวัสดุยืดหยุ่น อ่อนนุ่มจนถึงวัสดุที่มีความแข็งแรง และมีน้ำหนักเบา โพลียูรีเทน แบ่งออกเป็นสามกลุ่มด้วยกันคือ
– โพลียูรีเทน โฟมชนิดยืดหยุ่น (flexible polyurethane foam)
– โพลียูรีเทน โฟมชนิดแข็ง (rigid polyurethane foam)
– อิลาสโตเมอร์ (polyurethane elastomers)
6. ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)
ABS isalow cost engineering plastic that is easy to machine and fabricate. ABS is an ideal material for structural applications when impact resistance, strength, and stiffness are required. It is widely used for machining pre-production prototypes since it has excellent dimensional stability and is easy to paint and glue. Natural (beige) ABS and black ABS are FDA compliant for use in food processing applications. The following physical property information is based on typical values of the base acrylonitrile-butadiene-styrene resin.
ABS isaterpolymer made by polymerizing styrene and acrylonitrile in the presence of polybutadiene. The proportions can vary from 15 to 35% acrylonitrile,5to 30% butadiene and 40 to 60% styrene. The result isalong chain of polybutadiene criss-crossed with shorter chains of poly(styrene-co-acrylonitrile). The nitrile groups from neighboring chains, being polar, attract each other and bind the chains together, making ABS stronger than pure polystyrene. The styrene gives the plasticashiny, impervious surface. The polybutadiene,arubbery substance, provides toughness even at low temperatures. For the majority of applications, ABS can be used between -20 and 80 C (-4 and 176 F) as its mechanical properties vary with temperature. The properties are created by rubber toughening, where fine particles of elastomer are distributed throughout the rigid matrix.
The most important mechanical properties of ABS are impact resistance and toughness. A variety of modifications can be made to improve impact resistance, toughness, and heat resistance. The impact resistance can be amplified by increasing the proportions of polybutadiene in relation to styrene and also acrylonitrile, although this causes changes in other properties. Impact resistance does not fall off rapidly at lower temperatures. Stability under load is excellent with limited loads. Thus, by changing the proportions of its components, ABS can be prepared in different grades. Two major categories could be ABS for extrusion and ABS for injection moulding, then high and medium impact resistance. Generally ABS would have useful characteristics withinatemperature range from ?20 to 80 C (?4 to 176 F). Lego bricks are made from ABS.
The final properties will be influenced to some extent by the conditions under which the material is processed to the final product. For example, molding atahigh temperature improves the gloss and heat resistance of the product whereas the highest impact resistance and strength are obtained by molding at low temperature. Fibers (usually glass fibers) and additives can be mixed in the resin pellets to make the final product strong and raise the operating range to as high as 80 C (176 F). Pigments can also be added, as the raw material original color is translucent ivory to white. The aging characteristics of the polymers are largely influenced by the polybutadiene content, and it is normal to include antioxidants in the composition. Other factors include exposure to ultraviolet radiation, for which additives are also available to protect against.
ABS polymers are resistant to aqueous acids, alkalis, concentrated hydrochloric and phosphoric acids, alcohols and animal, vegetable and mineral oils, but they are swollen by glacial acetic acid, carbon tetrachloride and aromatic hydrocarbons and are attacked by concentrated sulfuric and nitric acids. They are soluble in esters, ketones, ethylene dichloride and acetone. Even though ABS plastics are used largely for mechanical purposes, they also have electrical properties that are fairly constant overawide range of frequencies. These properties are little affected by temperature and atmospheric humidity in the acceptable operating range of temperatures.
ABS is flammable when it is exposed to high temperatures, such as those ofawood fire. It will melt and then boil, at which point the vapors burst into intense, hot flames. Since pure ABS contains no halogens, its combustion does not typically produce any persistent organic pollutants, and the most toxic products of its combustion or pyrolysis are carbon monoxide and hydrogen cyanide. ABS is also damaged by sunlight. This caused one of the most widespread and expensive automobile recalls in US history due to the degradation of the seatbelt release buttons.
ABS can be recycled, although it is not accepted by all recycling facilities. Production
ABS is derived from acrylonitrile, butadiene, and styrene. Acrylonitrile isasynthetic monomer produced from propylene and ammonia; butadiene isapetroleum hydrocarbon obtained from the C4 fraction of steam cracking; styrene monomer is made by dehydrogenation of ethyl benzene —ahydrocarbon obtained in the reaction of ethylene and benzene.
ABS combines the strength and rigidity of acrylonitrile and styrene polymers with the toughness of polybutadiene rubber. While the cost of producing ABS is roughly twice the cost of producing polystyrene, it is considered superior for its hardness, gloss, toughness, and electrical insulation properties.
7. Polypropylene (PP) Plastic
What is Polypropylene (PP), and What is it Used For?
Polypropylene (PP) isathermoplastic “addition polymer” made from the combination of propylene monomers. It is used inavariety of applications to include packaging for consumer products, plastic parts for various industries including the automotive industry, special devices like living hinges, and textiles. Polypropylene was first polymerized in 1951 byapair of Phillips petroleum scientists named Paul Hogan and Robert Banks and later by Italian and German scientists Natta and Rehn. It became prominent extremely fast, as commercial production began barely three years after Italian chemist, Professor Giulio Natta, first polymerized it. Natta perfected and synthesized the first polypropylene resin in Spain in 1954, and the ability of polypropylene to crystallize createdalot of excitement. By 1957, its popularity had exploded and widespread commercial production began across Europe. Today it is one of the most commonly produced plastics in the world. CNC Cut Polypropylene Living Hinge Prototype Child Safe Lid, CNC Cut Polypropylene Living Hinge Prototype Child Safe Lid by Creative Mechanisms
According to some reports, the current global demand for the material generates an annual market of about 45 million metric tons and it is estimated that the demand will rise to approximately 62 million metric tons by 2020. The major end users of polypropylene are the packaging industry, which consumes about 30% of the total, followed by the electrical and equipment manufacturing, which uses about 13% each. Household appliances and automotive industries both consume 10% each and construction materials follows with 5% of the market. Other applications together make up the rest of the global polypropylene consumption.
Polypropylene hasarelatively slippery surface which can make itapossible substitute for plastics like Acetal (POM) in low friction applications like gears or for use asacontact point for furniture. Perhapsanegative aspect of this quality is that it can be difficult to bond Polypropylene to other surfaces (i.e. it does not adhere well to certain glues that work fine with other plastics and sometimes has to be welded in the event that formingajoint is required). Although polypropylene is slippery at the molecular level, it does havearelatively high coefficient of friction – which is why acetal, nylon, or PTFE would be used instead. Polypropylene also hasalow density relative to other common plastics which translates to weight savings for manufacturers and distributors of injection molded Polypropylene parts. It has exceptional resistance at room temperature to organic solvents like fats but is subject to oxidation at higher temperatures (a potential issue during injection molding).
One of the major benefits of Polypropylene is that it can be manufactured (either through CNC or injection molding, thermoforming, or crimping) intoaliving hinge. Living hinges are extremely thin pieces of plastic that bend without breaking (even over extreme ranges of motion nearing 360 degrees). They are not particularly useful for structural applications like holding upaheavy door but are exceptionally useful for non load-bearing applications such as the lid onabottle of ketchup or shampoo. Polypropylene is uniquely adept for living hinges because it does not break when repeatedly bent. One of the other advantages is that polypropylene can be CNC machined to includealiving hinge which allows for faster prototype development and is less expensive than other prototyping methods. Creative Mechanisms is unique in our ability to machine living hinges fromasingle piece of polypropylene.
Another advantage of Polypropylene is that it can be easily copolymerized (essentially combined intoacomposite plastic) with other polymers like polyethylene. Copolymerization changes the material properties significantly, allowing for more robust engineering applications than are possible with pure polypropylene (more ofacommodity plastic on its own).
The characteristics mentioned above and below mean that polypropylene is used inavariety of applications: dishwasher safe plates, trays, cups, etc, opaque to-go containers, and many toys.
What are the Characteristics of Polypropylene?
Some of the most significant properties of polypropylene are:
Chemical Resistance: Diluted bases and acids don’t react readily with polypropylene, which makes itagood choice for containers of such liquids, such as cleaning agents, first-aid products, and more.
Elasticity and Toughness: Polypropylene will act with elasticity overacertain range of deflection (like all materials), but it will also experience plastic deformation early on in the deformation process, so it is generally considereda“tough” material. Toughness is an engineering term which is defined asamaterial’s ability to deform (plastically, not elastically) without breaking..
Fatigue Resistance: Polypropylene retains its shape afteralot of torsion, bending, and/or flexing. This property is especially valuable for making living hinges.
Insulation: polypropylene hasavery high resistance to electricity and is very useful for electronic components.
Transmissivity: Although Polypropylene can be made transparent, it is normally produced to be naturally opaque in color. Polypropylene can be used for applications where some transfer of light is important or where it is of aesthetic value. If high transmissivity is desired then plastics like Acrylic or Polycarbonate are better choices.
Polypropylene is classified asa“thermoplastic” (as opposed to “thermoset”) material which has to do with the way the plastic responds to heat. Thermoplastic materials become liquid at their melting point (roughly 130 degrees Celsius in the case of polypropylene). A major useful attribute about thermoplastics is that they can be heated to their melting point, cooled, and reheated again without significant degradation. Instead of burning, thermoplastics like polypropylene liquefy, which allows them to be easily injection molded and then subsequently recycled. By contrast, thermoset plastics can only be heated once (typically during the injection molding process). The first heating causes thermoset materials to set (similar toa2-part epoxy) resulting inachemical change that cannot be reversed. If you tried to heatathermoset plastic toahigh temperatureasecond time it would simply burn. This characteristic makes thermoset materials poor candidates for recycling.
Project Reference ดูข้อมูลเพิ่มเติม…..
GFRP-Steel-Plastic-PPABS Swimming Overflow Welded Steel Bar GRATING / Composite FibreGlass Casting Ductile Iron MANHOLE COVER ฝาบ่อทึบปิดท่อพักครอบท่อรางระบายน้ำทิ้งสำเร็จรูป ฝาท่อ แมนโฮล เกรตติ้ง / Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating / Curbed Drainage Grating Scupper / Stair Tread Nosing / Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit : ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ เกรตติ้งเหล็กชุบสังกะสีทนสนิม ตะแกรงดักเศษอาหารขยะฝังในคันหินคสล. ฝาทึบปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสเหล็กหล่อเหนียว แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ อุปกรณ์ตะขอขาแขวนฮุกแผ่นกระดานเพกบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังกำแพงแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง
Home Page of Chancon-GratingThai | >> หน้าแรก บริษัทแชนคอน – บริษัทเกรตติ้งไทย
Contact & Information || ติดต่อสั่งซื้อ ขอแผ่นที่ อีเมล์ ไลน์ ตรวจสอบราคาสินค้า คุณสมบัติ วิธีการตัด ติดตั้ง ผลทดสอบ
A. Contact us : ติดต่อสั่งซื้อ แผนที่รับสินค้า ขอคำแนะนำเพิ่มเติม
B. Price-Quotation : ราคาสินค้า ขอใบเสนอราคา-Discount
C. Projects Reference : ตัวอย่างลูกค้า การประยุกต์ใช้ วิธีการเลือกซื้อ
D. คุณสมบัติ ที่มา ความหมายของไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง FiberGlass Vinyl Resin Food Grade FRP
E. Grating Services : การสั่งผลิต ติดตั้ง ออกแบบ ผลทดสอบการรับแรง-สารเคมี
F. Dealer Sales Wanted : ขอเป็นตัวแทนจำหน่าย รับสมัครพนักงานขาย
Gully Grating || ตะแกรง เหล็ก ไฟเบอร์กล๊าส พลาสติค รอบสระว่ายน้ำ ตะแกรงดักขยะฝังในคันหิน
1. Plastic PolyPropylene Grating ตะแกรงทางเดินระบายน้ำ พลาสติกชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษ PP
2. Galvanised Steel Grating ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปชุบกันสนิม สำหรับรางระบายน้ำ ทางเดิน
3. FRP FiberGlass Mould Grating ตะแกรงระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส แผ่นปูพื้นทางเดินในโรงงาน
4. ABS Swimming Overflow Drainage Grating แผ่นตะแกรงระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ เอบีเอส พีวีซี
5. Drive HighWay Drain Grating ตะแกรงดักขยะฝุ่นผงคันหินใบไม้ด้านข้างริมฟุตบาท (Leaf Trapper Side)
6. Tree Guard Grating Paver Frame Cover กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ มีทั้งแบบตัวต่อและสำเร็จรูป
Manhole Cover || ฝาบ่อปิดทึบ ครอบท่อพักระะบบบำบัดน้ำเสีย ฝาบ่อเหล็กหล่อ ฝาท่อไฟเบอร์กล๊าส
7. FRP Manhole Cover ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อไฟเบอร์กล๊าสผสมเรซิ่น (ไม่เป็นสนิม รับแรงสูง ทดแทนแสตนเลส)
8. Ductile Cast Iron Manhole Cover (Round/Square) ฝาปิดท่อ ฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียวระบบบำบัดน้ำ
9. FRP Diamond Top Cover (Special Cut) ฝาปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสชนิดสั่งตัดตามขนาดได้ทันที
Related Products || แผ่นปิดผิวกันลื่น แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดไฟเบอร์กล๊าส คลิปล็อคยึดจับตะแกรง
10. Egg Crate Ceiling Screen แผงระแนงบังตาหน้ากากตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ กรองลมระบายอากาศ
11. Ceiling Trellis Shade Grilles ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตา
12. PegBoard Display Tools Hooks Shelves แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดเจาะรูติดผนังแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง
13. FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส
14. HDG Steel Grating clip lock clamp fastener คลิปล็อคยึดจับแผงตะแกรง แสตนเลส/เหล็กชุบซิงค์ทนสนิม
15. FormWork Ties System: TieRod/ThreadBar เหล็กรับแรงทนดึงสูง WingNut WaterStopper
FRP Fiber Grating Services ແລະ Specification (ເຄື່ຶອງສານເຄມີ, ຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດ, ວິທີການຕັດ)
ໄລຍະ I ຂອງເຕົາຄວນຈະປິດ – ແຂນ – ທົດສອບຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ຕາລາງການຕໍ່ຕ້ານທາງເຄມີ ຂອງເຕົາໄຟເບີກາດ
Space Between Grating ແລະ L Angleວິທີການຕິດຕັ້ງທໍ່ລະບາຍນ້ໍາ ຄວນໄດ້ຮັບການອອກແບບໃຫ້ກວ້າງແລະສູງເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ. ສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມປອດໄພຂອງການນໍາໃຊ້. ການຕິດຕັ້ງທໍ່ລະບາຍນ້ໍາຕ້ອງໄດ້ຮັບການອອກແບບເພື່ອຮອງຮັບລະບົບລະບາຍນ້ໍາແລະລະບົບລະບາຍນ້ໍາ. ໂດຍມາດຕະຖານ ເຫລໍກແລະເຫຼັກກ້າມີຂະຫນາດ2width, ກວ້າງ 25cm ແລະກວ້າງ 30cm. ເພາະສະນັ້ນ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ (ຮູບຮ່າງ L) ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີກອບເຫຼັກທີ່ຈະຈັດວາງກ່ອນທີ່ຈະຫຼົ່ນລົງຊີມັງ. ຂະຫນາດແມ່ນ 25-30 ມມ (ຕາມປະເພດຂອງແກນ) ເພື່ອໃຫ້ແກນສະເຫມີໄປຫາພື້ນ. ຢ່າຫຼົມຢູ່ລໍ້ເຫຼື່ອນຫຼືຍ່າງຜ່ານ. ຄວາມກວ້າງຂອງຄວາມຍາວຂອງຄວາມຍາວຄວນຈະຢູ່ກັບ 5-10 ມມ.
ກວ້າງ G ຂອງ vai ຮູບເພື່ອເອົາ grating.ຈະໄດ້ຮັບການເພີ່ມໃນແຕ່ລະ 3-5mm.2ແມ່ນຂ້າງ 6-10 ມມ.
Ex-1 ຖ້າກວ້າງ 25cm. Cdr 25-26-26 =
Ex-2. ສໍາລັບຖາດຂະຫນາດ 30 ຊັງຕີແມັດ, ແລະ 30.5-31.0 ຊຕມກວດສອບການອອກແບບເພື່ອຕັດສັ້ນ. FRP Grating Cutting Design for 4-Sides-Close-Endຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ FRP ສາມາດຕັດໄດ້ໃນທຸກຂະຫນາດ. ຈາກຂະຫນາດຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງມາດຕະຖານ 1.5×4 ແມັດຫຼັງຈາກການຕັດ, ຖ້າບໍ່ໄດ້ອອກແບບເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ fractious. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເປີດຂອບ. ດັ່ງນັ້ນຖ້າທ່ານຕ້ອງການປິດແຄມ. ຍົກເລີກແຖບຕັດກ່ອນຕັດ.Ready Stock Send Inquiry Now! ຕາຂ່າຍເຫລໍກ, welded, 25×100 ຊົມແລະ 30×100 ຊົມ Dimensions of 25×100 cm, 30×100 cm of water drain toastandard size. The company has stock for customers to receive goods immediately without waiting for production. In addition to hot galvanized welds, customers can also choose various types of grid. It is suitable for use in areas such as Grill Swimming Swimming, Grating PVC Overlay Swimming Grating, PP Polypropylene Grating and FRP Fiberglass Grating. Manufacturers who are skilled in all types of drainage standards include iron bars, roads, drainage systems. Grille drainage pipe
ເຫມາະສໍາລັບເຮືອນຄົວ, ຮ້ານອາຫານ, ໂຮງງານ, ຫ້າງສັນພະສິນຄ້າ, ບາຊ່າ, ສະລອຍນ້ໍາ, ຫນອງປາ, ຖະຫນົນທີ່ຍົກຂຶ້ນມາ, ແລະອື່ນໆ.
ຖັງທົດສອບຝາປິດລະບົບການປົກຫຸ້ມຂອງທໍ່ນ້ໍ sewage ໄດ້.
1. ບໍ່ມີມູນຄ່າການຟື້ນຟູ: ມັນຈະແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງລະອຽດເພາະບໍ່ມີມູນຄ່າສໍາລັບການຂຸດຂີ້ເຫຍື້ອການສ້ອມແປງທີ່ດີແລະການຕໍ່ຕ້ານການກັດກ່ອນ: ມັນຈະບໍ່ມີການຂີ້ເຫຍື້ອເພາະມັນມີການໃສ່ຫມວກດີແລະການຕໍ່ຕ້ານການກັດກ່ອນ
2. ຊີວິດການບໍລິການຍາວ: ມັນສາມາດໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 30 ປີແລະ ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງໃດໆໃນການທົດລອງຂອງ 2,000,000 ອາການຊຶມເສ້
າທີ່ຫນັກຫນ່ວງ . ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງແຫນ້ນຫນາ, ແລະປະສິດທິຜົນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສານທີ່ເປັນພິດເຫຼົ່ານີ້ລຸດອອກຈາກ cesspool 3. ນ້ໍາຫນັກຄວາມກົດດັນສູງສໍາລັບການຕິດຕັ້ງງ່າຍ. ທາດເຫຼັກ ductile ແລະ insulation
4. ການອອກແບບຟຣີ: ມັນສາມາດໄດ້ຮັບການອອກແບບຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້. ມີສີ, ຮູບແບບ, ຂໍ້ກໍານົດບໍ່ມີ jangle: ບໍ່ມີ neither rebound ໃນເວລາທີ່ລົດຜ່ານ
5. ເຮັດໃຫ້ຄໍາສັ່ງສໍາລັບຂະຫນາດໃດແລະສັນຍາລັກຂອງທ່ານເອງແມ່ນລາຄາທີ່ມີລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນທຽບເທົ່າກັບອຸປະກອນການທາດເຫຼັກ ductile
GFRP FiberGlass Vinyl Resin Food Grade
ຜະລິດຕະພັນໄຟຟ້າ ຜະລິດຕະພັນ Plastics ຫຼື reinforced reinforced ເຟີນີເຈີຫຼືວັດສະດຸພາດສະຕິກອື່ນໆສໍາລັບ reinforcement. ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ເພື່ອເສີມສ້າງຢາງພາລາແມ່ນ “ເສັ້ນໄຍແກ້ວ”, ເຊິ່ງມີລັກສະນະອ່ອນໆແຕ່ຂັດ. ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນສູງ ຊິ້ນສ່ວນສຕິກໃຊ້ເປັນຊີ້ນ. ຕ້ອງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ. ຖ້າບໍ່ມີການເສີມກໍ່ບໍ່ມີຄວາມອ່ອນເພຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ເລືອກຢາງ. Polyester Resin Vinyl ester resin ແລະເຫລໍກໂລຫະ ພາດສະຕິກນີ້ແມ່ນພາດສະຕິກແຫຼວທີ່ປະສົມກັບ ທາດປະກອບຫຼືແຂງແຮງປະຕິກິລິຍາເຄມີ. ຄວາມຮ້ອນແມ່ນສູງກວ່າ 100 ° C. ມັນກາຍເປັນທໍ່ຢາງແຂງແລະຈະບໍ່ກັບມາເປັນຮູບຮ່າງອີກ, ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າຂະບວນການ. Thermosetting
ເພາະສະນັ້ນ, ການສ້າງຜະລິດຕະພັນໂດຍທາງ. ມັນຖືກເອີ້ນວ່າ. Fiberglass ຜະລິດຕະພັນຢາງ reinforced ຫຼື FRP, ທີ່ພວກເຮົາພຽງແຕ່ເອີ້ນວ່າຜະລິດຕະພັນ fiberglass ຫຼື FRP.
Fiberglass ຫຼື fiberglass ສາມາດແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດຕາມລັກສະນະຂອງເສັ້ນໄຍ. ເສັ້ນໄຍຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນຄ້າຍຄືກັບເສັ້ນດ້າຍ (ຮູບ 1), ເຊິ່ງສາມາດໃສ່ໃນຜ້າໃຍສັງເຄາະ (ຮູບ 2). ຜ້າດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຮັບການດູດຊຶມ, ບໍ່ຍ່ອຍ, ປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ. ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນຜ້າມ່ານໄຟ. ປະເພດອື່ນໆຂອງເສັ້ນໄຍແມ່ນເສັ້ນໄຍສັ້ນ. ມັນຖືກໃຊ້ສໍາລັບການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນແລະສຽງ, ຊຶ່ງເປັນແຜ່ນຫນາ (ເບິ່ງຮູບທີ 3).
ສ່ວນປະກອບຕົ້ນຕໍທີ່ນໍາໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໄຍແມ່ນທາຍ silica, ມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຖ່ານຫີນແລະປູນປອມ. ນອກເຫນືອໄປຈາກສາມສ່ວນປະກອບຕົ້ນຕໍ, ສ່ວນປະກອບອື່ນໆອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປັບປຸງຄຸນສົມບັດຂອງເສັ້ນໄຍ, ເຊັ່ນ: borax, feldspar, alumina calcined, magnesite, neffilene. Nepheline syenite and kaolin clay
ທຸກໆຢາງຫຼືສານພາດສະຕິກທີ່ປະກອບດ້ວຍຜະລິດຕະພັນ Polyesters ເຊັ່ນ: ຢາງທີ່ມີອົງປະກອບທາງເຄມີດຽວກັນກັບເສັ້ນໃຍໂພລີເອສເຕີທົ່ວໄປແຕ່ວ່າມັນຖືກ extruded ເປັນຮູບເງົາ (ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນການຫຸ້ມຫໍ່ເປັນການສີດໄຟຟ້າຫຼືເປັນ ພື້ນຖານສໍາລັບແຜ່ນບັນທຶກສະນະແມ່ເຫຼັກ) c: ຢາງທີ່ເຮັດດ້ວຍທໍ່ນ້ໍາທຽມທີ່ເຮັດຈາກໂພລີເອດເຕີ unsaturated (ເປັນຫນຶ່ງທີ່ສ້າງຈາກ glycol ແລະ acidic maleic ຫຼືອາຊິດ fumaric), cured ໂດຍ copolymerization (ເຊັ່ນດຽວກັບ styrene) fibers) ແລະທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການຝັງແລະການກັ່ນຕອງແລະໃນການຜະລິດຜະລິດຕະພັນສຽງແລະ molded
ສໍາລັບວັດສະດຸສນວນກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ບາງຄັ້ງເອີ້ນວ່າເຟີນີເຈີ, ເບິ່ງແວ່ນຕາແກ້ວ. ສໍາລັບເສັ້ນໄຍແກ້ວຕົວເອງ, ບາງຄັ້ງກໍ່ເອີ້ນວ່າເຟີນີດ, ເບິ່ງເສັ້ນໃຍແກ້ວ. ສໍາລັບວັດສະດຸປະສົມທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນການທີ່ເສັ້ນໄຍແຂງແຮງແມ່ນເສັ້ນໄຍຄາບອນ, ເບິ່ງໂພລີເມີທີ່ມີຄາບອນເສີມເສັ້ນໄຍ. Fiberglass (ຫຼື fiberglass) ແມ່ນປະເພດຂອງທໍ່ຢາງທີ່ເສີມເສັ້ນໃຍທີ່ເສັ້ນໃຍ reinforcement ແມ່ນເສັ້ນໃຍແກ້ວ. ເສັ້ນໄຍແກ້ວສາມາດຖືກຈັດແຈງແບບງ່າຍດາຍ, ແປເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນ (ເອີ້ນວ່າຜ້າຝ້າຍ) ຫຼືຖີ້ມໃສ່ຜ້າ. ເມັດພາດສະຕິກອາດເປັນພາດສະຕິກທີ່ຮ້ອນ – ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ epoxy, polyester resin – ຫຼື vinylester, ຫຼື thermoplastic.
ເສັ້ນໃຍແກ້ວແມ່ນເຮັດດ້ວຍແກ້ວປະເພດຕ່າງໆໂດຍອີງໃສ່ການນໍາໃຊ້ເສັ້ນໃຍສັງກະສີ. ແວ່ນຕາເຫຼົ່ານີ້ທັງຫມົດປະກອບດ້ວຍ silica ຫຼື silicate, ມີປະລິມານທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງທາດອົກຊີຂອງທາດການຊຽມ, ແມກນີຊຽມ, ແລະບາງຄັ້ງ boron. ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນເສັ້ນໃຍສັງກະສີ, ເສັ້ນໃຍແກ້ວຕ້ອງເຮັດດ້ວຍລະດັບຄວາມຕ່ໍາທີ່ສຸດ.
Fiberglass ເປັນອຸປະກອນທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະໃຊ້ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນຈໍານວນຫຼາຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ແຂງແຮງແລະແຂງເປັນຜະສົມຜະສານດ້ວຍເສັ້ນໄຍຄາບອນ, ມັນກໍ່ບໍ່ກະທັນຫັນແລະວັດຖຸດິບແມ່ນມີລາຄາຖືກກວ່າ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະນ້ໍາຫນັກຂອງມັນແມ່ນດີກ່ວາໂລຫະຈໍານວນຫຼາຍ, ແລະມັນສາມາດໄດ້ຮັບການ molded ຫຼາຍໃນຮູບແບບທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງເສັ້ນໄຍສັງກະສີປະກອບມີເຮືອບິນ, ເຮືອ, ລົດໃຫຍ່, ອ່າງອາບນ້ໍາແລະບ່ອນນັ່ງ, ສະນຸກເກີນ້ໍາ, ອ່າງອາບນ້ໍາຮ້ອນ, ອ່າງເກັບນ້ໍາ, ຖັງນ້ໍາ, ມຸງ, ທໍ່, ກາວ, ແຜ່ນ, ແຜ່ນ surfboards ແລະຜິວຫນັງພາຍນອກ.
ຊື່ທົ່ວໄປອື່ນໆສໍາລັບ fiberglass ແມ່ນຢາງພາລາທີ່ເຮັດດ້ວຍແກ້ວ (GRP),  ຖົງຢາງຍືດເສັ້ນໄຍແກ້ວ (GFRP)  ຫຼື GFK (ຈາກເຢຍລະມັນ: Glasfaserverst? rkter Kunststoff). ເນື່ອງຈາກວ່າເສັ້ນໃຍແກ້ວເອງກໍ່ຖືກເອີ້ນວ່າ “ເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ”, ມັນກໍ່ຖືກເອີ້ນວ່າ “ເຟີນີເຈີສຕິກເສີມ.” ບົດຂຽນນີ້ຈະໄດ້ຮັບຮອງເອົາສົນທິສັນຍາວ່າ “ເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ” ແມ່ນຫມາຍເຖິງການຜະລິດສານສະກັດທີ່ມີເສັ້ນໃຍແກ້ວຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ແທນທີ່ຈະເປັນເສັ້ນໃຍແກ້ວເທົ່ານັ້ນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ fiberglass | ປະຫວັດຂອງ FRP Fiberglass
ບາງຄົນຮູ້ວ່າ “ເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ” ແມ່ນອຸປະກອນປະສົມ. ຫຼື reinforcement ຢາງ ໃຊ້ເປັນລົດທ່ອນຫຼືອ່າງອາບນ້ໍາ. ແຕ່ແທ້ “Fiberglass” ແມ່ນ “fiberglass” ຫມາຍຄວາມວ່າການແປພາສາໂດຍກົງຂອງເສັ້ນໄຍແມ່ນໃຊ້ເປັນວັດສະດຸເສີມສໍາລັບຜະລິດຕະພັນພາດສະຕິກຢາງແລະຜະລິດຕະພັນແມ່ພິມເຊັ່ນ: ມຸງ, ລົດບັນທຸກ, ລົດຂະຫນາດນ້ອຍ, ຂະຫນາດນ້ໍາ. ລົດໃຫຍ່ໃຫຍ່ແຂ່ງລົດ ກະເບື້ອງແກ້ວ reinforced, GRC), ນອກຈາກຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ຄວາມແຮງດຶງດູດແມ່ນສູງຫຼາຍ. ເສັ້ນໄຍແມ່ນຊັບສິນ. ຄວາມຮ້ອນຄວາມຮ້ອນ ນອກຈາກນັ້ນ, ເສັ້ນໄຍສາມາດໃສ່ເປັນສິ້ນຜ້າແລະມີໂຄງສ້າງທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນ. ຜະລິດຕະພັນແມ່ນເຮັດດ້ວຍ ເສັ້ນໄຍມີຊ່ອງຫວ່າງ. ວັດສະດຸທີ່ຕິດຢູ່ມີຄວາມສາມາດປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນໄດ້. ເຫມາະສົມກັບຜ້າພາຍໃຕ້. ການກີດຂວາງດີຄືກັນກັບທີ່ໃຊ້ກັບຕູ້ເຢັນຫຼືເຄືອບ. ຜ້າຂອງເສັ້ນໄຍບໍ່ໄດ້ດູດນ້ໍາ. ໃຊ້ເປັນຜ້ານ້ໍາແບບບໍ່ມີນ້ໍາ. ບໍ່ມີການຫົດຕົວແລະບໍ່ມີຜົນຈາກນ້ໍາ.
ເສັ້ນໃຍຂອງຂະຫນາດຕ່າງໆແລະຄວາມຍາວ. ເສັ້ນໃຍອາດຈະຍາວຄືເສັ້ນດ້າຍ. ດັ່ງນັ້ນຍາວກັບເສັ້ນໄຍສັ້ນຫຼາຍເພື່ອເຂົ້າໄປເບິ່ງດ້ວຍຕາ naked. ຜະລິດຕະພັນໄຟຟ້າຈາກດິນຊາຍ, ຫີນປູນ, ແກນ, ແຂ້ວ, ອາຊິດໂບລິກແລະສານປະສົມອື່ນໆ. Melted inside ໃນອຸນຫະພູມສູງເຖິງ 1370 ອົງສາເຊນຊຽດ, ຖ້າການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງສ່ວນປະກອບແມ່ນດີຫຼາຍ. ມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລູກຄິດຕັນໃດໆທີ່ຈະເລືອກເອົາແກ້ວທີ່ດີ. ຫຼັງຈາກທີ່ເຮັດໃຫ້ນ້ໍາຈືດເຂົ້າໄປໃນນ້ໍາຈືດ, ແລ້ວເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນໃຍຍາວ. ເສັ້ນໄຍຖືກດຶງອອກຈາກຫົວມ້ວນ. ແລະຖືກມ້ວນຢູ່ທີ່ຄວາມໄວສູງກວ່າຄວາມໄວຂອງເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ. ຂຸດອອກຈາກຫົວມ້ວນ. ນີ້ແມ່ນເທົ່າກັບ stretch ໃນຂະນະທີ່ເສັ້ນໄຍແມ່ນອ່ອນແອ. ຂະຫນາດເສັ້ນໄຍ ກ່ອນທີ່ຈະແຂງ. ເສັ້ນໄຍຍາວແມ່ນໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຜ້າມ່ານ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໄຍສັ້ນ. ມັນຖືກຕັດກັບລົມເພື່ອປ່ຽນຄວາມຍາວ. ເຊິ່ງຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜ່ນຫຼືຜ້າ. ໃນອຸດສາຫະກໍາ ເພື່ອປົກປ້ອງສຽງ ອຸນຫະພູມແລະໄຟ
“Fiberglass” ໃນພາສາຂອງວັດສະດຸ reinforced ທີ່ຮູ້ກັນທົ່ວໄປ. ໃນມຸງລົດບັນທຸກ. ຫຼືສ່ວນທີ່ຕ້ອງການຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ຜະລິດຈາກພື້ນທໍາອິດເພື່ອເຮັດຄວາມສະອາດພາຍນອກ. Wax replica ໃສ່ຜ້າປອກຜາເທິງແຜ່ນຕົ້ນສະບັບ. ໃຊ້ເຫລໍກແຂງເພື່ອຄວາມຫນາທີ່ຕ້ອງການເມື່ອຢາງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເອົາຊິ້ນສ່ວນຂອງເສັ້ນໃຍສັງກະສີອອກຈາກຕົ້ນແບບ. ການຜະລິດແຜ່ນຟິວເຕີຈາກວິທີນີ້ແມ່ນບໍ່ມີລາຍລະອຽດແລະຄວາມງາມແຕກຕ່າງຈາກວິທີທີ່ໃຊ້ໃນການໃຊ້ mold. ນີ້ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບອົງປະກອບຈໍານວນຫຼາຍ, ແຕ່ວ່າມັນມີຄວາມສັບສົນຫຼາຍກ່ວາຄັ້ງທໍາອິດ. ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງ mold ຈາກ prototype ໄດ້. ໃນເວລາທີ່ mold ໄດ້. ອົງປະກອບ fiberglass ແມ່ນຕ້ອງການ. ຕ່ອນແມ່ນສວຍງາມ. ແມ່ບົດ ມັນສາມາດເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນພື້ນທີ່ທີ່ຕ້ອງການໂດຍການເພີ່ມຄວາມຫນາ. ຂອງ fiberglass ຫຼາຍຂັ້ນຕອນ
ຜະລິດຕະພັນ Fiberglass ແມ່ນຜະລິດຈາກສານເຄມີແລະວັດຖຸຕ່າງໆ. ຊຶ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ, ເຊັ່ນ: ຕາ, ຜິວຫນັງ, ລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ, ສະນັ້ນຈະລະມັດລະວັງແລະໃຫ້ສວມເຄື່ອງປ້ອງກັນໃນຂະນະທີ່ການດໍາເນີນການສິ້ນຂອງ fiberglass ເປັນ
ໄຍແກ້ວໄດ້ຮັບການຜະລິດສໍາລັບສັດຕະວັດແລ້ວ, ແຕ່ການຜະລິດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງ strands ແກ້ວຖືກຄົ້ນພົບໂດຍບັງເອີນໃນປີ 1932 ໃນເວລາທີ່. ເກມ Slayter, ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ Owens- Illinois, ກໍາ jet ຂອງອາກາດ compressed ທີ່ stream ຂອງແກ້ວ molten ແລະເສັ້ນໃຍຜະລິດໄດ້. A ສິດທິບັດສໍາລັບວິທີການຂອງການຜະລິດຂົນແກ້ວນີ້ໄດ້ນໍາໃຊ້ຄັ້ງທໍາອິດສໍາລັບໃນ 1933.Owens ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບບໍລິສັດ Corning ໃນປີ 1935. ແລະວິທີການທີ່ຖືກດັດແປງໂດຍ Owens Corning ການຜະລິດຂອງຕົນສິດທິບັດ “fibreglas” (ຫນຶ່ງ “s”) ໃນ 1936. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, fibreglas ແມ່ນຂົນແກ້ວກັບເສັ້ນໄຍ entrapping ເປັນ deal ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງອາຍແກັສ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນປະໂຫຍດປະກອບມີ, esp. ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນອຸນຫະພູມສູງ.
A resin ເຫມາະສົມສໍາລັບການປະສົມປະສານ “fiberglass” ກັບພາດສະຕິກເພື່ອຜະລິດເປັນອຸປະກອນການປະສົມໄດ້ຖືກພັດທະນາໃນ 1936 ໂດຍ du Pont. ບັນພະບຸລຸດຂອງທໍາມະຊາດຄັ້ງທໍາອິດຂອງຢາງ Polyester ທີ່ທັນສະໄຫມແມ່ນຊີມັງຂອງ 1942. ລະບົບການປິ່ນປົວ Peroxide ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍນັ້ນ. ດ້ວຍການປະສົມປະສານຂອງເສັ້ນໃຍສັງກະສີແລະຂີ້ເຫຍື້ອເນື້ອໃນອາຍແກັສຂອງວັດສະດຸດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກທົດແທນດ້ວຍພາດສະຕິກ. ນີ້ຫຼຸດລົງຄຸນສົມບັດການສນວນເພື່ອໃຫ້ຄຸນຄ່າຂອງປົກກະຕິຂອງພາດສະຕິກ, ແຕ່ວ່າໃນປັດຈຸບັນສໍາລັບຄັ້ງທໍາອິດ composite ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະສັນຍາວ່າເປັນອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງແລະການກໍ່ສ້າງ. ມີຄວາມສັບສົນ, ຜະລິດຕະພັນເສັ້ນໃຍແກ້ວຈໍານວນຫຼາຍຍັງສືບຕໍ່ຖືກເອີ້ນວ່າ “ເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ” (ເປັນຊື່ທົ່ວໄປ) ແລະຊື່ກໍ່ຖືກໃຊ້ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນແກ້ວແກ້ວທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຕ່ໍາທີ່ມີກ໊າຊແທນທໍ່ຢາງ.
Ray Greene ຂອງ Owens Corning ແມ່ນມີຊື່ສຽງໃນການຜະລິດເຮືອທໍາມະຊາດຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 1937, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດໃນເວລາອັນເນື່ອງມາຈາກລັກສະນະກະຕຸ້ນຂອງຖົງຢາງນໍາໃຊ້. ໃນປີ 1939 ຣັດເຊຍໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າໄດ້ສ້າງເຮືອທ່ອງທ່ຽວຂອງວັດສະດຸພາດສະຕິກແລະສະຫະລັດອະເມລິກາເຮືອບິນແລະປີກຂອງເຮືອບິນ. ລົດທໍາອິດທີ່ມີຮ່າງກາຍແກ້ວເສັ້ນໄຍແມ່ນຮູບແບບຕົ້ນສະບັບ 1946 ຂອງ Stout Scarab, ແຕ່ຕົວແບບບໍ່ເຂົ້າສູ່ການຜະລິດ.
ເອົາສ່ວນປະກອບທັງຫມົດໃນເຕົາໄຟຟ້າທີ່ອຸນຫະພູມສູງເຖິງ 1370 ອົງສາເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບນ້ໍາຈອກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເສັ້ນໄຍໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍອອກຈາກຫົວມ້ວນແລະມ້ວນຢູ່ທີ່ຄວາມໄວສູງກວ່າຄວາມໄວຂອງເສັ້ນໃຍສັງເຄາະທີ່ຖືກ extruded. ນີ້ແມ່ນເທົ່າກັບການຍືດຍາວໃນຂະນະທີ່ເສັ້ນໄຍອ່ອນແອ, ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໃຍນ້ອຍກ່ອນທີ່ຈະແຂງ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສ້າງເສັ້ນໃຍສັ້ນ, ມັນຈະເຮັດໂດຍການຕັດດ້ວຍລົມ. ຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນໄຍແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ
ໃນຂະບວນການ. ຖ້າບໍ່ມີການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງສ່ວນປະກອບ, ມັນກໍ່ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະລ້າງແລະເຮັດໃຫ້ແກ້ວເປັນແກ້ວແກ້ວເພື່ອປັບປຸງແກ້ວອັນບໍລິສຸດເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງເຫລັກອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ຖ້າຄຸນນະພາບຂອງສ່ວນຜະລິດຕະພັນ. ເສັ້ນໄຍຈາກແກ້ວໃນເຕົາອົບ.
“ເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ” ໃນຄໍານິຍາມຂອງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ. ມີສອງວິທີທີ່ຈະເຮັດເຊັ່ນນີ້. ເອົາເສັ້ນໃຍແກ້ວໃສ່ຊິ້ນສ່ວນຕົ້ນສະບັບ. ສະຫມັກຂໍເອົາຢາງເພື່ອຄວາມແຂງແຮງທີ່ຕ້ອງການ. ໃນເວລາທີ່ຢາງໄດ້ແຂງແຮງ, ເອົາປື້ມ fiberglass ຈາກ prototype ໄດ້. ຂັດຜິວຫນັງອອກນອກ. ການຜະລິດເຟີນິເຈີກາເຟໃນແບບນີ້ແມ່ນບໍ່ມີລາຍລະອຽດແລະຄວາມງາມທີ່ແຕກຕ່າງຈາກວິທີທີສອງໂດຍນໍາໃຊ້ແມ່ພິມ. ວິທີນີ້ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບຫຼາຍໆພາກສ່ວນ. ແຕ່ວ່າມີຂັ້ນຕອນທີ່ສັບສົນຫຼາຍກວ່າທໍາອິດ. ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງ mold ຈາກ prototype ໄດ້. ໃນເວລາທີ່ mold ໄດ້. ອົງປະກອບ fiberglass ແມ່ນຕ້ອງການ. ສ່ວນທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນເຊັ່ນດຽວກັນກັບຕົ້ນແບບທັງຫມົດ. ມັນສາມາດໄດ້ຮັບການເສີມຢູ່ໃນຫຼາຍໆພື້ນທີ່ໂດຍການເພີ່ມປະລິມານຂອງເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ.
ຂະບວນການຜະລິດເສັ້ນໃຍສັງກະສີແມ່ນເອີ້ນວ່າການປູກຝັງ. ຂະບວນການຜະລິດສໍາລັບເສັ້ນໃຍແກ້ວທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການເສີມແຮງໃຊ້ເຕົາອົບຂະຫນາດໃຫຍ່ເພື່ອຄ່ອຍໆຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງດ້ວຍດິນຊາຍ silica, ຫີນປູນ, ດິນເຜົາ, fluoropar, colemanite, dolomite ແລະແຮ່ທາດອື່ນໆ. ຫຼັງຈາກນັ້ນມັນຖືກ extruded ຜ່ານພວງມາໄລຊຶ່ງເປັນທໍ່ຂອງແຫຼວຂະຫນາດນ້ອຍໆ (ປົກກະຕິ 5-25 micrometres ໃນເສັ້ນຜ່າກາງສໍາລັບ E-Glass,9micrometres ສໍາລັບ S-Glass). ຫຼັງຈາກນັ້ນ, filaments ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂະຫນາດ (ເຄືອບ) ດ້ວຍການແກ້ໄຂສານເຄມີ. ໃນປັດຈຸບັນ, filaments ສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ຖືກມັດໄວ້ໃນຈໍານວນຫລາຍເພື່ອໃຫ້ມີສາຍ. ເສັ້ນຜ່າກາງຂອງເສັ້ນໃຍແລະຈໍານວນຂອງເສັ້ນໃຍໃນການເຄື່ອນຍ້າຍ, ກໍານົດນ້ໍາຫນັກຂອງມັນ, ໂດຍປົກກະຕິສະແດງອອກໃນຫນຶ່ງໃນສອງລະບົບການວັດແທກ: ຜົນຜະລິດ, ຫຼືເດີ່ນຕໍ່ປອນ (ຈໍານວນຮົ້ວຂອງເສັ້ນໃຍໃນຫນຶ່ງປອນວັດຖຸ; ດັ່ງນັ້ນຈໍານວນນ້ອຍກວ່າຫມາຍເຖິງການເຄື່ອນທີ່ຫນັກກວ່າ). ຕົວຢ່າງຂອງຜົນຜະລິດມາດຕະຖານແມ່ນ 225yield, 450yield, 675yield. tex, ຫຼືກຼາມຕໍ່ກິໂລແມັດ (ວິທີການຈໍານວນຫຼາຍກຼາມ 1 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກມຸງ, ຫມູນວຽນຈາກຜົນຜະລິດ, ດັ່ງນັ້ນຈໍານວນນ້ອຍກວ່າຫມາຍເຖິງການເຄື່ອນທີ່ລຸກ). ຕົວຢ່າງຂອງ tex ມາດຕະຖານແມ່ນ 750tex, 1100tex, 2200tex.
ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງນ້ໍາໃນດິນ土壤水分代谢土 are mold mold mold mold mold mold mold mold mold mold mold mold mold mold mold mold mold mold mold mold mold mold mold mold ) ຫຼືໃນຂັ້ນຕອນກາງຂອງການຜະລິດຜ້າເຊັ່ນ: mat strand (CSM) (ເຮັດດ້ວຍເສັ້ນຍາວຂອງເສັ້ນໃຍຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ມີຄວາມຍາວຕາມເສັ້ນທາງຍາວໆຂອງເສັ້ນໄຍທັງຫມົດ), fabrics ທໍ, fabrics knit ຫຼື fabrics uni-directional. ຜ້າ
ຍືດຫຍິບທ່ອນແຂນຝາຫຼື CSM ແມ່ນຮູບແບບຂອງ reinforcement ທີ່ໃຊ້ໃນ fiberglass. ມັນປະກອບດ້ວຍເສັ້ນໄຍແກ້ວທີ່ຖືກວາງໄວ້ຢ່າງສຸ່ມໃສ່ກັນແລະກັນແລະຖືກຈັບດ້ວຍກັນ.
ມັນໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍປົກກະຕິໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກການຈັດວາງມື, ບ່ອນທີ່ແຜ່ນຂອງວັດຖຸຖືກຈັດໃສ່ໃນຟອມແລະຖືກລ້າງດ້ວຍຢາງ. ເນື່ອງຈາກວ່າຕົວຖັງລະລາຍໃນຂີ້ເຫຍື້ອ, ວັດສະດຸກໍ່ໄດ້ສອດຄ່ອງກັບຮູບທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນເວລາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ຫຼັງຈາກການປິ່ນປົວຢາງພາລາ, ຜະລິດຕະພັນແຂງສາມາດເອົາມາຈາກ mold ແລະສໍາເລັດ. ການນໍາໃຊ້ທ່ອນໄມ້ທີ່ມີຟອກໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໃຍສັງເຄາະມີຄຸນສົມບັດວັດສະດຸຢູ່ໃນຊັ້ນຂອງ isotropic.
ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | Cover Fiberglass Grip Lock Grip
10 ໄຂ່ທຽນໄຂ່ຝາຜະຫນັງຫນ້າຈໍກວ້າງຫນ້າຈໍໂຄມໄຟແສງສະຫວ່າງ ການກັ່ນຕອງອາກາດ
ventilated 11. Ceiling Trellis Shades Grilles ຕາຕະລາງເພດານ, ຝາຂີ້ເຫຍື້ອ ຮົ້ວຮົ້ວ rail partition. Awnings ມ່ານ slatted
12 PegBoard ສະແດງເຄື່ອງມື hooks Shelves plank ບອດ Winnipeg ກໍາແພງຫີນຂຸມຫ້ອຍເຄື່ອງມືຈັດເກັບຂໍ້ມູນ
13 FRP Stair Tread ດັງຂັ້ນຕອນປົກປ້ອງປົກຂອບດັງແຜງ cover ຄວາມຜິດພາດພຽງ ladder ໃຍແກ້ວ
14 hdg. ກະເບື້ອງເຫລໍກຂັດຄລິບລັອກຈັບຍຶດສະກູຈັບຍຶດຈັບສະຫລັກ ເຫລໍກສະແຕນເລດ / ເຫລໍກທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ
15 ລະບົບການເຊື່ອມຕໍ່ແບບຟອມ: TieRod / ThreadBar WingNut WaterStopper
GFRP-Steel’s-ပလတ်စတစ်အမျိုးအစား-PPABS Yüzmeလျှံအပေါက်ဂဟေသံမဏိရဲ့ဘား / ခြစ်နေသည် Composite ဖန်မျှင်ထည်ဖြစ်ပါသည်: Casting, သံ Manhole မျက်နှာဖုံးများအတွက်ကျဇယား scum ရေကန် drapes / ဆန်ခါပိုက်ထုပ်ပိုက်ရေနုတ်မြောင်းအကြံအဖန်တွေချည်းပိုက်ထုပ်လူကိုအပေါက်ပိတ်ထားသည် ကိရိယာများအဆိုပါကုန်းနှီးသည့်စားပွဲတင် Clip ပီပြင်ပူးတွဲ Anchoring ။ / ဆန်ခါညှပ် Lock ကိုစွဲစေ Fastener ဘားသံမဏိ သိုလှောင် Tools များ DIY Kit ယူပြီး Scupper / လှေခါးထစ်ကိုနင်းနှာခေါင်း / ဖောက်ထား pegboard Hook စင်ပေါ်ဆန်ခါရေနုတ်မြောင်း curbed: ဖိုင်ဘာဖန်, ရေကန်၏အစွန်းန်းကျင်ပလပ်စတစ်လျတ်ယိုစီးဆန်ခါ။ သံချေးခံနိုင်ရည်သွပ်ရည်စိမ်စတီးဆန်ခါ။ ဆန်ခါထောင်ချောက်အပျက်အစီးများ, ကွန်ကရစ့်သတ်ထားခြင်းကိုသင်္ဂြိုဟ်အမှိုက်သရိုက်။ ရေတွင်းပိုက် Fiber Glass ကိုကျဇယားချွတ်အစိုင်အခဲအဖုံးထုပ်သံကိုသွန်းလေ၏။ ကြမ်းပြင် Mat နေသောလူသွားလမ်း။ hardware ချိတ်ဆွဲထားချိတ် pin ကိုပျဉ်ပြား Winnipeg ဘုတ်အဖွဲ့ perforated သံမဏိမြို့ရိုးကိုသိုလှောင်မှု tools တွေကိုဆွဲထားကြ၏။
FRP ဖိုက်ဘာမှန်ခြစ်န်ဆောင်မှုများနှင့်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် (ဓာတု Resitance, Load နိုင်ခြင်း, Method ကိုဖြတ်တောက်ခြင်း)
ဟာကင်၏အဆင့်ကျွန်မဖြစ်သင့် – အစွန်းချွတ်ဖို့ – ဖြတ်တောက်ခြင်းဇယားကွက် – ခွန်အားစမ်းသပ်ရန်။ ဓာတုခုခံဇယား ဖိုင်ဘာဖန်ကွက်၏
ဘယ်လောက်ကြာပခုံး pads ရဲ့ width ကကျေးဇူးတင်ဆန်ခါရ
ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းခြစ်ထို L-Angle အဆိုပါအကြားအဆိုပါအာကာသ။တစ်ရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါ install လုပ်နည်း။ ဒီဇိုင်းပခုံးအမြင့်, width နဲ့မထိုက်မတန်ပန်းကန်ကင်ဖို့ကိုပြင်ဆင်ရပါမည်။ အသုံးပြုမှုခွန်အားနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးသည်။ အကျယ်, ပခုံးအမြင့်မှအပြည့်အဝပြင်ဆင်ဖြစ်ပြီးရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါပန်းကန် fit မှဒီဇိုင်းရေးဆွဲရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါ Installing ။ အထွေထွေစံ သံမဏိနှင့်ပလပ်စတစ်နှစ်ခုအကျယ်အရွယ်အစား 25cm width ။ ပြီးတော့ 30cm နေကြသည်။ ဒီတော့အရူး, အကင် (အ L) ကိုကွန်ကရစ်လောင်းခြင်းမပြုမီသံမဏိသို့ထားရှိပါလိမ့်မည်ရ။ 25-30mm အမြင့်ကချန်ထားပါ။ (ကင်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. ) ကိုကြမ်းပြင်နှင့်အတူ flush fit ရန်ကင်ထားရန်။ မပြတ်မတောက်အချိန်ဘီးတပ်ကုလားထိုင်သို့မဟုတ်မှတစ်ဆင့်လမ်းလျှောက်။ တိုင်းတာ 5-10mm များအတွက်ရရှိနိုင်စေရမယ်အခါပခုံးရဲ့ width ။ အဆိုပါ
ပခုံး pads ၏အကျယ်ဆန်ခါရ။ တစ်ဦးချင်းစီအခြမ်း 3-5mm မှဆက်ပြောသည်လိမ့်မည်။2ဘက် 6-10mm ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါထွ-1 လျှပ်စစ်လိုင်း 25cm width လျှင်။ ဒါကြောင့်။ တစ်ဦးထိုင်ခုံစင်တီမီတာ 25.5-26.0 = ရဖို့ပြင်ဆင်
အဆိုပါထွ-2 ။ တစ်ကင် width ကို 30cm သုံးပြီးလျှင်။ ပခုံးစရိတ် = 30.5-31.0 စင်တီမီတာလက်ခံရရှိရန်ကိုပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်။ စားပွဲပေါ်မှာ cut-off အစွန်းဆုံးဖြတ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ Glass ကို Fiber ခြစ် FRP ခြစ် 4-side-ပိတ်-End များအတွက်ဒီဇိုင်းဖြတ်တောက်ခြင်း။ FRP ဆန်ခါမဆိုအရွယ်အစားမှာအဖြတ်ခံရနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးအက်ကွဲကို stem အဓိပ်ပါယျမရှိသောဖြစ်ပေါ်စေဖို့ဒီဇိုင်းမဟုတ်လျှင် fit မှဖြတ်တောက်ပြီးနောက်စံ 1.5×4 မီတာအကြီးစားစာရွက်များ။ တစ်ခုဖွင့်လှစ်အစွန်းတူ သငျသညျအစွန်းကို turn off ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါ။ ပထမဦးဆုံးမိန့်၏ပိတ်ပွဲနှင့်နှိုင်းယှဉ်ဇယား။အဆင်သင့်စတော့အိတ်အရောင်း FRP ဆန်ခါ၏ Wareshouse & Hotdip ဘားသံမဏိခြစ်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး အဆင်သင့် Woodstock ။ အချောရဲ့အရွယ်အစားကိုဆက်သွယ်ထားသောသံမဏိပြား 25×100 စင်တီမီတာ နှင့် 30×100 စင်တီမီတာ။
ဆန်ခါအရွယ်အစား 25×100 စင်တီမီတာနှင့် 30×100 စင်တီမီတာအရွယ်အစားစံနှုန်းဖြစ်ပြီးစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီထုတ်လုပ်မှုကိုစောင့်ဆိုင်းခြင်းမရှိဘဲ, ချက်ချင်းဖောက်သည်ရရှိနိုင်ပုံများကိုရှိပါတယ်။ အပြင်သံမဏိခြစ်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးသံချေးဟော့ Dip နှင့်အတူ coated welded သံမဏိကွက်ထဲကနေ, ဖောက်သည်များမှာလည်းရေနုတ်မြောင်းအခြားမျိုးစုံတို့အတွက်ဆန်ခါ, ပစ္စည်းအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ပလတ်စတစ် PP တင်းကျပ်, စေးကပ်အထူး PP polypropylene ခြစ်ခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆန်ခါဆန်ခါဖိုင်ဘာဖန် FRP ဖိုက်ဘာမှန်ဆန်ခါ, ထိုကဲ့သို့သောဇယားကွက်လျတ်အစွန်းရေကူးကန်ကို ABS လျှံရေကူးခြစ်အဖြစ်ဒေသများရှိ applications များ၏သဘောသဘာဝပေါ် မူတည်. ။ ကျွမ်းကျင်မှုတိကျတဲ့ရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါစံအထုပ်နှင့်အတူထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီသံမဏိမဟုတ်သောစလစ်လှေကားထစ်သံလမ်းရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါအပေါငျးတို့သအမျိုးအစားများပါဝင်သည်။ ဆန်ခါနေသောလူသွားလမ်း ဦးထုပ်တွေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်လယ်ပြင်၌စသည်တို့ကိုရေကူးကန်, ငါးရေကန်နေသောလူသွားလမ်း, ရေကူးမီးဖိုချောင်, ကော်ဖီဆိုင်, ကုန်တိုက်ကြီးတွေ, စက်ရုံတွေ, စျေးကွက်များအတွက်စံပြ။ ဖိုင်ဘာ # 1 လုပ်ကြံသောအားဖြင့်ဖြတ်တောက်နည်းလမ်းဖြတ်တောက်ခြင်း FRP ခြစ်။ FRP ခြစ်မြို့ပတ်ရထားလွှဓါးသွား, စိန် #2ဖြတ်တောက်အသုံးပြုခြင်း Method ကိုဖြတ်တောက်ခြင်း။
Process ကိုတိုင်းတာခြင်းနည်းလမ်းများနှင့် cutting- #3တိုင်းတာခြင်း FRP ခြစ်။
FRP ဖိုက်ဘာမှန်ခြစ်စမ်းသပ်လက်မှတ်ဓာတုခံနိုင်ရည်ဖိုင်ဘာဖန်ကွက်အားဖြည့်များ၏အစွမ်းသတ္တိကိုစမ်းသပ် CHANCON တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနှင့်ပြည့်စုံ Know-ဘယ်လိုထောက်ပံ့ တောင်းဆိုချက်ကိုအပျေါမှာ, သင့်ရဲ့ site အခြေအနေများကိုက်ညီသောနည်းပညာ Solutions သည်။
***** 1 ပေါ်တွင်အခြေခံဖိုင်ဘာဖန်၏ဇယားကွက် load ရန်စွမ်းရည်) ကိုတောင်လျော့နည်းအင်အားနှင့်အတူဇယားကွက်ရဲ့ width ။ 2) ဇယားကွက်၏အထူ။ သငျသညျအကင်ဆိုင်ကပိုပြီးအစွမ်းသတ္တိကိုရကြလိမ့်မည်သည့်ထူနိုင်။ ဖိအား 3) တစ်ဦးပုံစံ။ အလေးချိန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းသောအချက်အဖြစ်ဖြန့်ဝေသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကုမ္ပဏီဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
Manhole Cover စမ်းသပ်ခြင်းလက်မှတ်
မျက်နှာဖုံးပိုက်မိလ္လာစနစ်အားပိတ်ထားစမ်းသပ်အကြံပေးအဖွဲ့အဖုံး။ပစ္စည်း FRP ဖိုက်ဘာမှန်နှိုင်းယှဉ် / ပစ္စည်း Fiber Glass ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ ကျဇယားပလပ်စတစ်သံကိုနှင်ထုတ်
ရေတွင်းပိုက်ရေနုတ်မြောင်းပိတ်အဖုံးကို Install လုပ်နည်း
Frame ကတပ်ဆင် Method ကိုအတူ Manhole Cover ။
ဖွင့်လှစ်-နီးစပ်ဖို့ကိုဘယ်လို Manhole Cover နှင့်အတူ Frame က။ကောင်းမွန်သော Wear ပြီးတိုက်စားမှုများကိုခုခံရှိထားသောကြောင့်ဒါဟာ JobsDB.com ကသံချေးသလားပါနဲ့ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်: မရှိနိုင်ပါကောင်းမွန်သော Wear ပြီးတိုက်စားမှုများကိုခုခံမှာပြန်လည်အသုံးပြုသည်တန်ဖိုးကတည်းကနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အဘယ်သူမျှမပြဿနာကိုခိုးယူ JobsDB.com တန်ဖိုး 1 .: ဒါဟာဖြေရှင်းတော်မူမည် Recover
30 ကျော်နှစ်များဒါဟာ JobsDB.com Be ပြီးတော့အသုံးပြုသောအပေါ်နိုင်သလား: 2. Long ကဝန်ဆောင်မှုဘဝက။ ဒါဟာ JobsDB.com Hermetically အသုံးပြုသောအပေါ် Be, အထိရောက်စွာ Cesspool မှစ. ထဲကပေါက်ကြား၏သူများသည်အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့ကာကွယ်မည်နိုင်သလား: အဘယ်သူမျှမဆိုယင်းကောင်းပြီချိတ်ပိတ် 2.000.000 ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သည့်လှုပ်ခြင်း၏အတွေ့အကြုံမှာ crack ရှိပါသလား
လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်သေတ္တာများအတွက် 3. အလင်း, အလေးချိန်အမြင့်ဆန့စွမ်းဆောင်ရည်အကြောင်းတစ်ဦးအမြင့်ဝန်: စွမ်းဆောင်ရည်အကြောင်း၎င်း၏အမြင့်ဝန်အဆိုပါကျော်လွန်။ ထိုအ insulator တွင်လည်းစံသံ, ကျဇယားထောက်ပံ့
ဒါဟာ JobsDB.com အဆိုပါဒီဇိုင်းသည်အသုံးပြုသူများရဲ့ဆိုသညျကားဝယ်လိုအားအရခံရမှာနိုင်သလား: 4. အခမဲ့ Design- ။ အရောင်, ပုံစံ, သတ်မှတ်ချက်အဘယ်သူမျှမဆိုအပါအဝင် ရှိပါတယ်မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်သလိုကားများဖြတ်သန်းသည့်အခါပြန်ခုန်ထွက်: စကားပြောခြင်း။
မည်သည့်အရွယ်အစားနှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်အမိန့်မှဖန်ဆင်း 5. ကျဇယားသံပစ္စည်းမှနှိုင်းယှဉ်အဖြစ်ရွေးချယ်နိုင်ယှဉ်ပြိုင်စျေးရှိပါတယ်။
အဆိုပါဖိုက်ဘာဖန်၏ဂုဏ်သတ္တိများ GFRP ဖန်မျှင်ထည်ဗီနိုင်းဗဓေလသစ်စားနပ်ရိက္ခာအဆင့်အားဖြည့်။
ဖိုက်ဘာမှန်အဓိပ္ပာယ် | Fiber Glass ကိုကဘာလဲ။
ဖန်မျှင်ထည်ထုတ်ကုန်များ နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဖန်မျှင်ထည်စစ်ကူပလတ်စတစ်သို့မဟုတ် Glass ကိုစစ်ကူ Composite သို့မဟုတ်ဆက်ပြောသည်ခှနျအားပလပ်စတစ်ပစ္စည်းများကို input ကို၏ဘာသာပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ (အတူတူလာမယ့်ပစ္စည်းထက်ပိုမိုနှစ်မျိုးရှိပါတယ်) အားဖြည့်ပလပ်စတစ်အောင်ဖို့အသုံးပြုပစ္စည်းများပျော့ပေမယ့်စေးကပ်ကြည့်သောက “ဖိုင်ဘာ” ဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မားသောအပူခုခံ အသုံးပြုတဲ့ပလပ်စတစ်အမဲသားဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်တန်ဖိုးထားသောတစ်ဦးကမျိုးစိတ်။ အားဖြည့်ခြင်းမရှိဘဲပျက်စီးလွယ်သည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ပလပ်စတစ်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ။ polyester ဗဓေလသစ် Ester ။ ဗီနိုင်း Ester York မြို့ resins ။ ထိုအ epoxy resins အတူပေါင်းစည်းပြီးနောက်အရာထိုကဲ့သို့သောအရည်ပလပ်စတစ်အဖြစ်ပလတ်စတစ်။ အကူအညီဓာတ်ကူပစ္စည်းသို့မဟုတ်ခိုင်မာစေဓာတုတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ကြသည်။ အပူကို 100 အထက်ဖြစ်ပေါ်? C. ဒါဟာခက်ခဲပလပ်စတစ်ဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းစဉ်ဟုခေါ်ဝေါ်သော, တဖန်ပြန်လာဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ အပူထိန်းကိရိယာဆက်တင်များ (Thermoseting) ။
အရှင်အထက်တွင်အားဖွငျ့ထုတ်ကုန်ကိုဖန်ဆင်း၏။ ဒါဟာအဖြစ်လူသိများသည် ပလပ်စတစ်ဖိုက်ဘာမှန်သို့မဟုတ်ရိုးရိုးဖိုက်ဘာမှန်ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်အက်ဖ် RP အဖြစ်လူသိများ FRP နှင့်အတူအားဖြည့်။
ဖန်မျှင်ထည်သို့မဟုတ်ဖန်မျှင်ဖိုင်ဘာအမျိုးအစားအရသိရသည်နှစ်ခုအမျိုးအစားသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်ဝိုင်ယာကြိုးကြိုး (ပုံ 2) (ဖိုက်ဘာမှန်ထည်) အထည်သို့ယက်နိုင် (ပုံ 1 ကိုကြည့်ပါ) ဆင်တူသည်, အထည်ရေစားသုံးမှုအပူကာကွယ်ပေးသည်ကိုစုပ်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အများစုမှာထိုကဲ့သို့ကုလားကာမီးဘေးအဖြစ်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ချထားလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါဖိုက်ဘာဆက်မပြတ်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအတိုအမျှင်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏလျှပ်ကာနှင့်အထူစာရွက် (ပုံ3ကိုကြည့်ပါ) အရာသံကို insulator တွင်လည်း, အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
optical အမျှင်များ၏ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းစိုင်း (silica သဲ) ကိုအရည်ပျော်မှတ်လျှော့ချရန်နှစ်ခုဒြပ်ပေါင်းများကိုအပြီးအဆောက်အဦးပစ္စည်း, ဖန်, ဆိုဒါပြာ (ဆိုဒါပြာ) အဖြစ်အသုံးပြုနဲ့ထုံး (ထုံးကျောက်) ဖြစ်ပါတယ်။ သုံးဦးစလုံးနှင့်ထိုကဲ့သို့သော borax (borax) ပါးစပ်တွင်းကြောကျခဲ (feldspar) calcined alumina (calcined alumina) magnesite (magnesite) အမည်ဖြင့် Affi အဖြစ်ဖိုင်ဘာ၏ဂုဏ်သတ္တိများအမှီတိုးတက်စေရန်အသုံးပြုကြသည်အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများပါဝင်နိုင်အတွက်အဓိကပါဝင်ပစ္စည်း။ cyanide (nepheline syenite) နှင့် kaolin ရွှံ့ (kaolin, ရွှံ့)
ဗဓေလသစ်၏ -Definition polyester အရောင်။
။ ဤကဲ့သို့သောဘုံ polyester ဖိုင်ဘာကဲ့သို့တူညီသောဓာတုဖွဲ့စည်းမှုရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်ထုပ်ပိုးအတွက်အသုံးပြုရန်အဖြစ်, လျှပ်စစ်လျှပ်ကာအဖြစ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးအဖြစ် (ကရုပ်ရှင်အဖြစ် extruded သောဗဓေလသစ်အဖြစ်: အမျိုးမျိုးသောဒြပ် resins သို့မဟုတ်ပလတ်စတစ်ပါဝင်သည်ဟုသို့မဟုတ် polyester ကနေဖန်ဆင်းတော်မဆို သံလိုက်အသံဖမ်းတိပ်ခွေများအတွက်အခြေစိုက်စခန်း) က c: styrene နှင့်ဝသကဲ့သို့ copolymerization ခြင်းဖြင့်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ () တစ်ဦး glycol နှင့် maleic အက်ဆစ်သို့မဟုတ် fumaric အက်ဆစ်ကနေဖွဲ့စည်းခဲ့တစ်ဦးအဖြစ်တစ်ခုသစ်ရွက် polyester, (ရာမှဖန်ဆင်းသော thermosetting ဗဓေလသစ်) နှင့်မကြာခဏဖန်အဖြစ် Filler (နဲ့အတူအားဖြည့်။ အမျှင်) နှင့်ကြောင်း impregnating နှင့်လမိုင်းနှင့်သွန်းခြင်းနှင့်ပုံသွင်းထုတ်ကုန်အောင်အတွက်အထူးသဖြင့်အသုံးပြုသည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖိုက်ဘာမှန်လို့ခေါ်တဲ့အပူလျှပ်ကာပစ္စည်းအဘို့, ဖန်သိုးမွှေးကိုကြည့်ပါ။ ဖန်ခွက်ကိုဖိုက်ဘာကိုယ်နှိုက်များအတွက်လည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖန်ဖိုင်ဘာတွေ့မြင်, ဖိုက်ဘာမှန်ကိုခေါ်။ အားဖြည့်ဖိုင်ဘာကာဗွန်မျှင်ဖြစ်သည့်အတွက်အလားတူပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများအဘို့, Carbon-fiber-အားဖြည့်ပေါ်လီမာကိုကြည့်ပါ။ ဖန်မျှင်ထည် (သို့မဟုတ်ဖိုက်ဘာမှန်) ကိုအားဖြည့်ဖိုင်ဘာအထူးဖန်ဖိုင်ဘာသည်အဘယ်မှာရှိဖိုင်ဘာ-အားဖြည့်ပလတ်စတစ်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဖန်ဖိုင်ဘာကျပန်း, စီစဉ်ပေး (ကကုန်တယ်ကမ်းနားလမ်းဖျာခေါ်) တစ်စာရွက်သို့ပြား, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးထည်သို့ယက်နိုင်ပါသည်။ အများဆုံးမကြာခဏ epoxy, polyester ဗဓေလသစ် – – သို့မဟုတ် vinylester, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး thermoplastic အဆိုပါပလပ်စတစ် matrix ကိုတစ်ဦး thermosetting ပလပ်စတစ်ဖြစ်နိုင်သည်။
အဆိုပါဖန်မျှင်အဆိုပါဖိုက်ဘာမှန်အသုံးပြုမှုပေါ် မူတည်. ဖန်၏အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများကိုဖန်ဆင်းနေကြသည်။ ဤရွေ့ကားမျက်မှန်အားလုံး silica သို့မဟုတ် silicates, ကယ်လစီယမ်၏အောက်ဆိုဒ်၏ကွဲပြားပမာဏနှင့်အတူ, မဂ္ဂနီဆီယမ်, တခါတရံဘိုရွန်ဆံ့။ ဖိုက်ဘာမှန်များတွင်အသုံးပြုခံရဖို့, ဖန်မျှင်ချွတ်ယွင်း၏အလွန်နိမ့်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူလုပ်ခံရဖို့ရှိသည်။
ဖန်မျှင်ထည်ခိုင်ခံ့ပေါ့ပါးပြီးပစ္စည်းဖြစ်ပြီးအများအပြားထုတ်ကုန်များအတွက်အသုံးပြုသည်။ ကကာဗွန်ဖိုင်ဘာအပေါ်အခြေခံပြီးဖွဲ့စည်းမှုကဲ့သို့ခိုင်ခံ့တောင့်တင်းမဟုတ်ပေမယ့်, ကလျော့နည်းကြွပ်ဆတ်သည်, နှင့်၎င်း၏ကုန်ကြမ်းအများကြီးစျေးသက်သာရှိပါတယ်။ ၎င်း၏အမြောက်အများခွန်အားနှင့်အလေးချိန်လည်းအများအပြားသတ္တုများထက် သာ. ကောင်း၏ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပိုအလွယ်တကူရှုပ်ထွေးပုံစံမျိုးစုံသို့ပုံသွင်းနိုင်ပါတယ်။ ဖိုက်ဘာမှန်၏ Applications ကိုလေယာဉ်, စက်လှေ, မော်တော်ကား, ရေချိုး tubs နှင့်ပူးတွဲ, ရေကူးကန်များ, ပူ tubs, မိလ္လာကန်င့်ကားများ, ရေလှောင်ကန်, မိုးမိုး, ပိုက်, ဝတ်, ပျော်စေ, surfboards နှင့်ပြင်ပတံခါးကိုအရေခွံများပါဝင်သည်။
ဖိုက်ဘာမှန်အခြားဘုံအမည်များကိုဖန်-အားဖြည့်ပလပ်စတစ် (GRP) ဖြစ်ကြောင်း,  ဖန်-ဖိုင်ဘာပလတ်စတစ် (GFRP) အားဖြည့်  သို့မဟုတ် (ဂျာမန်များထံမှ?: Glasfaserverst Rkter Kunststoff) GFK ။ ဖန်ဖိုင်ဘာကိုယ်နှိုက်ကတစ်ခါတစ်ရံ “ဖိုက်ဘာမှန်” အဖြစ်ရည်ညွှန်းသောကြောင့်, ပေါင်းစပ်လည်း “ဖိုက်ဘာမှန်အားဖြည့်ပလပ်စတစ်။ ” ဟုခေါ်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည် “ဖိုက်ဘာမှန်” ဟုပြည့်စုံဖန်ဖိုင်ဘာကိုရည်ညွှန်းကြောင်းစည်းဝေးကြီးမဟုတ်ဘဲသာအတွင်းဖန်ဖိုင်ဘာထက်, ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းအားဖြည့်ချမှတ်မည်ဖြစ်သည်။
FRP ဖိုက်ဘာမှန်သမိုင်း | ဖိုက်ဘာမှန်အကြောင်းကိုမှာ။
တချို့ကတစ်ဦးပေါင်းစပ်ပစ္စည်းအဖြစ် “ဖိုက်ဘာမှန်” ဟုလူသိများ။ ဒါမှမဟုတ်အားဖြည့်ပလတ်စတစ် ကားတစ်စီးခေါင်မိုးသို့မဟုတ်ရေချိုးထုတ်လုပ်ရန်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့, “ဖန်မျှင်ထည်” “ဖိုင်ဘာ” ဖြစ်ပါတယ်တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ချက်အမျှင်ပလတ်စတစ်အစေးအားဖြည့်ခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအမိုးမိုးပစ်ကပ်စည်ပိုင်းလှေ, လေယာဉ်ပျံအစိတ်အပိုင်းများ, အသေးစားအကြံပေးအဖွဲ့ရဲ့အရွယ်အစားအဖြစ်ထုတ်ကုန်သို့ပုံသွင်းကူညီရန်ပစ္စည်းများအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်ကိုဆိုလိုသည်။ ပြိုင်ကားကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်း Glass ကိုဖိုင်ဘာကွန်ကရစ်ထုတ်ကုန် (Glass ကိုစစ်ကူကွန်ကရစ်အားဖြည့် ,. ထို့အပြင်စသည်တို့ကို GRC), ခွန်အားဂုဏ်သတ္တိများ။ ကျွန်မအလွန်မြင့်မားဆန့တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိရှိသည်။ ဖိုင်ဘာကိုလည်းဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ် အပူလျှပ်ကာအဖြစ် အမျှင်ထည်သို့ယက်နှင့်ဖွဲ့စည်းပုံသို့ချုပ်နိုင်ပြီးပစ္စည်းများထို့အပြင်တည်ဆောက်ခြင်း, ရေခဲသေတ္တာသို့မဟုတ်မီးဖိုအတွက်လျှပ်ကာအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထားထုတ်ကုန်များ တစ်ဦးကဖိုင်ဘာ padding ကို အဆိုပါထောင်ချောက်အပူပိတ်ဆို့ဖို့စွမ်းရည်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ အတွင်းပိုင်းအပေါ်သင့်လျော်သောထည်ကျောထောက်နောက်ခံ။ A ကောင်းဆုံး insulator တွင်လည်းအဖြစ်တစ်ဦးရေခဲသေတ္တာသို့မဟုတ်တစ်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအင်္ကျီ။ ရေစုပ်ယူရာမှအဘယ်သူမျှမထည်အမျှင်။ တစ်ရေစိုခံအထည်ကိုသုံးပါ ကျုံ့ခြင်းနှင့်ရေကိုအဘယ်သူမျှမသက်ရောက်မရှိပါ။
ဖိုင်ဘာအရွယ်အစားနှင့်အရှည်အရွယ်အစား။ Threadlike အမျှင်တာရှည်မည်အကြောင်း အလွန်တိုတောင်းသောအမျှင်ရန်အလွန်ရှည်လျားငါအဝတ်အချည်းစည်းမျက်စိနဲ့မမြင်ရနိုင်အောင်။ စိုင်းထုံးကြောကျ, feldspar, boric acid ကိုများနှင့်အခြားသည်၏ဖန်ဖိုင်ဘာအစိတ်အပိုင်းများတို့ကိုလည်းလုပ်လေ၏။ သွန်းသောအတွင်းပိုင်း အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအရောအနှောအဖြစ်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောအရာ 1370 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်, အထိအပူချိန်မှာလျှပ်စစ်မီးဖိုထဲ။ သငျသညျအကောင်းကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ရန်ကြည်လင်ဘောလုံးကိုမလိုအပ်ပါဘူး။ သွန်းသောဖန်ထို့နောက်ကိုလှိမ့ဖြစ်စဉ်ကိုကြာမြင့်စွာဖိုင်ဘာ re-ထဲသို့ဝင်သည်။ အဆိုပါဖိုက်ဘာဘုတ်အဖွဲ့ကနေဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ နှင့်ဖိုင်ဘာ၏အမြန်နှုန်းထက် သာ. ကြီးမြတ်တဲ့မြန်နှုန်းမှာလှိမ့်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ extrusion ခေါင်းကိုထဲကဖိ။ ဤသည်အားနည်းဆက်လက်တည်ရှိသည့်အမျှင်န့ဆွဲ၏ညီမျှသည်။ အဆိုပါဖိုက်ဘာအရွယ်အစား solidification မတိုင်မီငယ်များ Long ကအမျှင်မကြာခဏကုလားကာကိုလုပ်ဖို့အသုံးပြုကြပါတယ်။ တိုတောင်းသောအမျှင်ဖြစ် သူကတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအရှည်ကွာဖို့လေဖြင့်ဖြတ်ခဲ့သည်။ ဤသည်လူကြိုက်များသည့်တိပ်ခွေသို့မဟုတ်ထည်အောင်မှဦးဆောင်။ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆူညံသံမှကာကွယ်ရန် အပူချိန်နှင့်အလင်း
“ဖန်မျှင်ထည်” ဟုလူသိများသည့်အားဖြည့်ပစ္စည်း၏ဘာသာစကားကိုပါ။ ကားတစ်စီး၏ခေါင်မိုးတွင် သို့မဟုတ်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိလိုအပ်ကြောင်းအစိတ်အပိုင်းများ။ အဆိုပါရှေ့ပြေးပုံစံပွတ်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဖယောင်းပုံတူ ရှေ့ပြေးပုံစံအစိတ်အပိုင်းများအပေါ်ဖိုက်ဘာမှန်အထည်ချထားပါ။ ဖိုက်ဘာမှန်ရှေ့ပြေးပုံစံအစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းဆွဲထုတ်ဖြစ်လျှင်, ဗဓေလသစ်ခိုင်မာစေသောသည့်အခါလိုအပ်သောအထူမှဗဓေလသစ်-ခိုင်မာစေရောနှောနှင့်အတူခြယ်သပွတ်မျက်နှာပြင် finish ကိုဖြစ်ကြသည်။ ဖိုက်ဘာမှန်တဲ့အပိုင်းအစ Creating, ဒီချဉ်းကပ်မှုအသေးစိတ်များနှင့်မှိုအသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းကနေလှလှပပကွဲပြားခြားနားသောကင်းမဲ့။ ဒါဟာအစိတ်အပိုင်းများများအတွက်စံပြဖြစ်ပေမယ့်ပထမဦးဆုံးနည်းလမ်းထက်အများကြီးပိုရှုပ်ထွေးရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးအမှိုရှေ့ပြေးပုံစံအစိတ်အပိုင်းများတည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ အခါမှို ထိုအခါဖိုက်ဘာမှန်ချင်နေတဲ့အပိုင်းအစဖန်တီးပါ။ တူညီသောဗေဒနှင့်ဖွဲ့အစိတ်အပိုင်းများ။ မာစတာအားလုံး ထိုအခါအထူတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်တိကျသောဒေသများရှိအားဖြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဖိုက်ဘာမှန်၏အကွိမျမြားစှာအလွှာ
ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်အမျိုးမျိုးသော၏ပစ္စည်းများဖန်မျှင်ထည်ထုတ်လုပ်မှု။ ဘယ်ကဲ့သို့သောမျက်စိ, အရေပြား, အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ system အဖြစ်, ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေဖြစ်တယ်, ဒါသတိထားပါနှင့်ဖိုက်ဘာမှန်တဲ့အပိုင်းအစလုပ်နေစဉ်တွင်အကာအကွယ်ပစ္စည်းကိရိယာများဝတ်ဆင်
Glass ကိုအမျှင်ရာစုနှစ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြ ပေမယ့်ဖန် strands ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုမတော်တဆ 1932 တဲ့အခါမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဂိမ်းများ Slayter, Owens- မှာသုတေသီ အီလီနွိုက်ပြည်နယ်, သွန်းသောဖန်ခွက်တစ်စီးမှာ compressed လေထုတစ်ဂျက်ညွှန်ကြားခြင်းနှင့်အမျှင်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖန်သိုးမွှေးထုတ်လုပ်ရာ၏ဤနည်းလမ်းကိုများအတွက်တစ်ဦးကမူပိုင်ခွင့်ကိုပထမဆုံး 1933.Owens အတွက်လျှောက်ထားခဲ့သည် 1935 အတွက် Corning ကုမ္ပဏီနှင့်အတူဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါနည်းလမ်းကို Owen Corning နေဖြင့်အဆင်ပြေအောင်ခဲ့ပြီး မူလက 1936 ခုနှစ်က၎င်း၏မူပိုင်ခွင့် “fibreglas” (တဦးတည်း “ကိုယ့်”) ထုတ်လုပ်ရန်, fibreglas ESP တစ်ခု insulator တွင်လည်းအဖြစ်အသုံးဝင်သောအောင်, သဘာဝဓာတ်ငွေ့များစွာသောသဘောတူညီချက် entrapping အမျှင်နှင့်အတူတစ်ဖန်သိုးမွှေးခဲ့သည်။ ecially မြင့်မားတဲ့အပူချိန်မှာ။
တစ်ဦးပေါင်းစပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရန်ပလပ်စတစ်နှင့်အတူ “ဖိုက်ဘာမှန်” ပေါင်းစပ်ပြီးများအတွက်သင့်လျော်သောဗဓေလသစ် du ပိုတငျးသဖြင့် 1936 ခုနှစ်တွင်တီထွင်ခဲ့သည်။ ခေတ်သစ် polyester resins ၏ပထမဦးဆုံးဘိုးဘေး 1942. ပါအောက်ဆိုဒ်တင်နိုင်စနစ်များ Cyanamid ရဲ့ဗဓေလသစ်ထို့နောက်အားဖြင့်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုက်ဘာမှန်ရဲ့ပေါင်းစပ်မှုနှင့်အတူနှင့်ပစ္စည်းများ၏ဓာတ်ငွေ့အကြောင်းအရာဗဓေလသစ်ပလပ်စတစ်ဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ ဒါဟာပလပ်စတစ်၏ပုံမှန်တန်ဖိုးများဖို့ insulator တွင်လည်းဂုဏ်သတ္တိများလျှော့ချပေမယ့်ယခုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အစုပေါငျးနေတဲ့အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့်အဆောက်အဦးပစ္စည်းအဖြစ်ကြီးစွာသောခွန်အားဗလနှင့်ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောပြသခဲ့သည်။ Confusingly, ဖိုင်ဘာဖွဲ့စည်းမှု (ကယေဘုယျအမည်အဖြစ်) “ဖိုက်ဘာမှန်” နှင့်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုဆက်လက်အများအပြားဖန်လည်းဓာတ်ငွေ့အစားပလပ်စတစ််နိမ့်-သိပ်သည်းဆဖန်သိုးမွှေးထုတ်ကုန်များအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
Owen Corning ၏ ray ဂရင်း 1937 ခုနှစ်တွင်ပထမဦးဆုံးစုပေါငျးလှေထုတ်လုပ်အတူအသိအမှတ်ပြုပေမယ့်အသုံးပြုတဲ့ပလပ်စတစ်၏ကြွပ်ဆတ်သဘောသဘာဝကြောင့်အချိန်တွင်နောက်ထပ်ရှေ့ဆက်မပေးခဲ့ပါဘူး။ 1939 ခုနှစ်တွင်ရုရှားကလေယာဉ်၏လေယာဉ်ကိုယ်ထည်နှင့်အတောင်ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းများကိုတစ်ခရီးသည်တင်လှေဆောက်လုပ်ထားရှိသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုခဲ့သည်။ တစ်ဖိုင်ဘာ-ဖန်ခန္ဓာကိုယ်ရှိသည်ဖို့ပထမဦးဆုံးကားရဲရငျ့စှာပွော Scarab တစ်ဦး 1946 ရှေ့ပြေးပုံစံခဲ့ပေမယ့်မော်ဒယ်ထုတ်လုပ်မှုမဝင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းဖိုင်ဘာဖန်၏ဖြစ်စဉ်ကို Fiber Glass ကိုအားဖြည့်။
ရေဖန်ခွက်အရနိုင်ရန်အတွက် 1370 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိအပူချိန်မှာလျှပ်စစ်အရည်ပျော်အားလုံးကိုပါဝင်ပစ္စည်းများယူလာပါ။ ဒါဟာထို့နောက်ဘုတ်အဖွဲ့ကနေဆွဲထုတ်ပြီး extrusion ခေါင်းထိပ်မှသည် extruded သောဖိုင်ဘာ၏အမြန်နှုန်းထက် သာ. ကြီးမြတ်တဲ့မြန်နှုန်းမှာလှိမ့်ခဲ့သည်ဖိုင်ဘာအားဖြင့်ကြာမြင့်စွာဖိုင်ဘာသို့လှိမ့်။ ဤသည်ဖိုင်ဘာ hardening ရှေ့တော်၌သေးငယ်အောင်, အအမျှင်အားနည်းသွားနိုင်ပါတယ်စဉ်, ဆွဲဆန့်နှင့်ညီမျှသည်။ ဒါကြောင့်လေတိုက်လုပ်ကြံသောအားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်တိုတောင်းသောအမျှင်စေရန်။ အဆိုပါအမျှင်ကွာကွဲပြားခြားနားသောအရှည်ရှိသည်နိုင်
အရည်ပျော်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်သို့သော်။ အဲဒီမှာပါဝင်ပစ္စည်းများမရှိအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုသည်စင်ကြယ်သောရေနှင့်ထို့နောက်သူကထပ်ဖန်စလတ်ဆတ်တဲ့အရည်ပျော်ရေ auditioning ရှေ့မှာမကြည်လင်ဘောလုံးကိုသို့ဖန်အရည်ပျော်ဖို့လိုအပ်သောခဲ့လျှင်။ အဆိုပါပါဝင်ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးပါ။ ဒါဟာမှာအားလုံးမီးဖိုပေါ်ရေဖိုင်ဘာဖန်ရှင်းပြီနိုင်ပါသည်။
အားဖြည့်ပစ္စည်း၏အဓိပ္ပါယ်ကိုအတွင်းအဆိုပါ “ဖန်မျှင်ထည်” ။ ဖယောင်းပုံတူနှင့်အတူဖြစ်စေပထမဦးဆုံးရှေ့ပြေးပုံစံအစိတ်အပိုင်းများကိုပွတ်မျက်နှာပြင်ကိုအသုံးပြုပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ရှေ့ပြေးပုံစံအစိတ်အပိုင်းများအပေါ်ဖိုက်ဘာမှန်အထည်ချထားပါ။ လိုအပ်သောအထူမှဗဓေလသစ်-ခိုင်မာစေရောနှောနှင့်အတူပန်းချီ။ အဆိုပါဗဓေလသစ်ခိုင်မာစေသောသောအခါ, ဖိုက်ဘာမှန်ရှေ့ပြေးပုံစံအစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းဆွဲထုတ်။ အဆိုပါပွတ်မျက်နှာပြင် finish ကို။ ဒီချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူဖိုက်ဘာမှန်တဲ့အပိုင်းအစ Creating အသေးစိတ်မရှိခြင်းနှင့်ဒုတိယမှိုကနေလှလှပပကွဲပြားခြားနားသည်။ ဤနည်းလမ်းကိုမြောက်မြားစွာအစိတ်အပိုင်းများအဘို့သင့်လျော်သည်။ သို့သျောလညျးကိုပထမဦးဆုံးနည်းလမ်းထက်နှေးကွေးနေသေးတယ်ဖြစ်စဉ်ကို။ ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးအမှိုရှေ့ပြေးပုံစံအစိတ်အပိုင်းများတည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ အခါမှို ထိုအခါဖိုက်ဘာမှန်ချင်နေတဲ့အပိုင်းအစဖန်တီးပါ။ ရှေ့ပြေးပုံစံအဖြစ်တည်ဆောက်ထားအစိတ်အပိုင်းများလှပပြည့်စုံဖြစ်ကြသည်။ နှင့် Multi-အလွှာဖန်ဖိုင်ဘာ၏အထူတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်တိကျသောဒေသများရှိအားဖြည့်နိုင်ပါတယ်။
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖိုက်ဘာမှန်များ၏ဖြစ်စဉ်ကို pultrusion ဟုခေါ်သည်။ [ကိုးကားလိုအပ်] အားဖြည့်များအတွက်သင့်လျော်သောဖန်မျှင်များအတွက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းစဉ်သည်တဖြည်းဖြည်းအရည်ပုံစံဖို့ silica သဲ, ထုံးကျောက်, kaolin ရွှံ့, fluorspar, colemanite, မိုက်နှင့်အခြားသတ္တုဓာတ်အရည်ပျော်ဖို့ကြီးမားသောမီးဖိုများကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့နောက်အလွန်သေးငယ် orifices (E-Glass ကိုများအတွက်ချင်းထုံးစံအတိုငျး 5-25 မီတာ S-Glass ကို9မီတာ) ၏အထုပ်နေသောချုံပုတ်, မှတစ်ဆင့် extruded ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားနန်းကြိုးအမျှင်လေးများထို့နောက်ဓာတုဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူ (coated) သုံးနိုင်ကြသည်။ တစ်ဦးချင်းစီနန်းကြိုးအမျှင်လေးများယခုလှည့်လည်သည်ကြီးမားသောနံပါတ်များအတွက်ကို bundle နေကြသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်နှစ်ခုတိုင်းတာခြင်းစနစ်များတဦးတည်းအတွက်ဖော်ပြဆိုင်သောကိရိယာတန်ဆာပလာများ၏အချင်းများနှင့် roving အတွက်နန်းကြိုးအမျှင်လေးများ၏နံပါတ်၎င်း၏အလေးချိန်ဆုံးဖြတ်ရန်: ပေါင်နှုန်းအထွက်နှုန်း, ဒါမှမဟုတ်ကိုက် (ပစ္စည်းတစ်ပေါင်အတွက်အမျှင်ဓာတ်၏ကိုက်၏နံပါတ်; အရှင်သေးငယ်တဲ့နံပါတ်) တစ်ဦးလေးလံ roving ဆိုလိုသည်။ စံအထွက်နှုန်း၏ဥပမာ 225yield, 450yield, 675yield ဖြစ်ကြသည်။ Tex, ဒါမှမဟုတ်ကီလိုမီတာနှုန်းဂရမ် (မည်မျှဂရမ်အထွက်နှုန်းအနေဖြင့် inverted ချိန်, roving 1 ကီလိုမီတာ; အရှင်သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကတစ်ဦးပိုမိုပေါ့ပါး roving ကိုဆိုလိုသည်) ။ စံ Tex ၏ဥပမာ 750tex, 1100tex, 2200tex ဖြစ်ကြသည်။
ဤရွေ့ကား rovings ပြီးတော့တိုက်ရိုက်အသုံးပြုကြသည်ဖြစ်စေ ဝိုင်ယာကြိုး (ပိုက်) အကွေ့အကောက်များသော, ထိုကဲ့သို့သော pultrusion အဖြစ်ပေါင်းစပ်လျှောက်လွှာတစ်ခု automated သေနတ်အတိုအရှည်ထဲသို့ဖန် chops နှင့်ဗဓေလသစ်တစ်ခုဂျက်သို့ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်တစ်ဦးမှို၏မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့စီမံကိန်းရှိရာ, သေနတ် (roving ။ ), သို့မဟုတ်ကြားခံခြေလှမ်းအတွက် ထိုကဲ့သို့သောကုန်တယ်ကမ်းနားလမ်းဖျာ (CSM) အဖြစ်ပိတ်ထည်ထုတ်လုပ် () အားလုံးအတူတကွကပ်လျက်တည်ရှိဖိုင်ဘာ၏ကျပန်း oriented အသေးစားဖြတ်အလျား၏ လုပ်. , ယက်အထည်, ပိတ်ထည်သို့မဟုတ် uni-directional အထည်ဖှဲ့။ -Strand ဖျာကုန်တယ်ခံရ
ကုန်တယ်-ကမ်းနားလမ်းဖျာပု CSM အသုံးပြုသောဒေသအလိုက်လုပ်ကြံအားဖြည့်အပေါ်ဖန်မျှင်ထည်ထဲမှာပုံစံတခုဖြစ်သို့မဟုတ်ထည့်ပါ။ ဒါဟာဖြတ်ပြီးကျပန်းထားကြ၏ဖန်မျှင်ပါဝင်ပါသည် တစ်စာအုပ်ချုပ်သမားများကအတူတူတစ်ဦးချင်းစီကတခြားနဲ့ကျင်းပခဲ့တယ်။
ဒါဟာပုံမှန်အားပစ္စည်းစာရွက်များတစ်ဦးမှိုထဲတွင်နေရာနှင့်ဗဓေလသစ်နှင့်အတူ brushed နေကြသည်ရှိရာလက်ကို တင်. -up, technique ကိုသုံးပြီးလုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစာအုပ်ချုပ်သမားဗဓေလသစ်များတွင်ပျော်သောကြောင့်ထွက် wetted သောအခါ, ပစ္စည်းကိုအလွယ်တကူကွဲပြားခြားနားသောပုံစံမျိုးစုံမှညီ။ အဆိုပါဗဓေလသစ်ကုသပြီးနောက်, ခိုင်မာထုတ်ကုန်မှိုကနေခေါ်ဆောင်သွားခြင်းနှင့်ကိုလက်စသတ်နိုင်ပါတယ်။ ကုန်တယ်ကမ်းနားလမ်းဖျာအသုံးပြုခြင်း isotropic In-လေယာဉ်ပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူတစ်ဖိုက်ဘာမှန်ပေးသည်။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအဘို့အသိမှတ်-ဘယ်လိုဆန်ခါ။ http: ။ // ဖန်မျှင်ထည်ခြစ် – ဦးထုပ်သံမဏိပိုက်ထုပ် pitting com ။
1. ချေး Resistance ကိုအဘယ်သူမျှမချေး။ ထိုအချေးသည်ခုခံရေး
2. အပူချိန် Resistance ကိုဖန်မျှင်ထည်ထုတ်ကုန်များအလွန်ကောင်းစွာအပူ။ အသုံးပြုသောဗဓေလသစ်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. -30 ကနေ +120 မှအပူချိန်ကိုဆီးတားနိုင်သ
အလေးချိန်: 3. Lightweight ။ ပေါ့ပါးဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်4ကြိမ်ထက်ပေါ့ပါးသံမဏိ။ ဓာတ်လှေကားမှလွယ်ကူအောင် စုဝေးခွင့်နှင့်တပ်ဆင် သိမ်းဆည်းကုန်ကျ
built ခံရဖို့အား: 4. Flextural အစွမ်းသတ္တိ။ ရေစိုခံတာဒါမှမဟုတ် crack
5. Long-တည်တံ့: မဟုတ်သောပျက်စီးသို့မဟုတ်ချေး-ခံနိုင်ရည်တည်ငြိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မျှကျုံ့ကောင်းသည်
ပွတ်တိုက်၏ 6. အနိမျ့ကိန်း: အရေပြားချောမွေ့နိမ့်ပွတ်တိုက်စေ
တဲ့: 7. လျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှု။ အပူလုပ်ဆောင်သွားရန်ပါဘူး insulator တွင်လည်းနှင့်
8. ပြုပြင်ခြင်း: အင်အားသုံး majeure ၏အဖြစ်အပျက်၌တည်၏။ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုပြုပြင်ကြရနိုင်သည့်အခါ။
9. အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်း: ASTM ၏ဒီဇိုင်းနှင့်တွက်ချက်စံချိန်စံညွှန်းများ။ , JIS ဘီ, BS နှင့် Din ဖြစ်ပါတယ်
10. ထိုအခါ Resistance, ခရမ်းလွန်-Grossy မှ: တက်ကြွအရောင်။ နေရောင်ခြည်နှင့်ခရမ်းလွန်မှခံနိုင်ရည််လင်း
တစ်ခုကတစ်ဦးချင်းစီဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဖန်ဖိုင်ဘာခိုင်မာသောနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ် ယင်း၏ဝင်ရိုးတလျှောက်သည်တင်းမာမှုများနှင့်ကြောင်းချုံ့-In နှင့်ခိုင်ခံ့သော။ ကဖိုက်ဘာ compression အတွက်အားနည်းနေကြောင်းကိုယူဆခံရပေမဲ့, ဒါဟာအမှန်တကယ်သာရှည်လျားသောအချိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပုံပေါ်စေသည်သောဖိုင်ဘာ၏ , ဆိုလိုသည်မှာပုံမှန်ဖိုင်ဘာရှည်လျားကျဉ်းမြောင်းသောကွောငျ့, ကခါးပတ်ကိုအလွယ်တကူ  အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဖန်ခွက်ကိုဖိုက်ဘာညှပ်-လျှင်၎င်း, ထို့ကြောင့်၎င်း၏ဝင်ရိုးတစ်လျှောက်သည်အတွက်အားနည်းနေတယ်။ ။ ။ အမျှင်တစ်ဦးစုဆောင်းမှုအပြီးအပိုင်စီစဉျနိုငျ တဲ့ပစ္စည်းအတွင်းဦးစားပေးလမျးညှနျခ၌၎င်း, သူတို့ချုံ့အတွက် buckling ခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ပါသည်လျှင်, ပစ္စည်းကြောင့်ဦးတည်ချက်အတွက်ဦးစားခိုင်မာတဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။
ထို့အပွငျ, အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ထိပ်ပေါ်မှာဖိုင်ဘာ၏မျိုးစုံအလွှာကိုတင်သောအားဖြင့်အမျိုးမျိုးနှစ်သက်သောလမ်းညွန်အတွက် oriented တစ်ဦးချင်းစီအလွှာနှင့်တကွ, ပစ္စည်းရဲ့ခြုံငုံတောင့်တင်းခြင်းနှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုထိထိရောက်ရောက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဖိုက်ဘာမှန်မှာ, အမြဲတမ်းဒီဇိုင်နာကရွေးချယ်လမ်းညွန်ဖို့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဖန်မျှင်ဖိအားသောပလပ်စတစ် matrix ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်တယ်ကမ်းနားလမ်းဖျာနှင့်အတူ, ဒီ directionality မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တစ်ခုလုံးကိုနှစ်ခုရှုထောင်လေယာဉ်၏, ရက်ပိတ်ထည်သို့မဟုတ် unidirectional အလွှာနှင့်အတူ, တောင့်တင်းခြင်းနှင့်အစွမ်းသတ္တိ၏ directionality ပိုပြီးတိကျစွာလေယာဉ်အတွင်းထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးကဖိုက်ဘာမှန်အစိတ်အပိုင်းပုံမှန်အားဖြင့်ပါးလွှာသောသည် တစ်ခါတစ်ရံ surfboards ၏ဖြစ်ရပ်၌ရှိသကဲ့သို့, အခြေခံအဆောက်အဦးရေမြှုပ်နှင့်အတူအတွင်းပိုင်းအပေါ်ဖြည့် “shell ကို” ဆောက်လုပ်ရေး, ။ အဆိုပါအစိတ်အပိုင်းနီးပါးမတရားပုံသဏ္ဍာန်၏ဖြစ်နိုင်သည် ကိုသာ shell ကိုထုတ်လုပ်အတွက်အသုံးပြုသည့်မှို၏အရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်သည်းခံခြင်းအားဖြင့်ကန့်သတ်ထား။
ပစ္စည်းများများ၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအကြီးအကျယ်မှီခိုနေသည် ၎င်းအစေး (AKA matrix) နှင့်အမျှင်နှစ်ဦးစလုံး၏ပေါင်းစပ်ဖျော်ဖြေပွဲပေါ်မှာ။ ဥပမာအားဖြင့်, ပြင်းထန်သောအပူချိန်အခြေအနေ ( ပေါင်းစပ်၏ 180 ကျော်? ကို C) ဗဓေလသစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်ဗဓေလသစ်နှင့်ဖိုင်ဘာ၏နှောင်ကြိုးယိုယွင်း၎င်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်။  ။ သို့သော် GFRPs နေဆဲသိသိသာသာကျန်နေတဲ့ဖျောပွနိုငျ မြင့်မားသောအပူချိန် (200? ကို C) ကြုံနေရပြီးနောက်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံသွင်းဖိုက်ဘာမှန်ဆန်ခါနှင့် pultruded ဖိုက်ဘာမှန်သံမဏိအခင်းထုတ်ကုန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အထူးသဖြင့်အခါ, ပွိုချေးခုခံဂုဏ်သတ္တိများများကိုဆန်ခါ။ ခွန်အားကိုရှည်သောအသက်နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုလည်းထုတ်ကုန်ဆန်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိုက်ဘာမှန်၏သာလွန်အရည်အသွေးတွေဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ရဲ့လျှပ်စစ်သည် non-ကူးမှုဂုဏ်သတ္တိများသူတို့ကိုကြမ်းပြင်ဆန်ခါများအတွက်စံပြ option ကိုလုပ်ရမည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်သင့်ရဲ့ကွဲပြားခြားနားတင် application များအတွက်ဆန်ခါဖိုက်ဘာမှန်များစွာသောအမျိုးအစားများကိုဆက်ကပ်။ application များဆန်ခါဖန်မျှင်ထည်ဗိသုကာနေရောင်စိစစ်ခြင်းနှင့်ဖိုက်ဘာမှန်အခင်းကနေစံဖို့အတွက် walkway နှင့်မြင့်မားသောဝန်ကိုလှိမ့ applications များအထိ။ grit မျက်နှာပြင်များနှင့်စံစတော့ရှယ်ယာအရောင်များသို့မဟုတ်ထုံးစံအရောင်များသည်သင်၏ဖိုက်ဘာမှန်လျှောက်လွှာကိုက်ညီမှထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ သင့်ရဲ့ချေးခုခံလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရန်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့ကြောင်းတစ်ဖိုက်ဘာမှန်အခင်းထုတ်ကုန်ဘို့ငါတို့ထုံးစံဗဓေလသစ်အမျိုးအစားများအနေဖြင့်ရွေးချယ်ပါ။
ဆန်ခါဖန်မျှင်ထည်ပုံသွင်း နေတဲ့, One-Piece ပုံသွင်း Panel ကိုဖွဲ့စည်းရန်ခိုင်ခံ့, ဖန်မျှင်ထည် rovings resins Thermosetting နေကြသည်နှင့်အတူပေါင်းစပ်တစ်ဦးကဖန်မျှင်ထည်-စစ်ကူပလတ်စတစ် (ထို FRP) Is ။ တစ်ဦးက 65% / 35% ဗဓေလသစ်မှ ဖန်အလေးချိန်အချိုးမြင့်မားတဲ့ချေးခုခံပေးပါသည်။ Meniscus မျက်နှာပြင်များသို့မဟုတ်လျှောက်ထား grit မျက်နှာပြင်များစလစ်များကို သံမဏိအခင်းများနှင့်အခြားအခင်းထုတ်ကုန်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဒီအဆန်ခါထုတ်ကုန်များအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သင့်တော်ပါတယ်ဖန်မျှင်ထည် တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်မှာ။ Pultruded, ဖန်မျှင်ထည်ခြစ် pultruded
ဖန်မျှင်ထည်ခြစ် pultruded ။ပရီမီယံတန်း isophthalic polyester, သုံးပြီးလုပ် ပါကချေး, ခံနိုင်ရည်ပေါ့ပါးပြီးအကြမ်းခံအောင်, တစ်ဒြပ် Surface ကုလားကာနှင့်အတူဗီနိုင်း Ester သို့မဟုတ်ဖင်နိုလစ်ဗဓေလသစ်စနစ်များကို။ Pultruded ဖိုက်ဘာမှန်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုများအတွက် grit မျက်နှာပြင်ရှိပါတယ် နှင့်ဆန်ခါပုံသွင်းဖိုက်ဘာမှန်ထက်အလေးချိန်အချိုးတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ။ တစ်ဦးက 35% / 65% ဗဓေလသစ်မှ ဖန်အချိုး သာ. ကွီးမွတျအစှမျးသတ်တိနှငျ့ဆန်ခါပုံသွင်းဖိုက်ဘာမှန်ထက်လျော့နည်းချေးခုခံပေးပါသည်။ ဒီထုတ်ကုန်ရှည် span များအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သင့်တော်ပါတယ် ဖိုက်ဘာမှန်အခင်း၏။
ခြစ်ဖုံးအုပ်ဖန်မျှင်ထည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုက်ဘာမှန်ဆန်ခါဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ long- ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗဓေလသစ်စနစ်များကိုမဆိုအတူထုတ်လုပ်သောချောမွေ့ gritted သို့မဟုတ်စစ်ပန်းကန်နှင့်ပုံသွင်းဆန်ခါပေါင်းစပ်ကြောင့်ရေရှည်တည်တံ့, ပုံသွင်းဖိုက်ဘာမှန်အခင်းထုတ်ကုန်။ ဒါဟာကြမ်းပြင်ဆန်ခါအခါစံပြရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ် လိုအပ်ချက်များကို 100% ဖုံးလွှမ်းခံရဖို့။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုက်ဘာမှန်ဆန်ခါမကြာခဏအတွက်အသုံးပြုသည်ဖုံးလွှမ်း နေတဲ့ခိုင်မာတဲ့, အဆငျ့မျက်နှာပြင်စံပြသည်အဘယ်မှာရှိမြင့်မားသောခြေလျင်နှင့်လှည်းယာဉ်အသွားအလာနှင့်အတူတင်နှင့်သိုလှောင်မှုဒေသများ။ ဒါဟာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 50% ပိုမိုမြင့်မားတောင့်တင်းတန်ဖိုးများကိုကမ်းလှမ်း ပွင့်လင်းကွက်ဆန်ခါ၏ထက်နှင့်၎င်း၏စံ grit-ထိပ်တန်းအဖုံးလုံလုံခြုံခြုံခြေကုပ်အာမခံထား။
ကျည်ဆံကိုခံနိုင်ရည်ဖန်မျှင်ထည်ပြား ကျွန်ုပ်တို့၏ကျည်ဆံခံနိုင်ရည်ဖိုက်ဘာမှန်ပန်းကန်ထက်သာလွန်ပဲ့ထိန်းတပ်ကမ်းလှမ်း တဲ့အလေးချိန်မှာခုခံထက်နည်း 25% ဟာနှိုင်းယှဉ်သံမဏိ panel က၏။ များအတွက်စီးပွားဖြစ်လုံခြုံရေးဖိုက်ဘာမှန် application များအတွက် Now ကိုရရှိနိုင်ပါ ကသင်၏စီးပွားရေး, အိမ်မှာသို့မဟုတ်အစိုးရမဟုတ်သောစက်ရုံ, ဤဖိုက်ဘာမှန်ပြားများကြာရှည်ခံမှု, ချေးခုခံ, လျှပ်စစ် Non-စီးကူး, အနိမ့်အပူစီးကူးခြင်းနှင့်အလင်းအလေးချိန်၏နောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ရည်အားသာချက်များနှင့်အတူပဲ့ထိန်းတပ်ခံနိုင်ရည်လုံခြုံရေးကိုဆက်ကပ်။
မိုးသည်းထန်စွာ Duty ဖန်မျှင်ထည်ခြစ် ကျွန်ုပ်တို့၏မိုးသည်းထန်စွာတာဝန်ဖိုက်ဘာမှန်ဆန်ခါအတွင်းရှိရရှိနိုင်ပါသည် နှစ်ဦးစလုံးပုံသွင်းခြင်းနှင့် pultruded ဆန်ခါစနစ်များကို။ ဆန်ခါမိုးသည်းထန်စွာတာဝန်ဖိုက်ဘာမှန်နှစ်ယောက်စလုံးအမျိုးအစားများဖြစ်ကြောင်း ရိုးရာပုံသွင်းကြောင်း forklift နှင့်လယ်ထွန်စက်-နောက်တွဲယာဉ်ဝန်သယ်ဖို့ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်ကုန်ဆန်ခါ pultruded FRP ကိုထောကျပံ့ဖို့ဒီဇိုင်းကြသည်မဟုတ်။ မိုးသည်းထန်စွာတာဝန်ဖိုက်ဘာမှန်ဆန်ခါအဘို့ သာ. ကြီးသက်တမ်းကိုထောက်ပံ့ပေး အဖြစ်ကောင်းစွာပိုမိုမြင့်မားတဲ့ volume အသွားအလာဒေသများ။ ထို့အပြင်အကြီးစား Duty ဖန်မျှင်ထည်ခြစ်နိုင်ပါသည် ဆန်ခါရိုးရာဖိုက်ဘာမှန်ထက်အခမဲ့ span ရှည်အကွာအဝေးလေ့ရှိတယ်။
ဖန်မျှင်ထည်လှေခါးထစ်ကိုနင်းနယ်နှင့်ဖန်မျှင်ထည်လှေခါးထစ်ကိုနင်းမျက်နှာဖုံးများ ။ ပေါ့ပါးခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသော, ဖိုက်ဘာမှန်လှေကားထစ် နင်းပလက်ဖောင်းဆန်ခါအဆိုပါဖိုက်ဘာမှန်ကြမ်းပြင်ကိုက်ညီမှနှစ်ဦးစလုံးပုံသွင်းခြင်းနှင့် pultruded အမျိုးအစားများရရှိနိုင်ကြသည်။ ဖန်မျှင်ထည်လှေကားထစ်နင်းအဖုံးတစ်ဦးအနေဖြင့်ထားကြပါတယ် ချေးကြောင်းပုံသွင်းဖန်နှင့်အစေးစနစ်နှင့်ယဉ်ပါး, မီးနှောင့်နှေးခြင်းနှင့် Non-ကူးမှု impact ။ သူတို့ကတစ်ဦးကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်သော, slip- များကို ကွန်ကရစ်, သတ္တုနှင့်သစ်သားခြေလှမ်းများများအတွက်ခံနိုင်ရည်အကာအကွယ်မျက်နှာပြင်။
ဖန်မျှင်ထည်ခြစ် Handrails နှင့်ဖန်မျှင်ထည်လှေကား ဖန်မျှင်ထည်ခြစ် Handrails နှင့်ဖန်မျှင်ထည်လှေကားဖန်မျှင်ထည် handrail စနစ်များ pultruded ဖိုက်ဘာမှန်အစိတ်အပိုင်းများကနေလုပ်ကြံနှင့် thermoplastic connectors ပုံသွင်းနေကြသည်။ handrail စနစ်များကိုဆန်ခါကျွန်ုပ်တို့၏ modular ဖိုက်ဘာမှန်ရရှိနိုင်ပါ မည်သည့်အမြင့်ဆုံးယာဉ်အသွားအလာဧရိယာအဘို့ထိုသူတို့စံပြအောင်,2လက်မစတုရန်းသို့မဟုတ်ချုပ်ကိုင်ဖို့လွယ်ကူဖြစ်ကြောင်း2လက်မပတ်လည် configurations ၌တည်၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုက်ဘာမှန်လှေကားနှင့်အိတ်များ install လုပ်ထားနိုင်ပါတယ် အစှမျးသတ်တိနှငျ့မှီခိုနှစ်ပေါင်းများစွာပေး, etc င့်ကားများ, အဆောက်အဦးများ, Piers, ခရီးဆောင်ပစ္စည်းကိရိယာများမှ sump ပန့်များကနေ application များအမျိုးမျိုး၌တည်၏။
ဖန်မျှင်ထည်ပူးတွဲပါနှင့်ဖန်မျှင်ထည်ဗီဒီယိုအပိုင်းအစများချိတ်တွဲမှုများနှင့်ဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုဆန်ခါကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုက်ဘာမှန်အထူးနေကြသည် အဆိုပါထောက်ပံ့အဆောက်အဦမှဆန်ခါသို့မဟုတ်ပြားဖိုက်ဘာမှန် secure ဖို့ဒီဇိုင်း။ ထို့အပြင်သူတို့အတူတကွစွဲစေရန်အသုံးပြုကြသည် ဝန်-သွေးဆောင် differential ကို deflecton နဲ minimize လုပ်သောကပ်လျက်ဆန်ခါပြား။ အားလုံးဖိုက်ဘာမှန် attachment များကိုနှင့်ဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုဖန်ဆင်းနေကြသည် အမျိုးအစား 316 သံမဏိနှင့် 1- အတွက်ရရှိနိုင်ပါ, 1-1 / 2- နှင့်2လက်မအရွယ်အရွယ်အစား။
ဖိုက်ဘာမှန်များအပြား ကသူတို့ကိုတစ်ဦးလမ်းလျှောက်မျက်နှာပြင်ကို Safe နှင့်စီးပွားရေးဖြေရှင်းချက် Are စေသည်က Non-A, ကူးမှုမျက်နှာပြင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအထူးပြုလုပ်ပါ။ caustic နှင့် / သို့မဟုတ်အက်ဆစ်အခြေအနေများအတွက်, ဖိုက်ဘာမှန်ပြားသံမဏိထက်ထိရောက်သောမတူညီသောနှင့်ပိုပြီးကုန်ကျကြောင်းချေးခုခံတဲ့အဆင့်အထိကိုပေး။ ဖန်မျှင်ထည်ပန်းကန်တစ်ဦးမဟုတ်သောနှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည် grit မျက်နှာပြင်သို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်စလစ်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲလိုအပ်သည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦး grit မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ။
ဖိုက်ဘာမှန်၏ဤဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအသွင်သဏ္ဌာန်, ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်မျှင်ထည်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပုံသဏ္ဍာန်နှင့် Pultruded ဖန်မျှင်ထည် Profiles ဖန်မျှင်ထည်နဲ့အစေး Thermosetting စနစ်များရဲ့ပေါင်းစပ် မှစ. ထားကြပါတယ်။ အားလုံးပုံစံမျိုးစုံကိုခံနိုင်ရည်, impact ပေါ့ပါးဖြစ်ကြောင်း , Non-သံလိုက်နိမ့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကူးမှုအနိမ့်နှင့်ရှုထောင်တည်ငြိမ်မှုရှိသည်, တော်တော်များများ application များအတွက်တပ်ဆင်ရန်နှင့်စံပြသူတို့ကိုလွယ်ကူသောအောင်။ မိမိစိတ်ကြိုက်ပုံစံမျိုးစုံတောင်းဆိုမှုကိုအပေါ်သို့ရရှိနိုင်ပါသည်။
Composite (GFRP) ခြစ်: ဘာလဲ GFRP (Glass ကို Fiber စစ်ကူပလတ်စတစ်)? GFRP ပိုကောင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများဖွဲ့စည်းရန်ရည်ရွယ်, ဖိုင်ဘာနှင့်အတူအားဖြည့်မယ့်ပေါ်လီမာ matrix ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ GFRP ထိုကဲ့သို့သောသတ္တု, သစ်သား, မှန်, ကွန်ကရစ်အဖြစ်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ GFRP ပစ္စည်းများသည်အခြားထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းများဆန့်ကျင်အဖြစ်အရေးကြီးသောအားသာချက်ရှိပါတယ်, အသစ်သော features တွေလိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ GFRP ခြစ်ကဘာလဲ? ပုံသွင်း GFRP ခြစ်စိုစွတ်သောအလွှာပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအထူးမှိုအတွက်ထုတ်လုပ်နေကြပြီး, ဖန်ဖိုင်ဘာ, ဗဓေလသစ်နောက်ထပ်နှင့်ခြယ်ပစ္စည်းထားရှိရေး။ ဤအကုန်ကြမ်းခိုင်မာစေပြီးနောက်, GFRP ခြစ်မှိုထဲကဖိနေကြသည်။ ပုံသွင်း GFRP ခြစ်, အလင်း, Anti-တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းမြင့်မားသောဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခုခံတွန်းလှန်နဲ့လျှပ်စစ် Non-ကူးမှုရှိသည်။ components: resins, ဖန်ဖိုင်ဘာနောက်ထပ်နှင့်ခြယ်ပစ္စည်းဟာ GFRP ပစ္စည်းများ၏အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြသည်။ ဤအစိတ်အပိုင်းများပြောင်းလဲနေတဲ့အားဖြင့်လိုအပ်ချက်များအတွက်သင့်လျော်သောမည်သည့်ပစ္စည်းကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဗဓေလသစ်: ဓာတုခုခံ, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့် GFRP ခြစ်၏ခရမ်းလွန်ခုခံသည့်အစေးကဆုံးဖြတ်ကြသည်။ resins ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အညီရှေးခယျြခဲ့ကြသည်; အလွန်လေးလံသောဓါတုပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် orthophthalic ယေဘုယျအသုံးပြုမှုများအတွက်ဗဓေလသစ်, ဓာတုပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် isophthalic ဗဓေလသစ်နှင့်ဗီနိုင်း Ester စေး။ Glass ကို Fiber: Multi-အလွှာစဉ်ဆက်မပြတ်ဖန်မျှင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ ပုံသွင်း GFRP ခြစ်ဖန်ဖိုင်ဘာကြောင့်မြင့်မားတဲ့စက်မှုခုခံရှိသည်။ အပိုဆောင်း: ထိုကဲ့သို့သောခရမ်းလွန်တည်ငြိမ်စေအဖြစ်အပိုဆောင်း, မီးလျှံနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်အနိမ့်သောမီးခိုးသိပ်သည်းဆနှောင့်နှေးစက်မှုနှင့်ဓာတုခုခံတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အသစ်သောသာလွန် features တွေထည့်ပါ။ ဆေးရောင်စုံစက္ကူ: ခြယ်ပစ္စည်းဟာ GFRP မဆို color ကို gratings ပေးဖို့ဖြစ်နိုင်ပါစေ။ ဤသည်ကဗိသုကာစီမံကိန်းများတွင် GFRP ခြစ်သုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပျက်စေသည်။
ပုံသွင်းခြစ်အောကျခံခုံ Fibergrate Adjustments ခြစ်အောကျခံခုံမြင့်မားသောဆန်ခါပလီကေးရှင်းကိုထောကျပံ့ဖို့ဒီဇိုင်းအရည်အသွေးမြင့်အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ရဲ့သတ်မှတ်ထားသောအကွာအဝေးအတွင်းအပြတ်အသတ်ချိန်ညှိ, စံအောကျခံခုံလက်ဝါးကပ်တိုင် Brace နှင့်အတူဆန်ခါပလက်ဖောင်းနှင့်ထုံးစံအောကျခံခုံမြှင့်ခြေရင်းမြင့်အထက်ထပ်မြှင့်နိုင်ပါ။ အောကျခံခုံ “1-1 / 2” 1 ရရှိနိုင်ဖြစ်ကြပြီး2“နက်ရှိုင်းသောစတုရန်း Fibergrate သို့မဟုတ် Chemgrate ပုံသွင်းဖိုက်ဘာမှန်ခြစ် mesh ။ အောကျခံခုံအကြီးအကဲများအတွက်ကောငျးအလှနျနေကြတယ်” ကြင်ဖော်မဲ့ဦးခေါင်း “နဲ့” ကို Quad ဦးခေါင်း “မွငျ့မား၏, အမြန်လုံခြုံပြီးချွေ installation ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်ဒီဇိုင်း။ ပလက်ဖောင်း• Adjustments – ။ စွယ်စုံ•ကြမ်းပြင် sloping အပေါ်အဆင့်အထိလမ်းလျှောက်မျက်နှာပြင် Create – အားလုံး Fibergrate နှင့် Chemgrate စတုရန်းကွက်ခြစ်များအတွက်ရရှိနိုင်•ကုန်ကျစရိတ်အကျိုးသက်ရောက် – အနိမျ့ installation ကိုကုန်ကျစရိတ်ကိုအလွယ်တကူနဲ့အခြားဒေသများသို့ပြောင်းရွှေ့ပေါ့ပါး• – ရွေ့ပြောင်း ,.
အောကျခံခုံ Support ဆန်ခါ ဖန်မျှင်ထည်ခြစ်? ဆန်ခါအောကျခံခုံအချိန် မှစ. အချိန်ထောက်ပံ့ပေးသည်, FRP ဆန်ခါရိုးရာထောက်ခံမှုနှင့်ဘောင်နည်းလမ်းများသုံးပြီးအသုံးပြုသောသို့မဟုတ်ပြုပြင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမသင့်တော်ဖြစ်ကြသည်မရနိုင်ဖြစ်စေဘယ်မှာနေသောလူသွားလမ်းဒေသများရှိထောက်ခံခံရဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကြမ်းပြင်ဆန်ခါဆိုင်းငံ့ထားထိုကဲ့သို့သော, ဓာတု Bundeli, မွောကျကြမ်းပြင်ပလက်ဖောင်း & အလုပ်စခန်းများ, ဓာတုကုသမှုထိုးစက်ရုံအခန်း, ရေနုတ်မြောင်းကြမ်းပြင်နှင့်အလုပ်နေရာများအနှံ့မှပေါက်ဖွားလာသူမဟုတ်တဲ့စလစ်နေသောလူသွားလမ်းလက်လှမ်းအဖြစ်ဒေသများ, cable ကိုလှေကားပိုက်အလုပ်နှင့်အောက်လျှပ်စစ်ဝန်ဆောင်မှုများ, ဒေသများဖုံးကွယ်, ပြေး။ မဟုတ်တဲ့ကူးမှုဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ FRPP အောက်ခံကြောင်းဆန်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ FRP ကြမ်းပြင်မြှင့်, ငါတို့ဆန်ခါ၏ကွက်ပုံစံသို့လင့်ထားသည်နိုင်ပါတယ်ထောက်ခံပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်ခါ၏ပြားတူညီသောဧရိယာ၌မျိုးစုံအောကျခံခုံဖျက်သိမ်းရေးတအောက်ခံပေါ်တွင်ပူးပေါင်းနိုင်ပါသည်။ လိုအပ်လျှင်ကျယ်ပြန့်အခြေစိုက်အောကျခံခုံကြမ်းပြင်မှ fixed နိုင်ပါတယ် ,. လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်ခါ၏ထိပ်, ငါတို့ 316 s / s ကိုသုံးပြီးကိုက်ညီရန်ကလစ်ပ်ဆင်းကိုင်ထားပါ။ ဒီအမြင့်မားသောဝန်ယူနိုငျသောကာအလွန်အစိုင်အခဲအခြေစိုက်စခန်း, ပေးပါသည်။ အထွဋ်၏အကွာအဝေးအတွက်သာရရှိနိုင်နှင့်မညီမညာဖြစ်နေသောကြမ်းပြင်ထားရှိရန်လုံးဝချိန်ညှိ, ငါတို့သည်သင်တို့၏လျှောက်လွှာနှင့်ကိုက်ညီရန်အောက်ခံထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
, လှေခါးထစ် Solutions ဟာ FRP Translate – လှေခါးထစ်ကိုနင်းနယ် , ဖန်မျှင်ထည်ထိုအခါနင်း, လှေကားထစ်, လှေကားထစ်အဖုံးပုံသွင်းဖြည့်စွတ် Pultruded ခြစ် installation ကိုတစ်ခုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဤရွေ့ကားချေးနှင့်စလစ်ကိုခံနိုင်ရည်နင်းထုတ်လုပ်နေကြသည် တစ်သတ်မှတ်မြင်နိုင်နှာခေါင်းနှင့်အရှိဆုံးစိန်ခေါ်မှု enviroments မှာဘေးကင်းလုံခြုံခြေကုပ်ပေး။ လှေခါးထစ်နင်းနဲ့အဖုံးကို cut ထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ် အတိအကျဖောက်သည်သတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားဖို့ဒါမှမဟုတ်အလွယ်တကူလုပ်ကြံ Field ဖြစ်ကြောင်းစတော့ရှယ်ယာပြား၌တည်၏။
လှေကားထစ်နင်းအဖုံးနေဆဲဖွဲ့စည်းပုံအသံကဖြစ်ကြောင်းရှိပြီးသားနင်းဘို့အစိုင်အခဲစလစ်-ခံနိုင်ရည်ခြေကုပ်များကိုတစ်ဦးအဆင်ပြေနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ လှေခါးထစ်နင်းအဖုံးသစ်သား, ကွန်ကရစ်သို့မဟုတ်သတ္တုနင်းကျော် installed နိုင်ပါသည်။ စံစက်မှုဇုန်အရောင်အလွန်မြင်နိုင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအဝါရောင်နှာခေါင်းနှင့်ဗိသုကာ application များအတွက်အလင်းမီးခိုးရောင်နှင့်အတူမှောင်မိုက်မီးခိုးရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အရေးပါသောလူမီနီယမ်အောက်ဆိုဒ် grit-ထိပ်တန်းမျက်နှာပြင်အမြင့်ဆုံးလုံခြုံမှုနှင့်အလွန်အကြမ်းခံနင်းမှုအတွက်လုံခြုံခြေကုပ်ပေးစွမ်းသည်။ သက်တမ်းတစ်ရက်ဖန်ခွက်ဖျာနှင့်အတူအားဖြည့်ခြင်းနှင့်ခုခံ impact အဲဒီနင်း width မှာလုပ်အတွက်လာဖုံးလွှမ်း။ အဆိုပါစံအထူမိုးသည်းထန်စွာတာဝန် application များအတွက်ရရှိနိုင်အမျိုးမျိုးသောအထူအဖုံးများဖြစ်ပါတယ်။ စံရှည်လျားပြားကိုအလွယ်တကူတပ်ဆင်စဉ်အတွင်းအရွယ်အစားဖြတ်, ဒါမှမဟုတ်ထုံးစံအရှည်မှ precut ရရှိနိုင်ကြသည်။
င်း၏နှာခေါင်း: Fiber ပန်းကန်လှေကားထစ်နင်းအဖုံးများ ကမူလတန်းအလင်းအရင်းအမြစ်ကိုဖယ်ရှားခဲ့ပြီးပင်ပြီးနောက်တောက်စေခြင်း, နှာခေါင်းဧရိယာများအတွက်အထူးင်း၏အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူအမိန့်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ အထူးနှာခေါင်းအရာလှေကား၌စုံလငျဖွစျပါသညျ ပါဝါပြတ်တောက်, အလင်းရောင်အခါအားလျော်စွာရီနာကှငျးနှင့်ဖျော်ဖြေပွဲခန်းမထဲမှာရှိသကဲ့သို့သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောခရီးသည်တင်သင်္ဘောများပေါ်တွင်အဖြစ်ပြင်ပပလီကေးရှင်းညအချိန်စစ်ဆင်ရေးများအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတိုင်းအတာအဖြစ်မှိန်သည်အဘယ်မှာရှိပြင်ပတွင် accessways ကာလအတွင်းအရေးပေါ်ထွက်ပေါက်အဖြစ်ဝတ်ပြုကြလော့။ ဒီအထူးနှာခေါင်းအညီစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ခရီးသည်သင်္ဘောပေါ်အနိမျ့တည်နေရာ Lighting – က ISO / TC သင်္ဘောနှင့်ရေကြောင်းနည်းပညာနှင့်အတူ။
ဖန်မျှင်ထည်ခြစ်> FRP ကိုနင်းနယ်> ကိုနင်းမျက်နှာဖုံးများ ဆုပ်ကိုင်။ TreadGrip အချို့သည်သာလွန် features တွေဖြစ်ကြသည်။ ကြာရှည်ခံမှု: TreadGrip isophthalic polyester ဗဓေလသစ်နှင့်အတူ impregnated ဖန်ယက် matting တစ်ဦးအရည်အသွေးမြင့်ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစွမ်းအင်ကိုစုပ်ယူနှင့် TreadGrip ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ ပင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ၏အလုပ်အများဆုံးအတွက်၎င်း၏ရှည်လျားသောဘဝသေချာ။ ခုခံတွန်းလှန်ချော်: ကာဗွန်နှင့်ဆီလီကွန် grit ၏တစ်ဦးဝင်းကိုခံနိုင်ရည်တစ်ထိပ်တန်းစလစ်ပေးနဲ့ Hard မျက်နှာပြင်ဝတ်ထားဖျင်၏နောက်ဆုံးအလွှာတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ချေးကိုခံနိုင်ရည်: TreadGrip ဓာတုပစ္စည်းများကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးမှခံနိုင်ရည်နှင့်ပင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ၏ harshest အတွက်အသုံးပြုရန်ဿုံသင့်လျော်သည်။ ဓာတုခုခံတောင်းဆိုချက်အပေါ်ရရှိနိုင်လမ်းညွှန်ထားပါတယ်။ TreadGrip ၏ဘက်စုံ: install လုပ်ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့။ ထိုသို့သောကွန်ကရစ်, သံမဏိသို့မဟုတ်သစ်သားအဖြစ်နီးပါးမည်သည့်မျက်နှာပြင်မှလျှောက်ထားခံရဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
နှစ်ဦးစလုံးပုံသွင်းခြင်းနှင့် pultruded ဆန်ခါ profile များကိုခုနှစ်တွင်ထောက်ပံ့ရေး FRP လှေကားထစ်နင်း။ စက်မှုနှင့်ပြည်တွင်းနှစ်ခုလုံး applications များနှင့်ကိုက်ညီရန်, isopthalic, ဗီနိုင်း Ester နှင့်ဖင်နိုလစ်မီးနှောင့်နှေးဗဓေလသစ်စနစ်များအတွက်ရရှိနိုင်။ လှေကားများအတွက်သြစတြေးလျစံချိန်စံညွှန်းများကလိုအပ်သည့်အဖြစ်ပုံသွင်း FRP လှေကားထစ်နင်းတဲ့ဘေးကင်းလှေကားအတွက်ရရှိလာတဲ့လှေကားတက်နှင့်ဆင်းများအတွက်ခြားနားရှေ့အစွန်း (nosing) အရောင်ရှိသည်ဖို့တစ်ဆနျ့ကငျြဘနှာခေါင်းအစွန်းအတူပါလာ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှေကားထစ်နင်းအရောင်များဖြစ်ကြသည်: အဝါရောင်နှာခေါင်းနှင့်အတူ Grey က။ သငျသညျဗေဒနှင့် / သို့မဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူတက်ကိုက်ညီရန်ဆန္ဒရှိသငျ့သညျအခွားသောအရောင်များကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံနင်းပြားများအတွက်သို့မဟုတ်ကျနော်တို့အရွယ်အစားဖြတ်လို့ရပါတယ်ရရှိနိုင်, ငါတို့သည်သင်တို့၏စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကြိုဆိုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စံနင်းထားတဲ့ဆန့်ကျင်စလစ် grit ထိပ်တန်းမျက်နှာပြင်အများရှိသော်လည်း, ငါတို့သည်လည်းဥပမာကိုလည်းဆန့်ကျင်စလစ်ဖြစ်သည့်တစ်ခွက်ထိပ်ကိုအတူနင်းထောက်ပံ့ပေမယ့်သန့်ရှင်းရေးရန်လွယ်ကူနိုင်ပါတယ် ,. အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နင်းယင်းထောင့်မှလုံခြုံကြသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 316 s ကို / s နဲ့အမျိုးအစားက M ကလစ်ပ်ဆင်းကိုင်သုံးပြီးအောက်ထောကျပံ့ – သင်က “တပ်ဆင်ခြင်းဆက်စပ်ပစ္စည်း” စာမျက်နှာပေါ်ပုံသွင်းဆန်ခါညွှန်းကိန်းများတွင်သူတို့အားတွေ့မြင်နိုင်သည်။
သင်တစ်ဦးအဆောက်အအုံပိုင်ဆိုင်ခဲ့လျှင်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု run သို့မဟုတ်လှေကားထို့နောက်သင်လှေကားကို အသုံးပြု. လူတိုင်းအန္တရာယ်ကင်းကြောင်းသေချာစေရန်တာဝနျရှိနေကြသည်ရှိပါတယ်တဲ့အများပြည်သူအာကာသစီမံခန့်ခွဲ။ ဆန့်ကျင်စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံလှေခါးထစ်နှာခေါင်းလှေကားတတ်နိုင်သမျှဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆန့်ကျင်စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံလှေခါးထစ်နှာခေါင်းသိသိသာသာဖြစ်ပေါ်မတော်တဆမှုများအခွင့်အလမ်းတွေကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးလှေကားထစ်များ၏ဦးဆောင်အစွန်းသည့်အခါစိုစွတ်သောချောဖြစ်လာနိုင်ပြီးလူပေါင်းအတွင်းရှိရေကိုခြေရာခံအဖြစ်ပင်ပြည်တွင်းရေးလှေကားမိုးရွာရွာနေစဉ်အတွင်းချောဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အရည်အသွေးမြင့်မား Edge ဆုပ်ကိုင် FRP ဆန့်ကျင်မိုနာကိုကနေလှေခါးထစ်နှာခေါင်းဖြတ်ပိုင်းနှင့်အတူသင်လှေကားများ၏ဦးဆောင်အစွန်းပင်မိုးရေချိန်အများဆုံးအခြေအနေများအတွက်ချောမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုသေချာစေနိုင်သည်။ သွန်းလောင်း Milking, မီးရထားဘူတာ, ပြည်သူ့ရင်ပြင်နှင့်ဥယျာဉ် ,. : ဤဆန့်ကျင်စလစ်လှေကားထစ်နှာခေါင်းအောက်ပါပြည်သူ့နေရာများ, စီးပွားဖြစ်ဒေသများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအပါအဝင်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများအတွက်တပ်ဆင်နိုင်ပါသည် စက်မှုအကြံပေးအဖွဲ့လှေကား, စက်မှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးက်ဘ်ဆိုက်များ, ကျောင်းများ, နှင်းလျှောစီးလယ်ကွင်း, မီးဘေးရှောင်ကွင်းနိုင်ပါ, ရေနံကျွန်ုပ်တို့၏ Edge ဆုပ်ကိုင် FRP ဆန့်ကျင်လှေခါးထစ်နှာခေါင်းမယုံနိုင်လောက်အောင်အကြမ်းခံဖြစ်ကြောင်း Pre-ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြံ့ခိုင်ဖိုက်ဘာမှန်ပြားလာနှင့်ဆီလီကွန်ကာဗွန် grit ထိပ်တန်း finish ကိုမြင့်မားစွာထောက်ပံ့ပေးဖြတ်ပိုင်းဆိပ်ကမ်းတူးစင်။ ခံနိုင်ရည်မျက်နှာပြင်ချော်။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုစလစ်ကိုခံနိုင်ရည်မျက်နှာပြင်များ, တဦးတည်းအတွင်းပိုင်းအခြေအနေများအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏အလင်း grit နှင့်အပြင်ပန်းအသုံးပြုမှုများအတွက်လုပ်အခြားလေးလံ grit ကိုဆက်ကပ်။ edge ဆုပ်ကိုင် FRP ဆန့်ကျင်ဖြတ်ပိုင်းလှေခါးထစ်နှာခေါင်းကအလုံခြုံဆုံး All-ပတ်ပတ်လည်ဆန့်ကျင်စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံလှေခါးထစ်နှာခေါင်းအောင်ခရီးအန္တရာယ်ဖန်တီးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲခြေလှမ်းများ၏နီးပါးတိုင်းအမျိုးအစားတပ်ဆင်အသုံးပြုရန်နိုင်အဓိပ္ပာယ်မူပိုင်ခွင့် featheredge ရှိပါတယ်။ ရေနံကျွန်ုပ်တို့၏ Edge ဆုပ်ကိုင် FRP ဆန့်ကျင်လှေခါးထစ်နှာခေါင်းမယုံနိုင်လောက်အောင်အကြမ်းခံဖြစ်ကြောင်း Pre-ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြံ့ခိုင်ဖိုက်ဘာမှန်ပြားလာနှင့်ဆီလီကွန်ကာဗွန် grit ထိပ်တန်း finish ကိုမြင့်မားစွာခံနိုင်ရည်မျက်နှာပြင်ချော်ထောက်ပံ့ဖြတ်ပိုင်းဆိပ်ကမ်းတူးစင်။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုစလစ်ကိုခံနိုင်ရည်မျက်နှာပြင်များ, တဦးတည်းအတွင်းပိုင်းအခြေအနေများအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏အလင်း grit နှင့်အပြင်ပန်းအသုံးပြုမှုများအတွက်လုပ်အခြားလေးလံ grit ကိုဆက်ကပ်။ edge ဆုပ်ကိုင် FRP ဆန့်ကျင်ဖြတ်ပိုင်းလှေခါးထစ်နှာခေါင်းကအလုံခြုံဆုံး All-ပတ်ပတ်လည်ဆန့်ကျင်စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံလှေခါးထစ်နှာခေါင်းအောင်ခရီးအန္တရာယ်ဖန်တီးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲခြေလှမ်းများ၏နီးပါးတိုင်းအမျိုးအစားတပ်ဆင်အသုံးပြုရန်နိုင်အဓိပ္ပာယ်မူပိုင်ခွင့် featheredge ရှိပါတယ်။ ရေနံကျွန်ုပ်တို့၏ Edge ဆုပ်ကိုင် FRP ဆန့်ကျင်လှေခါးထစ်နှာခေါင်းမယုံနိုင်လောက်အောင်အကြမ်းခံဖြစ်ကြောင်း Pre-ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြံ့ခိုင်ဖိုက်ဘာမှန်ပြားလာနှင့်ဆီလီကွန်ကာဗွန် grit ထိပ်တန်း finish ကိုမြင့်မားစွာခံနိုင်ရည်မျက်နှာပြင်ချော်ထောက်ပံ့ဖြတ်ပိုင်းဆိပ်ကမ်းတူးစင်။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုစလစ်ကိုခံနိုင်ရည်မျက်နှာပြင်များ, တဦးတည်းအတွင်းပိုင်းအခြေအနေများအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏အလင်း grit နှင့်အပြင်ပန်းအသုံးပြုမှုများအတွက်လုပ်အခြားလေးလံ grit ကိုဆက်ကပ်။ edge ဆုပ်ကိုင် FRP ဆန့်ကျင်ဖြတ်ပိုင်းလှေခါးထစ်နှာခေါင်းကအလုံခြုံဆုံး All-ပတ်ပတ်လည်ဆန့်ကျင်စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံလှေခါးထစ်နှာခေါင်းအောင်ခရီးအန္တရာယ်ဖန်တီးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲခြေလှမ်းများ၏နီးပါးတိုင်းအမျိုးအစားတပ်ဆင်အသုံးပြုရန်နိုင်အဓိပ္ပာယ်မူပိုင်ခွင့် featheredge ရှိပါတယ်။
ဖိုင်ဘာဖန်ဆန်ခါ Fiber Glass ကိုခြစ်၏ Applications ကို။
ဖိုက်ဘာမှန်ဖန်မျှင်ထည်နဲ့လုပ်ထားတဲ့တစ်ဦးက cryostat ကြောင့်သူ့ရဲ့အလင်းအလေးချိန်, မွေးရာပါအစွမ်းသတ္တိကိုရာသီဥတု-ခံနိုင်ရည် finish ကိုနှင့်မျက်နှာပြင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏အမျိုးမျိုးမှတစ်ခုကျနော်တို့မှာအများကြီးစွယ်စုံပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။
စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုမှုအတွက်ဖိုက်ဘာ-အားဖြည့်ပလပ်စတစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကျယ်ပြန့် 1930 ခုနှစ်သုတေသနပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာလေကြောင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအထူးစိတျဝငျစားခဲ့သညျ။ Owen-အီလီနွိုက်မှာသုတေသီသွန်းသောဖန်ခွက်တစ်စီးမှာချုံ့လေထုတစ်ဂျက်ညွှန်ကြားခြင်းနှင့်အမျှင်ထုတ်လုပ်သည့်အခါဖန် strands ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှု၏တစ်ဦးကနည်းလမ်းမတော်တဆ 1932 ခုနှစ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Owen 1935 အတွက် Corning ကုမ္ပဏီနှင့်အတူပေါင်းစည်းပြီးနောက်, Owen Corning က၎င်း၏မူပိုင်ခွင့် “Fiberglas” (တဦးတည်း “ကိုယ့်”) ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်နည်းလမ်းအဆင်ပြေအောင်။ ပလတ်စတစ်နှင့်အတူ “Fiberglas” ပေါင်းစပ်ပြီးများအတွက်သင့်လျော်သောဗဓေလသစ် du ပိုတငျးသဖြင့် 1936 ခုနှစ်တွင်တီထွင်ခဲ့သည်။ ခေတ်သစ် polyester resins ၏ပထမဦးဆုံးဘိုးဘေး Cyanamid ရဲ့ 1942. ပါအောက်ဆိုဒ်တင်နိုင်စနစ်များပြီးတော့အားဖြင့်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်း ဖိုက်ဘာမှန်လေယာဉ်တင် radomes (ဖိုက်ဘာမှန်ခရိုဝေ့ဖ်မှပွင့်လင်းဖြစ်ခြင်း) တွင်အသုံးပြုထားသောပုံသွင်းအထပ်သားတစ်ဦးကိုအစားထိုးအဖြစ်တီထွင်ပေးခဲ့သည်။ သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအဓိကအရပ်သားလျှောက်လွှာက 1950 ခုနှစ်လက်ခံမှုရရှိခဲ့သည်ရှိရာလှေများနှင့်အားကစားကားတစ်စီးအလောင်းတွေ၏အဆောက်အဦများအတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုမော်တော်ယာဉ်နှင့်အားကစားပစ္စည်းကိရိယာများကဏ္ဍများမှကျယ်ပြန့်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောလေယာဉ်ပျံကဲ့သို့အချို့ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုများတွင်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာယခုအစားအသံအတိုးအကျယ်နှင့်အလေးချိန်အားဖြင့်ပိုမိုအားကောင်းဖြစ်သောဖိုက်ဘာမှန်၏အသုံးပြုသည်။ ထိုကဲ့သို့သော Pre-pregs နှင့်ဖိုင်ဘာ rovings အဖြစ်အဆင့်မြင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်ဖိုက်ဘာမှန်ရဲ့ application များနှင့် fiber-အားဖြည့်ပလတ်စတစ်နှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှဆန့အစှမျးသတ်တိကိုတိုးချဲ့ပါ။ ၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုမော်တော်ယာဉ်နှင့်အားကစားပစ္စည်းကိရိယာများကဏ္ဍများမှကျယ်ပြန့်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောလေယာဉ်ပျံကဲ့သို့အချို့ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုများတွင်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာယခုအစားအသံအတိုးအကျယ်နှင့်အလေးချိန်အားဖြင့်ပိုမိုအားကောင်းဖြစ်သောဖိုက်ဘာမှန်၏အသုံးပြုသည်။ ထိုကဲ့သို့သော Pre-pregs နှင့်ဖိုင်ဘာ rovings အဖြစ်အဆင့်မြင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်ဖိုက်ဘာမှန်ရဲ့ application များနှင့် fiber-အားဖြည့်ပလတ်စတစ်နှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှဆန့အစှမျးသတ်တိကိုတိုးချဲ့ပါ။ ၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုမော်တော်ယာဉ်နှင့်အားကစားပစ္စည်းကိရိယာများကဏ္ဍများမှကျယ်ပြန့်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောလေယာဉ်ပျံကဲ့သို့အချို့ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုများတွင်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာယခုအစားအသံအတိုးအကျယ်နှင့်အလေးချိန်အားဖြင့်ပိုမိုအားကောင်းဖြစ်သောဖိုက်ဘာမှန်၏အသုံးပြုသည်။ ထိုကဲ့သို့သော Pre-pregs နှင့်ဖိုင်ဘာ rovings အဖြစ်အဆင့်မြင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်ဖိုက်ဘာမှန်ရဲ့ application များနှင့် fiber-အားဖြည့်ပလတ်စတစ်နှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှဆန့အစှမျးသတ်တိကိုတိုးချဲ့ပါ။
ဖန်မျှင်ထည်ကိုလည်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုသည် ယင်း၏ RF permeability နှင့်အနိမ့် signal ကိုကို attenuation ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်အင်တင်နာ, shrouding သည်။ ဒါဟာအစကအခြားဖုံးကွယ်ဖို့အသုံးပြုစေခြင်းငှါ ဤကဲ့သို့သောသူကပုံသွင်းခြင်းနှင့်လက်ရှိအဆောက်အဦများနှင့်မျက်နှာပြင်များနှင့်အတူရောနှောနေခြင်းမှခြယ်သနိုင်သည့်နှင့်အတူလွယ်ကူခြင်းကြောင့်ပစ္စည်းကိရိယာများပုံးနှင့်သံမဏိထောက်ခံမှုအဆောက်အဦများ, အဖြစ်အဘယ်သူမျှမ signal ကို permeability လိုအပ်သည်အဘယ်မှာရှိပစ္စည်းကိရိယာများ။ အခြားသောအသုံးပြုမှုစာရွက်-form ကိုလျှပ်စစ် insulator တွင်လည်းပါဝင်သည် လေ့အာဏာစက်မှုလုပ်ငန်းထုတ်ကုန်မှာတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများကို။ သောကြောင့်ဖိုက်ဘာမှန်ရဲ့အလင်းအလေးချိန်နှင့်ကြာရှည်ခံမှု၏ , ကမကြာခဏထိုကဲ့သို့သောခမောက်အဖြစ်အကာအကွယ်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်အသုံးပြုသည်။ အတော်များများကအားကစားထိုကဲ့သို့သောဖိုက်ဘာမှန်အကာအကွယ်ဂီယာသုံး goaltenders ‘နှင့် Catcher’ ‘မျက်နှာဖုံးများအဖြစ်။
တစ်ဦးလေဆိပ်သိုလှောင်မှုမှာအများအပြားကြီးမားသောဖိုက်ဘာမှန်င့်ကားများ တင့်ကား 300 ခန့်တန်အထိစွမ်းရည်နှင့်အတူဖိုက်ဘာမှန်နဲ့လုပ်ထားတဲ့နိုင်ပါသည်။ သေးငယ်တင့်ကားကုန်တယ်မျှင်နှင့်ဖွဲ့နိုင်ပါသည် ဆောက်လုပ်ရေးကာလအတွင်းတစ်ဦး preform အဖြစ်ပြုမူသော thermoplastic အတွင်းစိတ်အကြံပေးအဖွဲ့ကျော်ဖျာသွန်း။ ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောတင့်ကားရက်ကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်နေကြတယ် ရဲ့ contents အားဖြင့်ဘေးထွက်မြို့ရိုးကိုချမှတ်ကွင်းစိတ်ဖိစီးမှုမှလက်ျာဘက်ထောင့်မှာအမျှင်ဓာတ်တိမ်းညွတ်နှင့်အတူဖျာသို့မဟုတ်ဝိုင်ယာကြိုးဒဏ်ရာဖိုင်ဘာ။ ထိုသို့သောင့်ကားများဓါတုဗေဒအတွက်အသုံးပြုခံရဖို့လေ့ ပလတ်စတစ်ကှနျ့ (မကြာခဏ polypropylene) တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးဓာတုပစ္စည်းများကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုခံနိုင်ရည်ကြောင့်သိုလှောင်မှု။ ဖန်မျှင်ထည်လည်းမိလ္လာကန်င့်ကားများအသုံးပြုသည်။
Glass ကို-အားဖြည့်ပလတ်စတစ်ကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောအမိုးမိုးဖျင်အဖြစ်အိမ်သူအိမ်သားအဆောက်အဦအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုကြသည်, အိမ်တံခါးသော့ချက်များနှင့်ထားလိုက်တော့အတူ Over-တံခါးကိုမြတ်သော, ပြတင်းပေါက်မြတ်သောနှင့် dormers, မီးခိုးခေါင်းတိုင်, ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုစနစ်များနှင့်အကြီးအကဲများဝန်းရံ။ သစ်သားသို့မဟုတ်သတ္တုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပစ္စည်းရဲ့လျှော့အလေးချိန်နှင့်ပိုမိုလွယ်ကူကိုင်တွယ်, ပိုမိုမြန်ဆန်တပ်ဆင်ခွင့်ပြုပါတယ်။ mass-ထုတ်လုပ်ဖိုက်ဘာမှန်အုတ်-အကျိုးသက်ရောက်မှုပြားပေါင်းစပ်အိမ်ယာ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး, အပူဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချရန် insulator တွင်လည်းပါဝင်နိုင်ပါသည်။
ဖိုင်ဘာသို့ 1. ရှူရှိုက်မိပါအမှုန့်။ အလုပ်လုပ်နေစဉ်တွင်အထည်သို့မဟုတ်လေထု filter ကိုမျက်နှာဖုံးကိုသုံးပါ
လူစုခွဲသည်အထိ 2. ပန်ကာကိုဖွင့်မထားပါနဲ့။ သငျသညျ upwind ဖွင့်ဖို့လိုအပျပါ
4. အခါဘီး။ ဒါမှမဟုတ်ပွတ်ဖိုက်ဘာမှန် အကာအကွယ်မျက်မှန်အပိုင်းအစဖိုက်ဘာမှန်အတှကျအသုံးပွုထားရမည်
အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကြောင့်မထိဖို့ itching ဖြစ်ပါတယ် 5. ။ ယာဉ်ဧရိယာကနေရွှံ့သို့မဟုတ်ဖယောင်း Cube အသုံးပြုခြင်း။ တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းဆပ်ပြာသို့မဟုတ်ဆပ်ပြာသို့မဟုတ်အရောင်ချွတ်အရောင်တင်သုံးပါ။ ထိုအခါရေဖိအားသို့မဟုတ်ရေပူချွေးပေါက်ကိုချဲ့ထွင်ရန်ဖြစ်ပေါ်စေပွတ်တိုက်ခြင်းနှင့်လေပေါ်မှာရန်ဖြီးကိုအသုံးပြုပါ။
ဖန်ဖိုင်ဘာအမျိုးအစားများအဓိကဆောင်းပါးအသုံးပြုသော: Glass ကိုဖိုင်ဘာရေးစပ်သီကုံး: ဖိုက်ဘာမှန်များတွင်အသုံးပြုဖန်ဖိုင်ဘာ၏အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားတွေကိုအဓိကအားဖြင့်ဖန်-အားဖြည့်များအတွက်အသုံးပြုအယ်လကာလီအောက်ဆိုဒ်, w / w ထက်နည်း 1% နှင့်အတူ alumino-borosilicate ဖန်သော E-ဖန်ဖြစ်ပါတယ်။ ပလတ်စတစ်။ မြင့်မားသောအတူ / w အယ်လကာလီအောက်ဆိုဒ် w ထက်နည်း 1% နှင့်အတူ alumino-ထုံး silicates; အသုံးပြုသောဖန်၏အခြားအမျိုးအစားများကို A-ဖန် (အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမဘိုရွန်အောက်ဆိုဒ်နှင့်အတူအယ်လကာလီ-ထုံးဖန်) ဖြစ်ကြပါ E-CR-ဖန် (လျှပ်စစ် / ဓာတု Resistance ။ အက်ဆစ်က၎င်း၏နိမ့် Dielectric စဉ်ဆက်မပြတ်ဘို့အမည်ရှိခုခံ), ကို C-ဖန် (ဖန်အဓိကအမျှင်များနှင့်လျှပ်ကာအတှကျအသုံးပွုမြင့်မားသောဘိုရွန်အောက်ဆိုဒ်အကြောင်းအရာနှင့်အယ်လကာလီ-ထုံးဖန်), D-ဖန် (borosilicate ဖန်,), R-ဖန် (alumino silicates ဖန်မရှိဘဲ။ စစ်ကူအဖြစ်အဆင့်မြင့်စက်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့် MgO နှင့် Cao) ,. နဲ့ S-ဖန် (Cao မပါဘဲပေမယ့်မြင့်မားတဲ့ဆန့ခွန်အားနှင့်မြင့်မားသော MgO အကြောင်းအရာနှင့် alumino silicates ဖန်) အမည်ဖြင့်သမုတ်နှင့်အသုံးပြုမှု: အဘယ်သူမျှမစစ်မှန်တဲ့အရည်ပျော်မှတ်နှင့်အတူတစ်ဖန်သို့ fused လင်းကျောက်အဖြစ်အအေးလာသောအခါစင်ကြယ်သော silica (ဆီလီကွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်), တစ်ဦးအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဖန်ဖိုက်ဘာမှန်ဘို့ဖိုင်ဘာ, ဒါပေမယ့်အလွန်မြင့်မားတဲ့အပူချိန်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ရမည်ဖြစ်သည်သောအားနည်းချက်ရှိပါတယ်။ လိုအပ်သောအလုပ်အပူချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်ရန်အတွက်အခြားပစ္စည်းများ “flux အေးဂျင့်” (ပုအရည်ပျော်မှတ်ကိုလျှော့ချဖို့ဆိုလိုသည်မှာအစိတ်အပိုင်းများ) အဖြစ်မိတ်ဆက်ကြသည်။ ဒါခေါ် cullet ဖန်အဖြစ်သာမန် A-ဖန် ( “အယ်လကာလီ-ထုံး” အတွက် “တစ်ဦးက”) သို့မဟုတ်ဆိုဒါထုံးဖန်, နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရခြင်းနှင့် remelted ခံရဖို့အဆင်သင့်, ဖိုက်ဘာမှန်အတှကျအသုံးပွုဖန်၏ပထမအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ E-ဖန် (ဘာလို့လဲဆိုတော့ကနဦးလျှပ်စစ်လျှောက်လွှာ၏ “အီး”), အခမဲ့အယ်လကာလီသည်, စဉ်ဆက်မပြတ်ဝိုင်ယာကြိုးဖွဲ့စည်းရေးအတွက်အသုံးပြုပထမဦးဆုံးဖန်ရေးဆွဲရေးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာယခုကမ်ဘာပျေါမှာဖိုက်ဘာမှန်ထုတ်လုပ်မှု၏အများဆုံးတက်စေသည်များနှင့်လည်းတစ်ကမ္ဘာလုံးဘိုရွန်သတ္တုဓာတ်၏အကြီးဆုံးတစ်ခုတည်းစားသုံးသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကလိုရိုက်အိုင်းယွန်းတိုက်ခိုက်မှုမှဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်နှင့်အဏ္ဏဝါ application များအတွက်ဆင်းရဲသားရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဆန့အစှမျးသတ်တိ (အမြင့်ဆုံးကိန်းပကတိတန်ဖိုး) အရေးကြီးသောဖြစ်ပါသည်, ထို့ကြောင့်အရေးပါသောအဆောက်အဦများနှင့်လေယာဉ်ပျံ epoxy ပေါင်းစပ်ထဲမှာ “အားဖြည့်” အတွက် (က R-ဖန်ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်, “R ကို” အခါက S-ဖန် ( “ခိုင်မာသော” အတွက် “S” ကို) ကိုအသုံးပြုသည်။ ဥရောပ) ။ နှင့် T-ဖန်ကို C-ဖန် ( “ဓာတုခုခံ” အတွက် “ကို C”) ( “T က” “အပူလျှပ်ကာ” အဘို့ကို C-ဖန်၏ -a မြောက်အမေရိကမူကွဲဖြစ်ပါသည်) ဓာတုတိုက်ခိုက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်; နှစ်ဦးစလုံးမကြာခဏလွဖိုက်ဘာမှန်၏ insulator တွင်လည်း-အဆင့်၌တွေ့နေကြပါတယ်။ Glass ကိုဖိုင်ဘာသို့မဟုတ်ဖန်အလင်း Bourne တစ်ဒြပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပုံသွင်းဖိုက်ဘာမှန်များတွင်အသုံးပြုအဓိကကုန်ကြမ်း။ ဖိုင်ဘာယေဘုယျအား Chanin အားဖြင့်အောက်ပါအင်္ဂါရပ်များသို့ခွဲခြားထားပါသည်။
1. အမျိုးအစား alkaline ရန်ဓာတုဗေဒခံနိုင်ရည်လိုအပ် application များအတွက်အသုံးပြုသောတစ်ဦးကဖန်ခွက် (အယ်လကာလီ)
2. အမျိုးအစားကို C ဖန် (ဓာတု) သော pH မှာဓာတုနှင့်ချေးလိုအပ် application များအတွက်အသုံးပြုသည်
ကို အသုံးပြု. 3. အမျိုးအစား E ကိုဖန်ခွက် (လျှပ်စစ်။ အစွမ်းသတ္တိနှင့်ကောင်းသောလျှပ်စစ် insulator တွင်လည်းလိုအပ် application များအတွက်
4. အမျိုးအစား S ကိုဖန်ခွက် (မြင့်မားသောအစှမျးသတ်တိ) မြင့်မားတဲ့အမျိုးအစား E ကိုဖန်ခွက်မှာပိုမိုမြင့်မားအစွမ်းသတ္တိကိုလိုအပ် application များအတွက်အသုံးပြုသည်။
1. ဖိုင်ဘာဝစောက Short LINE (ခုတ်ဖျာ strands) ဂဟေသဖြင့်ဖြန့်ဝေချောထုပ်အပေါ် 1-2 လက်မ spatter ကော်တစ် fiber optic လိုင်းအရှည်ဖြစ်ပါသည်, ကော် (စာအုပ်ချုပ်သမား) နှစ်မျိုးရှိတယ်
: •အမျိုးအစား Emution ပြားချပ်ချပ်ကြည့်ရှုပါ။ ချောမွေ့ညနေလိုအပ်တင်းကျပ်စွာမထိုက်မတန် applications များ။ မရွှေ့ပါနဲ့
•စိတ်တိုင်းကျ Powder ရက်အမျှင်တစ်ချောင်စာရွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနယ်ပယ်ကိုက်ညီ။ ထောင့်များနှင့် niche အများကြီးရှိပါတယ် / m²အလေးချိန်တစ်စတုရန်းမီတာလျှင်ပေါင်း 100 200 300 450 600 နှင့် 900 ဆတိုင်းတာခြင်းအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ အာဏာဖန်အထွေထွေနှင့်အတူ Bourne
2. ပန်းသီးဖိုင်ဘာရက် (ယက် roving), တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအရွယ်အစား 400 600 800 900 1000 နှင့် 1200 g / မီတာနှင့်အတူယက်အထည်သို့ယက်တိုတောင်းတဲ့ဖန်ဖိုင်ဘာ strands ။ အဆင့်မြင့်အာူး အဆိုပါဖိုက်ဘာ (2-လမ်း) ၏ဦးတည်ချက်ချမှတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တော့သည်။
3. ဖိုက်ဘာမှန်အထည် (Glass ကိုအထည်) ချည်မျှင်ကဲ့သို့အမျှင် strands တစ်ထည်သို့ယက်ခံရနေကြတယ်, texture, အရွယ်အစား 30, 60, 90.100.160.200 နှင့် 300 ဂရမ် / m²။ ကိုကူညီပါကောင်းစွာသွားခဲ့ပြီ အလုပ်မရှိသလောက်ပြုပါ အနားခိုင်မာစေရန်။ မျက်နှာပြင်နှင့်၏အထက်ပိုင်းနှင့်အောက်ပိုင်းအဆုံး
4-ဖိုင်ဘာရက်ချုပ်နေသည် (ဖျာပူးတွဲလိုက်ပါ) polyester ဖိုင်ဘာအပိုင်းအစနှင့်အတူချုပ်ကမ်းနားလမ်းဖျာကုန်တယ်ဖိုက်ဘာမှန်၏အပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဖန်မျှင်သုံးစွဲဖို့အချိန်မရွှေ့ပါလိမ့်မယ်။ နမူနာပြခဲ့ပြီးပါပြီနှင့်အဘူဗြိတိန်အရွယ်အစား 300 450 600 နှင့် 900 g / မီတာမှာကျင်းပလျက်ရှိသည်
(ဖျာ Surfacing)5ဖိုက်ဘာမှန်အသားအရေပါးလွှာဖန်ဖိုင်ဘာတစ်ရှူးတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Size ကို 20 30 အလေးချိန် 50 ဂရမ် / m²။ Binder, ဆဲလ်ဂျယ်လ်အင်္ကျီကိုမျက်နှာပြင်အလွှာ။ နှင့်ပူဖောင်း, ဖိုင်ဘာဖန်နှင့်အတူဂျယ်လ်အင်္ကျီကို layer ရဲ့ပမာဏကိုလျော့ကျစေပါတယ်။
6. တိပ် Fiber (Glass ကိုတိပ်ခွေ), တစ်ဖိုင်ဘာယက်အပိုင်းအစ, ကျယ်ပြန့်4လက်မ3လက်မအားဖြင့်2လက်မနှင့်ဖန်၏စာရွက်များအကြားအဆစ် welding များအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ ထိုအခါ workpiece ရဲ့အနားအားဖြည့်
နေသမျှကာလပတ်လုံးဖိုင်ဘာလိပ်အဖြစ် 7. ဖိုက်ဘာမှန်ကြိုး (Roving) ။ 1 ကီလိုမီတာ TEX1200 = အလျားအဖြစ် 1 ကီလိုမီတာ၏အလေးချိန် / အရှည် 1 ကီလိုဂရမ်, အသုံးအများဆုံးအစီအမံ 1200 2200 2400 4800 သို့မဟုတ်အောက်ပါ၏အသုံးပြုမှုအားဖြင့်အလေးချိန်
တစ်မှုတ်တွေနဲ့•မှုန်ရေမွှား (roving တက်ကိုလေပေါ်မှာပ) ။ ဖန်မျှင်လေ့အမှတ် 2400 ကိုအသုံးပြု
အသုံးအများဆုံးဖုန်းကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏ 600 800 1100 2200 2400 4800 နှင့်အတူပြွန်အလုပ်အတွက်တထောင် (ဝိုင်ယာကြိုး roving) •, ရေလှောင်ကန်
ထုတ်လုပ်မှုဆွဲ-သက်တမ်းအသုံးအများဆုံးနံပါတ်များများတွင်အသုံးပြု•ဆွဲ (pultrution roving) ။ 2400 4800
တစ် SMC (စာရွက်တန်ဆာဝင်း) •တစ်ဦး SMC စာရွက်အမှတ် 2400 ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
•တစ်ဦးက 2400 နံပါတ်များကို အသုံးပြု. စခေါင်မိုးကို အသုံးပြု. PANEL (မြှောင်းပုံစာရွက်)
8. က Short ဖန်ဖိုင်ဘာ strands (ကုန်တယ်ကမ်းနားလမ်း) ဖိုင်ဘာလိုင်းများအတိုဖြစ်ကြသည်။ လိုင်း 3,6အရှည်, 9, 12 မီလီမီတာအဆိုပါ workpiece ရဲ့အစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်
နေတဲ့အဖြူဖန်ဖိုင်ဘာအမှုန့်အဖြစ် 9. Fiber Powder (Glass ကိုအမှုန့်) ။ အဆိုပါတိုးမြှင့်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာခြစ်ခြင်းနှင့်လှုပ်ခြင်းကိုကာကွယ်တားဆီး
10 ဖိုင်ဘာ unidirectional (Unidirection ဖျာ) အမျှင်ဟာအပိုင်းအစတစ်လျှောက်လုံးအညီ, တတန်းအတွက်စီစဉ်ပေးထားပါသည်။ ကြိုး (polyester ကြိုး) နှင့်အတူလိုင်း2ရက်နေ့တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်ချုပ်တစ်ဦး longitudinal နှင့်အလျားလိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါဖိုင်ဘာ၏ရှည်လျားသောဝင်ရိုးတစ်ခုအားကြီးသောအင်အားသုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုခုကိုလမ်း
အရည်ပလပ်စတစ်၏တစ်ဦးကအမျိုးအစား အလားတူရေနံရှာဖွေတွေ့ရှိ funk အပူနှင့်အတူခိုင်မာစေသော။ ဒါဟာမီးလောင်လွယ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် အပြည့်အဝထားပြီးနောက် 2-8% တစ်ကျုံ့ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ ဗဓေလသစ်သတ္တုများပုံသွန်းအများအပြားမျိုးကွဲရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအောက်မေ့ဖွယ်၏ယေဘုယျ foundry သတ္တုများပုံသွန်းများအတွက် ချ. အစေး။ ချောမောရုပ်, etc ဖိုက်ဘာမှန်ဘို့ resins Casting ။ ဒီလိုအင်္ကျီကို Frame ကသိပ္ပံအဖြစ် Coates, များအတွက် resins ။ သရုပ်ဆောင်များနေစဉ် ဓာတုအနံ့လွှတ်ပေးရန်စေးအနံ့နှင့်အတူအနံ့ခဲ့သည်။ အလုပ်ခွင်ကောင်းစွာလေဝင်လေထွက်အာကာသဖြစ်သင့်သည်။ အစိုင်အခဲသောအရပ်ဌာန၌အလုပ်မသငျ့သညျ။ နှင့်မျှမတို့လေကောင်းလေစောင်ရေသို့မဟုတ်လေဝင်လေထွက်အလုံအလောက်ကောင်းလှ၏။
1. တန်း Ortho-phthalic အမျိုးအစားအမျိုးအစားကိုအများအားအသုံးပြုတန်းဖြစ်ပါတယ်
2. တန်း isophthalic အမျိုးအစားကိုခံနိုင်ရည်အက်ဆစ်ဖြစ်ပါသည် – အခြေခံကောင်းကောင်း
3. တန်းအနည်းအမျိုးအစားကိုခံနိုင်ရည်အက်ဆစ်ဖြစ်ပါသည် – alkaline များ
4th တန်း chlorendics အမျိုးအစားကိုခံနိုင်ရည်ဒေါက်တာ – alkaline များ
အခြေစိုက်စခန်းအလွန်အားကောင်းတဲ့, သာအရည်အချင်းပြည့် epoxy ဗဓေလသစ်မှဒုတိယ – 5. တန်းဗီနိုင်း Ester ခံနိုင်ရည်အက်ဆစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဗဓေလသစ်2အမျိုးအစားများသို့အမဲသားကိုခွဲထုတ်။
တုံ့ပြန်မှုအရှိန်အဟုန်မြှင့်မပေးသောအစေးအရောအနှော nonpromote 1. ။ အရည်စေးအလားတူရေနံရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အမဲသားကို၏ဝိသေသလက္ခဏာများ။ ပွင့်လင်းတစ်ဦးကရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အဝါရောင် အဆိုပါမီးမောင်းထိုးပြ2ရက်နှင့်3ရက်တစ်လဝင်သည့်အခါကြောင့်အပူပိုင်းရာသီဥတု, တစ်လအတွင်းအသုံးပြုရန်သင့်ပါတယ်သည့်ထိုင်း,3လတစ်စင်ဘဝ (ဖြစ်ပါတယ်။ ဗဓေလသစ်ဟာထူပြီးပိုနှင့်အတူစတင်ပါလိမ့်မယ်) နှင့်လည်းအများအပြားချက်ပြုတ်နည်းများမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အမျိုးမျိုးသောပုံစံများ fit ရန်။ polyester thermoplastic ဗဓေလသစ်မဟုတ်သောမြှင့်တင်ရန်။
2. အသား၏အသွင်အပြင် accelerates သောအစေးအရောအနှောမြှင့်တင်ရန်, ထို့နောက်စေးအရည်ပုံနဲ့တူတဲ့ရေနံရှာဖွေတွေ့ရှိဖြစ်ပါတယ်။ Fuchsia ပန်းရောင်, ဒါပေမယ့်ပြီးသားဓာတ်ကူပစ္စည်းကူညီပေးခဲ့တယ်တဲ့စေးအရောအနှောလည်းမရှိ။ အကောင်အထည်ဖော်သည့်အခါကပဲဓာတ်ကူပစ္စည်းမှဆက်ပြောသည်။ အရောင်နဲ့အစေးထုတ်လုပ်သူ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အချို့သောကုမ္ပဏီများသည်အနက်ရောင်ဂျယ်လီရေကဲ့သို့အဆင့်မြင့်အရောင်အချို့ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အစေးအရောအနှော accelerates တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းဥစ္စာကို အသုံးပြု. နိုင်ပါသည်။ ထိုအခါသတ္တုများပုံသွန်းစေးများအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ပွင့်လင်းခြင်းနှင့်ရောင်စုံဖြစ်ပါတယ်။ ပွင့်လင်းအစိမ်းရောင်ရှိသောတင့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပြီးလုပ်ရတဲ့-အခမဲ့ငွေဖြစ်လွယ်ဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်အဆင်မပြေတာတိုကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းအသက်ပေတည်း။ အသုံးပြုမှုအထိ2လ၏ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းဘဝကိုအမှန်တကယ်တစ်လအတွင်းကအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
polyester thermoplastic ဗဓေလသစ်၏အင်္ဂါရပ်များ။
ဗဓေလသစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ဓာတု, လျှပ်စစ်နှင့်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းပလပ်စတစ်ပုံသွင်း
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ။ polyethylene thermoplastic (termoplastic) ထက်တစ်ကြော့မော့သောအစိုင်အခဲ, ရှင်းရှင်းလင်းလင်း, မြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံ featuring ပေမယ့်သတ္တုထက်လျော့နည်း။ ဖန်ဖိုင်ဘာနှင့်အတူအားဖြည့်သည့်အခါ ဒါဟာခိုင်မာတဲ့ပေါ့ပါး non-စေးကပ်ကြွပ်ဆတ်လျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိကြီးထွားလာတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ရှိပါတယ်။ ဗဓေလသစ်နဂိုအတိုင်းလျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိရှိပါတယ်။ တစ်ဦး dielectric (insulator တွင်လည်း) ရှိပါတယ်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အများကြီးကွဲပြားခြားနားသော workgroups များတွင်အသုံးပြုစေး။ ဒါဟာပါဝင်သည်လေ့အမေရိကန်များတွင်အသုံးပြုသုံးခုကိုအဓိကအုပ်စုများသို့ကွဲပြား
(သတ္တုများပုံသွန်း) Casting 1. စတာတွေဟာချောမောသောဆုကြေးဇူးဒျေါလီ, ချ. ချ. , ချ. , ဖန်ခလုတ်, ကြိုး, အဖြစ်ကိုနှင်ထုတ်:
အပေါ်ယံပိုင်းအဖြစ် 2. အပေါ်ယံပိုင်း (ဖျင်) ။ ဘောင်သိပ္ပံ
3. တိုင်းတန်ဆာထိုကဲ့သို့သောဖိုက်ဘာမှန်သို့မဟုတ် FRP အဖြစ် (တန်ဆာ) ထုတ်ကုန်, (ဖိုက်ဘာမှန်ပလပ်စတစ်အားဖြည်) ဖိုက်ဘာမှန်တွေနဲ့အားဖြည့်ပလပ်စတစ်။
polyester thermoplastic ဗဓေလသစ်အများအပြားနည်းလမ်းပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ပါတယ်:
1. ဓာတ်ကူပစ္စည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အပူတင်းမာ + အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်
တစ်ဦးဓာတ်ကူပစ္စည်းသို့မဟုတ်ခိုင်မာစေ + အကူအညီဓာတ်ကူပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်2။ မြှင့်တင်ရန် / accelerator အခန်းအပူချိန်မှာ
အလင်း, Ultra-ခရမ်းရောင်အသုံးပြုခြင်း 3.
Electron အသုံးပြုခြင်း 4.
အပူကိုသုံးပြီး6။
ယေဘုယျအားဖြင့်, အစေးများတင်းမာနှစ်ခုအဆင့်သို့ကွဲပြား: 1. ဂျယ်အချိန်ဓာတ်ကူပစ္စည်းများ၏ထို့အပြင်ပြီးနောက်ကာလဖြစ်ပါတယ်, အဲဒီနောက်ဗဓေလသစ်ဟာဗဓေလသစ်မာလာသည်၏ဂျယ်လီ 2. ရောဂါပျောက်ကင်းအချိန်နှင့်အပြည့်အဝအကွာအဝေးအတွင်းမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ ဗဓေလသစ်ယခုအချိန်တွင်တုံ့ပြန်မှုများ၏အပူအပြီးဆင်းအအေး။
အဆိုပါဗဓေလသစ်၏တင်းမာကိုထိခိုက်သော Element ။
1. အပူချိန်မြင့်မားသောအပူချိန်နိမ့်အပူချိန်, ဗဓေလသစ်ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာခိုင်မာစေသော
အဆိုပါဓာတ်ကူပစ္စည်းများ၏ပမာဏ 2. နှင့်ပိုမြန်သည်ထက်အလွန်သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏ၏ solidification အရှိန်အဟုန်မြှင်
3. အစိုဓာတ်ကိုသို့မဟုတ်ရေ။ မြင့်မားသောစိုထိုင်းဆဟာဗဓေလသစ်၏တင်းမာနှေးကွေးပါလိမ့်မယ်။ မြူဆိုင်းလျက်ရှိသောတက်ပြီးစီး ပုံမှန်အားဖြင့်, အဗဓေလသစ်အတွက်ရေအကြောင်းအရာ 0.05% ထက်မပိုဖြစ်ရပါမည်
4. အောက်စီဂျင်။ အောက်စီဂျင် anti-ခဲဗဓေလသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်စီဂျင်ပမာဏကိုပါလျှင် ထိုသို့သော resins ပုဗဓေလသစ်၏တင်းမာနှေးကွေးဖြစ်ပါတယ်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါသည်။ resins ၏သက်တမ်းရှည်ရှည်အတွက်အသုံးဝင်သော9F နှင့်အောက်စီဂျင်။ သင်စေးတက်ကောက်နေ start လျှင်။ တစ်နှစ်အတွက်အောက်စီဂျင်အကြံပေးအဖွဲ့ဖန်တီးသို့မဟုတ်ခြင်းဖြင့်လှိမ့င့်ကားများနှင့်အတူနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရသင့်ပါတယ်။ လှုပ်ရှားမှုထဲမှာစေး။ အောက်စီဂျင်မမှေးဖှား နှင့်အနည်းငယ်ပိုစုဆောင်းတော်မူပြီးမှထိုအစေးအောင်။
1. ပလတ်စတစ် (ပလတ်စတစ်) 2. ပေါင်းစပ် (Composite)3Kevlar “Kevlar” 4. ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ (carbon fiber)5polyurethane မြှုပ်။ (Polyurethane foam) 6. ကို ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) 7. polypropylene (PP) ပလတ်စတစ်။
ပလတ်စတစ်ဒြပ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများမှာ ဘယ်တစ်အများကြီးကျယ်ပြန့်အဓိပ္ပာယ်ကိုရှိပါတယ် (ထိုသတ္တဝါသည်။ အဆိုပါကြီးမားအမျိုးမျိုး) လူကို 130 နှစျကျြော သိ. အစားသတ္တု, သစ်သားသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအထည်, သင်္ဘောများနှင့်အမျိုးမျိုးသောထုပ်ပိုးပစ္စည်းများကဲ့သို့သောအခြားသဘာဝကပစ္စည်းကိုအသုံးပြုသည်တစ်ဦးပလတ်စတစ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ပိုပြီးအပါအဝငျ။ ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းများဖြင့်သဘာဝရေနံကနေဆင်းသက်လာဒြပ်ပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးကသီးခြားဒြပ်ပေါင်း အတော်များများကအပြစ်မဲ့ တစ်ခုချင်းစီကိုဝင်းနှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာ type တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်ကောင်းစွာကွဲပြားခြားနားသောဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောဒြပ်ပေါင်းများ “ပလပ်စတစ်” ပလပ်စတစ်လိမ့်မည်။
1. Thermoplastic (အနုပလပ်စတစ်)
ထို့နောက်အပူနဲ့အားနည်းသွားစေရန်အရည်ကျိုသည့်အခါပျော့ပလပ်စတစ်။ ထိုသို့တစ်ဦးအစိုင်အခဲမှအေးနေစဉ်။ ပလပ်စတစ်၏ဤအမျိုးအစားသည်နောက်တဖန်အသစ်ကပြန်အရည်ကျိုနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ပလပ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့, ဖျက်သိမ်းရန်သို့မဟုတ်အသုံးပြုသောကြောင့်ပြန်သုံးနိုင်သောနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရနဲ့အရည်ကျိုနိုင်ပါတယ် Poly ပါဝင်သည် Poly propylene ညနေ (polypropylene), polyvinyl chloride တို့ (Polyethelene) ပိန်သွန်းလောင်းလေ၏။ စသည်တို့ကိုမြစ်ကမ်း (polyvinyl Chloride),
2. Thermoseting (ခဲယဉ်းပလပ်စတစ်) ။
hard ပလပ်စတစ်သည့်အခါအပူ, မအားနည်းခြင်း။ ဒါပေမယ့်မီးမရှို့ခံရဖို့ ဒီအမျိုးအစားထုတ်ကုန်များ extrusion သို့မဟုတ်ရောထွေးအသုံးပြုမှုကိုအခြားမှ fused မည်ဖြစ်ကြောင်းတဲ့အခါမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဖျက်သိမ်းရန်သို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်ဤအမျိုးအစားလုပ်ဖို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာအခြားနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရ, အရည်ကျိုမရနိုင်ပါ။ အဆိုပါပလပ်စတစ်ခန္ဓာကိုယ်ဓာတုဗေဒအပြောင်းအလဲများအောင်ခိုင်မာစေသော။ ပလပ်စတစ်အပျော့ပလပ်စတစ်ကနေဖန်ဆင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။ အမဲသားကိုပျော့ပလပ်စတစ်မှခိုင်မာစေဟုခေါ်သည့်ဓာတ်ကူပစ္စည်းများ၏များအပြင်။ အဲဒါကိုပိုပြီးအစိုင်အခဲဖြစ်စေမည်။ ထိုကဲ့သို့သောမယ်လမင်း-Formaldehyde, formalin, Dale (မယ်လမင်း Formaldehyde) ဖင်နိုလစ်အဖြစ်မြင့်မားသောအစှမျးသတ်တိ, (ဖင်နိုလစ်။ ), Poly အဖြစ်လူသိများပတေရုသ Hayes Poly (polyester), ဖိုင်ဘာဖန်၏ပုံစံအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန် Hayes ။ Urethane (Urethane) Fokker အီး (Epoxy) ။
2. ပေါင်းစပ် (Composite) ဖြစ်ပါသည်။
Composite ပစ္စည်းများင်တစ်ဦးကုန်ပစ္စည်း၏နာမတော်သည်။ နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောကတည်းက သို့မဟုတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်မှစွပ်စွဲ တစ်ဦးချင်းစီပစ္စည်းများ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များ။ ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းမှု၏ဥပမာများ။ တာယာရာဘာနှင့်သံမဏိဝါယာကြိုးနှစ်ခုအဓိကအမျိုးအစားများထံမှပစ္စည်းပါရှိသည်သောသိသာနားလည်ကြသည်။ အရေပြားမှသံမဏိနှင့်ရော်ဘာ elasticity ၏ခွန်အားဂုဏ်သတ္တိများ။ တမဟုတ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်။ သို့မဟုတ်အကောင်းပေမယ့်မရတစျယောကျတညျးသံမဏိပျော့မပါလျှင်အဖြစ်။ ကအများကြီးအလေးချိန်အဖြစ်သို့မဟုတ်တာယာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ နှင့်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ် ကွန်ကရစ်ဟာထူးချွန် features တွေနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွန်ကရစ် compression အစွမ်းသတ္တိ, စျေးနှုန်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌အကြမ်းခံသံမဏိနှင့်မြင့်မားသော Compression ခွန်အားနှင့်ဆန့အစှမျးသတ်တိကိုရှာဖွေရတာလွယ်ကူပေမယ့်မြင့်မားတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ အလွယ်တကူသံချေးကြောင့်ကို Maintenance ။
လူအတော်များများဟာဖိုက်ဘာမှန်ကိုအသိအမှတ်မပြု တစ်ဦးကပေါင်းစပ်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်အားဖြည့်ပလပ်စတစ်။ တစ်ဦးကဖိုင်ဘာ-အားဖြည့်ပလပ်စတစ် (Fiber-အားဖြည့်ပလတ်စတစ်, FRP) သို့မဟုတ်ဖန်အားဖြည့်ပလပ်စတစ်။ (Glass ကို-အားဖြည့်ပလတ်စတစ်, GRP) ဒါပေမဲ့တကယ်တော့, ဖန်၏ဖိုက်ဘာမှန်အမျှင်ဒဏ်ငွေပါးလွှာလိုင်းသို့ပတ်ချာလည်ကြောင်း။ ပေါ်လီမာအမျိုးအစားများအတွက်အားဖြည့်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုခံရဖို့။ ထိုကဲ့သို့သောသေးငယ်တဲ့အမိုးမိုးပစ်ကပ်စည်ပိုင်းသင်္ဘောလေယာဉ်တင်အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်ထုတ်ကုန်သို့ပုံသွင်းနိုင်ပလပ်စတစ် resins အပါအဝငျ။ တစ်ဦးကကြီးမားတဲ့ရေတိုင်ကီ အဆိုပါဖိုက်ဘာတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိဂုဏ်သတ္တိရှိသောကြောင့်မော်တော်ကားအစိတ်အပိုင်းများ, etc ။ အမြင့်ဆန့အစွမ်းသတ္တိကိုသံချေးများနှင့်ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ရေခဲသေတ္တာ, မီးဖို, သို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းများအတွက်လျှပ်ကာအဖြစ်အသုံးပြုခံရဖို့စံပြသောအပူလျှပ်ကာ၏ဖိုင်ဘာဂုဏ်သတ္တိများ။
3. Kevlar “Kevlar” ။
Aramid ဖိုင်ဘာ Stephanie Kwolek DuPont တစ်နှစ်နေဖြင့်တွေ့ရှိရသည်။ ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် 2514 (1971) ။ p-phenylene diamine (PDA) နှင့်အတူအက်ဆစ်ကလိုရိုက် terephthaloylchloride (TPC) ၏ငွေ့ရည်ဖွဲ့တုံ့ပြန်မှုအားဖြင့် Kevlar အမျှင်စက်မှုလုပ်ငန်းမှ applications များ oriented နေကြသည်။ Kevlar ၏ဖြစ်ရပ်, Kevlar 29 အတွက် burlap တာယာရေပိုက်နဲ့ခါးပတ်စေတဲ့အမျှင်ဓာတ်ရှည်လျားအမျှင်၏ပုံစံအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်ကြိုးတွေ, လေထီးနှင့် Kevlar ၏တိပ်ခွေအားဖြည့်စေဖို့အသုံးပြုကြပါတယ်။ ရှည်လျားသောအမျှင်များနှင့်တိုတောင်းသောအမျှင်၏ပုံစံအတွက် Millar, 49, စာရွက်များသို့လုပ်နေကြသည်။ ဖိုင်ဘာ၏လယ်ပြင်တွင်အဓိကအားဖြင့်တက်ကြွပါဝင်ပတ်သက်အာကာသပေါ်တွင်ပလပ်စတစ်ကိုယ်ထည်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အားဖြည့်။ တစ်ကင်အဘို့အမြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။ ခိုင်ခံ့ Excellence သံမဏိထက်စင်တီဂရိတ်ထက်ပိုခံနိုင်ရည် 427 ဒီဂရီများနှင့်အထိခုနစ်ကြိမ်အထိခံနိုင်ရည်အပူ, ဒါပေမယ့်ပွန်းပဲ့ကိုခံနိုင်ရည်မ။ နှင့်တရားရှိဖို့ ဘယ်ကပျက်စီးလွယ်စေသည် ဘယ်အချိန်မှာသိသိသာသာငုံ့။
4. ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ (carbon fiber) ။
သူတို့ရဲ့ပေါင်းစပ်၌တည်ရှိ၏။ ထိုအခါထုတ်လုပ်မှု၏သဘောသဘာဝပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ အခြေခံအဆောက်အဦများဟာအလွန်သေးငယ်တဲ့တစ်ခုတည်းသောဖိုင်ဘာရပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဖိုက်ဘာအတွက်ခွန်အားအလွန်မြင့်မားသည်။ အညီအမျှအလေးချိန်နှင့်အတူသတ္တုမြင့်။ ကာဗွန်မျှင်တူညီတဲ့ဦးတည်ချက်အတွက်ဒေါင်လိုက်စီစဉ်ပေးနေကြသည်အခါ။ Epoxy ဗဓေလသစ်အဆိုပါကော်စာအုပ်ချုပ်သမားအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာကျနော်တို့ကဒေါင်လိုက်စပါးကိုသစ်သားမှာသူတို့ကိုခွဲမခွာနိုင်မယ့်ပျဉ်တူတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသစ်သားဖိုင်ဘာ၏ line ကိုဖြတ်ပြီးကြိုးပဲ့မရနိုင်ပါ။ ကာဗွန်ဖိုက်ဘာအသုံးပြုသည်, ကအထပ်သားပျဉ်ပြားနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဖြတ်ကူးနေတဲ့ဒေါင်လိုက်သို့မဟုတ် transverse အမျှင်အတွက်အတူတကွယက်ခဲ့ကြရပေမည်။ သငျသညျမှတပါးဒေါင်လိုက်တောင့်တင်းထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဒီဇိုင်း applications များ၏သဘောသဘာဝမှသင့်လျော်သောသူဖြစ်ရမည်နှင့်ဧည့်ခံအစှမျးသတ်တိအရေးကြီးပါသည်။ ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ application များအတွက်။ ထုတ်လုပ်သူအလုပ်၏သဘောသဘာဝအရေးကြီးပါတယ်အကောင့်သို့ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောပိုက်သို့မဟုတ်ပန်းကန်အဖြစ်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာနဲ့လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းများ၏အစွမ်းသတ္တိကို, သတ္တု သာ. အစွမ်းရှိ၏။ ဒါဟာအညီအမျှဒါကြောင်းသတ္တုထက်အစွမ်းသတ္တိကိုစွန့်ခြင်းမရှိဘဲပေါ့ပါးစေနိုင်ပါတယ်။ ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ၏တစ်သက်တာအလွန်အကြမ်းခံစဉ်းစားသည်။ ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ၏ခွန်အားသို့မဟုတ်ကြာရှည်ခံမှုအမျှင်များအကြားနှင့်အလွှာအကြားတစ်ဦးစာအုပ်ချုပ်သမားအဖြစ် epoxy ဗဓေလသစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ polyurethane မြှုပ် 5. ။ (Polyurethane foam)
တစ်ဦးကအရည်ပလပ်စတစ် thermoplastic က Settings ယက်။ (Thermosetting) လေ့ထိုကဲ့သို့သောအတုသစ်သားအဖြစ်အတု implants ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ (အမြှုပ်၏အရွယ်အစားအလွန်သေးငယ်သည်) ဘမ်ကားများလုပ်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောစတီယာရင်ဘီးနှင့်ခြေတုများနှင့်အစွမ်းသတ္တိ၏ဒိုင်ခွက်ဖန်တီးမှုဟာ workpiece သို့မဟုတ်မှိုမှ (polystyrene granules ပိုကြီးဖြစ်ကြသည်), အဖြစ်အအေးသိုလှောင်မှု insulator တွင်လည်းအဘို့အထိုးအဖြစ်ကားအတွင်းပိုင်း။ Flammable အရည် 2
အဖြူရောင်အမြှုပ်သို့မဟုတ် polyol (polyol) လို့ခေါ်တဲ့အဝါရောင် polyester thermoplastic စေးများကဲ့သို့အမျိုးအစား 1
မြှုပ်အနက်ရောင်သို့မဟုတ် ISBN ကိုခေါ်နီးပါးအနက်ရောင်2umber ရိုက်ထည့်။ ဒီတော့ cyanate (diisocyanate)
အမြောက်အများအတွက် polyurethane ပိုလီမာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသုံးများ တစ်ဦးကပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပစ္စည်း အဆိုပါပစ္စည်းသည်ခိုင်ခံ့ဖို့ပျော့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအအမည်ရ, အုပ်စုသုံးစုခွဲပေါ့ပါး polyurethane
– polyurethane မြှုပ်ဒဏ်ခံ (ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် polyurethane ရေမြှုပ်) ဖြစ်ပါသည်။
– polyurethane တင်းကျပ်ရေမြှုပ် (တင်းကျပ် foam, polyurethane)
– ELASTOMERWHEN ပေါ်လီမာ (polyurethane elastomers) ။
6. ကို ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) ။
ကို ABS စက်နှင့်သင်္ခါရရန်မလွယ်ကူသောအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်အင်ဂျင်နီယာပလပ်စတစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သက်ရောက်မှုခုခံ, တန်ခိုးတော်ကို၎င်း, တောင့်တင်းရန်လိုအပ်ပါသည်ကြသောအခါကို ABS ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ application များအတွက်တစ်ဦးစံပြပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရှုထောင်တည်ငြိမ်မှုရှိပြီးဆေးထိုးခြင်းရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်ကော်ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကဒါဟာ Pre-ထုတ်လုပ်မှုရှေ့ပြေးပုံစံ machining များအတွက်အသုံးများဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝ (အဝါနုရောင်ရှိသော) ကို ABS နှင့်အနက်ရောင်ကို ABS အစားအစာအပြောင်းအလဲနဲ့ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက် FDA ကလိုက်နာကြသည်။ အောက်ပါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုအချက်အလက်များကိုအခြေခံ acrylonitrile-butadiene-styrene ဗဓေလသစ်၏ပုံမှန်တန်ဖိုးများအပေါ်တွင်အခြေခံထားပါသည်။
ကို ABS polybutadiene ၏ရှေ့တော်၌ styrene နှင့် acrylonitrile polymerizing ဖြင့် terpolymer ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအချိုးအစားကို 15 မှ 35% acrylonitrile,5မှ 30% butadiene နှင့် 40 မှ 60% styrene ကနေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်။ အဆိုပါရလဒ် polybutadiene criss-ကူး Poly ၏တိုတောင်းသံကြိုး (styrene-Co-acrylonitrile) နဲ့တစ်ဦးရှည်လျားသောကွင်းဆက်ဖြစ်ပါသည်။ ဝင်ရိုးစွန်းဖြစ်ခြင်းအိမ်နီးချင်းချည်နှောင်ခြင်းမှ nitrile အုပ်စုများ, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုဆွဲဆောင်နှင့်အတူတကွချည်နှောင်စင် polystyrene ထက်ကို ABS အားကောင်းအောင်။ အဆိုပါ styrene ပလပ်စတစ်တောက်ပ, impervious မျက်နှာပြင်ကိုပေးသည်။ အဆိုပါ polybutadiene တစ် rubbery ပစ္စည်းဥစ္စာတောင်မှအနိမ့်သောအပူချိန်မှာခိုင်မာခြင်းပေးပါသည်။ ပလီကေးရှင်းများအများစုအဘို့, ကို ABS ကို C -20 အကြားနှင့် 80 အသုံးပွုနိုငျ (-4 နှင့် 176 က F) က၎င်း၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများအပူချိန်နှင့်အတူကွဲပြားအဖြစ်။ အဆိုပါဂုဏ်သတ္တိများရော်ဘာ toughening အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနေကြသည် ,.
ကို ABS ၏အရေးအပါဆုံးစက်မှုဂုဏ်သတ္တိများသက်ရောက်မှုခုခံခြင်းနှင့်ခိုင်မာခြင်းဖြစ်ကြသည်။ ပြုပြင်မွမ်းမံ၏တစ်ဦးအမျိုးမျိုးသက်ရောက်မှုခုခံ, ခိုင်မာခြင်းနှင့်အပူခုခံတိုးတက်လာဖို့လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီကအခြားဂုဏ်သတ္တိများပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေပေမယ့်အကျိုးသက်ရောက်မှုခုခံ, acrylonitrile လည်း styrene စပ်လျဉ်း polybutadiene ၏အချိုးအစားတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အားဖြင့် amplified နိုင်ပါသည်။ သက်ရောက်မှုခုခံနိမ့်သောအပူချိန်မှာအလျင်အမြန်ချွတ်လဲကြပါဘူး။ ဝန်အောက်မှာတည်ငြိမ်မှုကန့်သတ်ဝန်နှင့်အတူအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများ၏အချိုးအစားပြောင်းလဲနေတဲ့အသုံးပြုပုံကို ABS ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်အတွက်ကိုပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ နှစ်ဦးကအဓိကအမျိုးအစားဆေးထိုးတန်ဆာများအတွက် extrusion နှင့်ကို ABS, ထို့နောက်အမြင့်ဆုံးနှင့်အလတ်စားသက်ရောက်မှုခုခံဘို့ကို ABS ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကို ABS? 20 မှကို C (176 F ကိုယျသလော 4) မှ 80 အပူချိန်အကွာအဝေးအတွင်းအသုံးဝင်သောဝိသေသလက္ခဏာများရှိလိမ့်မယ်။ Lego မှအုတ်ခဲကို ABS ကနေဖန်ဆင်းတော်ကြပါတယ်။
နောက်ဆုံးဂုဏ်သတ္တိများပစ္စည်းနောက်ဆုံးထုတ်ကုန်မှလုပ်ငန်းများ၌သောအောကျခွအေနမြေားဖွငျ့အချို့သောအတိုင်းအတာအထိသြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ အမြင့်ဆုံးသက်ရောက်မှုခုခံနှငျ့ခှနျအားအနိမ့်အပူချိန်မှာကိုပုံသွင်းခြင်းဖြင့်ရရှိခဲ့ကြသည်သော်လည်းဥပမာအားဖြင့်မြင့်မားသောအပူချိန်မှာတန်ဆာထုတ်ကုန်၏တောက်ပြောင်နှင့်အပူခုခံပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ အမျှင် (များသောအားဖြင့်ဖန်မျှင်) နောက်ထပ်နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်ခိုင်ခံ့စေခြင်းနှင့် 80 ကို C (176 F) အဖြစ်အဆင့်မြင့်ဖို့လည်ပတ်မှုအကွာအဝေးမြှင့်ရန်အစေးလုံးလေးများအတွက်ရောစပ်နိုင်ပါသည်။ ကုန်ကြမ်းမူရင်းအရောင်အဖြူမှစဆင်စွယ်ဖြစ်သကဲ့သို့ဆိုးဆေးကိုလည်းထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါပိုလီမာ၏အိုမင်းဝိသေသလက္ခဏာများအကြီးအကျယ် polybutadiene အကြောင်းအရာအားဖြင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု, ထိုသို့ဖွဲ့စည်းမှုအတွက် antioxidants ထည့်သွင်းရန်ပုံမှန်နေကြသည်။ အခွားသောအချက်များသည်ကိုလည်းဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ရရှိနိုင်သောအဘို့ခရမ်းလွန်ဓါတ်ရောင်ခြည်မှထိတွေ့မှုများပါဝင်သည်။
ကို ABS ပိုလီမာ, အယ်ကာလီ aqueous အက်ဆစ်ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်နှင့် Hydrochloric နှင့်ဖော့စဖောရက်အက်ဆစ်, အယ်လ်ကိုဟောနဲ့တိရစ္ဆာန်, ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် mineral အဆီများအာရုံစိုက်, ဒါပေမဲ့သူတို့ glacial acetic acid ကို, ကာဗွန် tetrachloride နှင့်မွှေးကြိုင်ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်များကဖောင်းနေကြသည်နှင့်စုစည်းထံမှဆာလဗျူနှင့်နိုက်ထရစ်အက်ဆစ်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ဟာ Ester, ketones, Ethylene dichloride နှင့် acetone အတွက်ပျော်ဝင်ဖြစ်ကြ၏။ ကို ABS ပလတ်စတစ်စက်မှုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အကြီးအကျယ်အသုံးပြုကြသည်သော်လည်း, သူတို့သည်လည်းလှိုင်း၏ကျယ်ပြန့်အပိုင်းအခြားအတွင်းတရားမျှတစွာစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ကြောင်းလျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိရှိသည်။ ဤရွေ့ကားဂုဏ်သတ္တိများနည်းနည်းအပူချိန်၏လက်ခံနိုင်ဖွယ်လည်ပတ်မှုအကွာအဝေးအတွင်းအပူချိန်နှင့်လေထုစိုထိုင်းဆကြောင့်ထိခိုက်နေကြသည်။
ဒါဟာထိတွေ့သောအခါကို ABS မီးလောင်လွယ်ဖြစ်ပါတယ် ထိုကဲ့သို့သောသစ်သားမီးရှိသူများအဖြစ်မြင့်မားသောအပူချိန်။ ဒါဟာမှာအရည်ပျော်ပြီးတော့ပြုတ်ကြလိမ့်မည် သည့်အငွေ့ပြင်းထန်သောပူမီးတောက်သို့ဖြတ်ထားတဲ့အချက်။ စင်ကြယ်သောကို ABS အဘယ်သူမျှမဟေလိုဂျင်ပါရှိသည်ကတည်းက၎င်း၏ လောင်ကျွမ်းခြင်းပုံမှန်အားဖြင့်မည်သည့် persistent အော်ဂဲနစ်ညစ်ညမ်းထုတ်လုပ်ပါဘူး, နှင့်၎င်း၏လောင်ကျွမ်းခြင်းသို့မဟုတ် pyrolysis ၏အများဆုံးအဆိပ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်နှင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင် cyanide ဖြစ်ကြသည်။ ကို ABS လည်းနေရောင်ခြည်အားဖြင့်ပျက်စီးနေပါသည်။ ဤသည်ကိုအများဆုံးကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်တဦးစေသော စျေးကြီးမော်တော်ကားကြောင့်ခါးပတ်မှာဖြန့်ချိခလုတ်များပျက်စီးခြင်းမှအမေရိကန်သမိုင်းတွင်ပြန်ပြောပြသည်။
ကနေသည်ပေမယ့်ကို ABS, ပြန်လည်အသုံးပြုရနိုင် သမျှသောပြန်လည်အဆောက်အဦများကလက်ခံခဲ့သည်မဟုတ်ပါ။ ထုတ်လုပ်မှု
ကို ABS acrylonitrile, butadiene, ကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ် နှင့် styrene ။ Acrylonitrile propylene ကနေထုတ်လုပ်နေတဲ့ဒြပ် monomer ဖြစ်ပါတယ် နှင့်အမိုးနီးယား, butadiene မှရရှိသောတစ်ဦးဓာတ်ဆီဟိုက်ဒရိုကာဘွန်ဖြစ်ပါတယ် ရေနွေးငွေ့လောင်သောအသံများ C4 အစိတ်အပိုင်း; styrene monomer ethyl ၏ dehydrogenation အားဖြင့်ဖန်ဆင်းထားသည် Ethylene နှင့် benzene များ၏တုံ့ပြန်မှုအတွက်ရရှိသောတစ်ဟိုက်ဒရိုကာဘွန် – benzene ။
ကို ABS acrylonitrile ၏အစှမျးသတ်တိနှငျ့ကျောမှုပေါင်းစပ် polybutadiene ရော်ဘာခက်ခဲတဲ့နှင့် styrene ပိုလီမာ။ ကို ABS ထုတ်လုပ်ကုန်ကျစရိတ်အကြမ်းဖျင်းဖြစ်ပါတယ်နေချိန်မှာ polystyrene ထုတ်လုပ်နှစ်ကြိမ်ကုန်ကျစရိတ်, ကယင်း၏မာကျော, တောက်ပြောင်, ခိုင်မာခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်လျှပ်ကာဂုဏ်သတ္တိများများအတွက်သာလွန်စဉ်းစားသည်။
7. polypropylene (PP) ပလတ်စတစ်
polypropylene (PP), နှင့်ဘာအတွက်အသုံးပြုသည်ကဘာလဲ?
polypropylene (PP) propylene monomers များ၏ပေါင်းစပ်နေဖန်ဆင်းတော်တစ်ဦး thermoplastic “ထို့အပြင်ပေါ်လီမာ” ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာစားသုံးသူထုတ်ကုန်, မော်တော်ကားစက်မှုလုပ်ငန်းအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများ, အသကျရှငျပတ္တာနဲ့တူအထူး devices များနှင့်ချည်မျှင်နှင့်အထည်များအတွက်ထုပ်ပိုးထည့်သွင်းရန် applications များအမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုသည်။ polypropylene ရှင်ပေါလု Hogan နဲ့ Robert ဘဏ်များအမည်ရှိ Phillips ကရေနံသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦး pair တစုံနေဖြင့်နောက်ပိုင်းတွင်အီတလီနှင့်ဂျာမန်သိပ္ပံပညာရှင် Natta နှင့် Rehn အားဖြင့် 1951 ခုနှစ်တွင်ပထမဦးဆုံး polymerized ဖြစ်ခဲ့သည်။ စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်မှုအီတလီဓာတုဗေဒပညာရှင်ပါမောက္ခ Giulio Natta, ပထမဦးဆုံးက polymerized အနိုင်နိုင်သုံးနှစ်လွန်ပြီးမှစတင်အဖြစ်ကအလွန်မြန်ဆန်စွာထင်ရှားတဲ့ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Natta စုံလင်ခြင်းနှင့် 1954 ခုနှစ်တွင်စပိန်နိုင်ငံတွင်ပထမဦးဆုံး polypropylene ဗဓေလသစ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေအများကြီးဖန်တီး crystallize မှ polypropylene များ၏စွမ်းရည်ကိုဖန်တီး။ 1957 အသုံးပြုပုံ ယင်း၏လူကြိုက်များပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်းနှင့်ကျယ်ပြန့်စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်မှုဥရောပတစ်လွှားစတင်ခဲ့သည်။ ဒီနေ့ကမ်ဘာပျေါမှာအမြားဆုံးထုတျလုပျပလတ်စတစ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ CNC ဖြတ် polypropylene နေထိုင်မှု hinge ရှေ့ပြေးပုံစံကလေးကို Safe အဖုံး, CNC ဖြတ် polypropylene နေထိုင်မှု hinge ရှေ့ပြေးပုံစံကလေးကို Safe အဖုံးကို Creative ယန္တရားများဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အခြို့သောအစီရင်ခံစာများအဆိုအရပစ္စည်းများအတွက်လက်ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝယ်လိုအားနှင့် ပတ်သက်. 45 သန်းမက်ထရစ်တန်ချိန်အနေနဲ့နှစ်စဉ်စျေးကွက်ထုတ်ပေးကြောင့်ဝယ်လိုအား polypropylene ၏အဓိကအဆုံးအသုံးပြုသူများထုပ်ပိုးစက်မှုလုပ်ငန်းများမှာ 2020 ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 62 သန်းမက်ထရစ်တန်ချိန်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်ခန့်မှန်းထားသည်။ အကြောင်း 13% အသီးအသီးကိုအသုံးပြုထားသည့်လျှပ်စစ်နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကုန်ထုတ်လုပ်မှုကနောက်တော်သို့လိုက်, စုစုပေါင်း၏ 30% စားသုံးရသော။ အိမ်သူအိမ်သားကရိယာများနှင့်မော်တော်ယာဉ်စက်မှုလုပ်ငန်းနှစ်ဦးစလုံး 10% အသီးအသီးများနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများဈေးကွက်၏ 5% နှင့်အတူအောက်ပါအတိုင်းစားသုံးကြသည်။ အခြား application အတူတကွကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ polypropylene စားသုံးမှု၏ကျန်တက်ပါစေ။
polypropylene ကြောင့်ဂီယာနဲ့တူသို့မဟုတ်ပရိဘောဂများအတွက်အဆက်အသွယ်အချက်အဖြစ်အသုံးပြုရန်အနိမ့်ပွတ်တိုက်ပလီကေးရှင်း Acetal (Pom) ကဲ့သို့သောပလတ်စတစ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သောအစားထိုးစေနိုငျသောအတော်လေးချောမျက်နှာပြင်ရှိပါတယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီအရည်အသွေးဟာအနုတ်လက္ခဏာရှုထောင့်ကအခြားမျက်နှာပြင်မှ polypropylene Bond ရန်ခက်ခဲဖြစ်နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ (ဆိုလိုသည်မှာအခြားပလတ်စတစ်နှင့်အတူဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပူးတွဲဖွဲ့စည်းလိုအပ်သောဖြစ်ရပ်အတွက် welded ခံရဖို့ရှိပါတယ်အချို့ကော်ကောင်းစွာလိုက်နာမထားဘူး။ ) ။ acetal, နိုင်လွန်, ဒါမှမဟုတ် PTFE အစားအသုံးပြုသောမည်ဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သော – polypropylene မော်လီကျူးအဆင့်မှာချောပေမဲ့သူကပွတ်တိုက်မှုတစ်ခုအတော်လေးမြင့်မားတဲ့ကိန်းရှိပါဘူး။ polypropylene လည်းဆေးထိုးပုံသွင်း polypropylene အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဖြန့်ဖြူးဘို့ငွေစုအလေးချိန်ဘာသာသောအခြားဘုံပလတ်စတစ်တစ်ဦးအနိမ့်သိပ်သည်းဆဆွေမျိုးရှိပါတယ်။
polypropylene ၏အဓိကအကျိုးခံစားခွင့်တစ်ခုမှာကလူနေမှုပတ္တာသို့ (တစ်ခုခု CNC သို့မဟုတ်ဆေးထိုးတန်ဆာ, thermoforming, ဒါမှမဟုတ် crimping တဆင့်) ထုတ်လုပ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ Living ပတ္တာ (တောင် 360 ဒီဂရီရောကျခါနီးပွီရွေ့လျားမှု၏အစွန်းရောက်ပ္ပံကျော်) ကိုချိုးဖောက်မပါဘဲပလပ်စတစ်ကြောင်းကွေး၏အလွန်ပါးလွှာသည်အပိုင်းပိုင်းရှိပါတယ်။ သူတို့ကတစ်ဦးမိုးသည်းထန်စွာတံခါးကိုဖွင့်ကိုင်ထားတူသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ application များအတွက်အထူးအသုံးဝငျမဟုတျပါပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သော ketchup သို့မဟုတ်ခေါင်းလျှော်ရည်တစ်ပုလင်းပေါ်တွင်အဖုံးအဖြစ်မဟုတ်တဲ့ဝန်-bearing application များအတွက်အတော်လေးအသုံးဝင်ပါသည်။ polypropylene လူနေမှုများအတွက်ထူးခြားအစွမ်းအခါအကြိမ်ကြိမ်ကွေးခွဲမထားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်း။ အခြားအားသာချက်တစ်ခုမှာ polypropylene ပိုမြန်ရှေ့ပြေးပုံစံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ခွင့်ပြုနှင့်အခြားရှေ့ပြေးပုံစံနည်းလမ်းများထက်လျော့နည်းစျေးကြီးသောလူနေမှုပတ္တာမြားပါဝငျမှ CNC မြင့်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
polypropylene ၏နောက်ထပ်အားသာချက်ကနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ ကိုအလွယ်တကူ polyethylene ကဲ့သို့အခြားပိုလီမာတွေနဲ့ (မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တစ်ဦးပေါင်းစပ်ပလပ်စတစ်သို့ပေါင်းစပ်) copolymerized လိမ့်မည်။ Copolymerization ခွင့်သိသိသာသာပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိပြောင်းလဲ စင်ကြယ်သော polypropylene (၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်တစ်ဦးကုန်စည်ပလပ်စတစ်ပို) နဲ့တတ်နိုင်သမျှထက်ပိုပြီးကြံ့ခိုင်အင်ဂျင်နီယာ application များအတွက်။
အထက်နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖော်ပြထားသောဝိသေသလက္ခဏာများကိုဆိုလို စသည်တို့ပန်းကန်ဆေးစက်အန္တရာယ်ကင်းပြား, လုပ်လေ၏ခွက်များ, ဒီလိုပါပဲမှ-go ကွန်တိန်နာနှင့်များစွာသောကစားစရာ: polypropylene applications များအမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုသည်။
polypropylene ၏အထင်ရှားဆုံးဂုဏ်သတ္တိများ၏အချို့ ရှိပါသည် :.
ဓာတု Resistance ကိုရောအခြေစိုက်စခန်းများနှင့်အက်ဆစ်ဘူး ကထိုကဲ့သို့သောသန့်ရှင်းရေးအေးဂျင့်, ဦးပထမဦးဆုံးအကူအညီထုတ်ကုန်နှင့်ပိုပြီးကဲ့သို့သောအရည်၏ကွန်တိန်နာများအတွက်ကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုမှန်ကန်စေသည်ရာ, polypropylene နှင့်အတူအလွယ်တကူတုံ့ပြန်ဘူး။
elasticity နဲ့ခက်ခဲတဲ့: polypropylene နှင့်အတူပြုမူပါလိမ့်မယ် (အားလုံးပစ္စည်းများကဲ့သို့) deflecton နဲတစ်အချို့အကွာအဝေးကျော် elasticity ဒါပေမယ့်လည်းပုံပျက်သောလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အစောပိုင်းအပေါ်ပလပ်စတစ်ပုံပျက်သောတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦး “ခက်ခဲတဲ့” ပစ္စည်းစဉ်းစားသည်။ ညီကိုချိုးဖောက်မရှိရင် .. အင်ဂျင်နီယာ Term (မ elasticity, ပလပ်စတစ်) ပုံပျက်သောစေရန်တစ်ဦးကပစ္စည်းရဲ့စွမ်းရည်အမျှခိုင်မာခြင်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုကဘယ်ဟာ Is
သည့်တော်လှန်ရေးမှပင်ပန်း: polypropylene Fibers တစ်ဦးကအများကြီး Torsion, Bende ၏ယင်း၏ Shape ဆိုင်တွေမှာပြီးနောက်သလား, အ / သို့မဟုတ် flexing Add ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဤသည်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုနထေိုငျအောင်များအတွက်အထူးသဖြင့်တန်ဖိုးရှိသောဖြစ်ပါတယ် ပတ္တာ။
insulator တွင်လည်း: polypropylene အလွန်မြင့်ခုခံရှိပါတယ် လျှပ်စစ်မီးနှင့်အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
Transmission: polypropylene ပွင့်လင်းစေနိုငျသျောလညျး , ကပုံမှန်အားဖြင့်အရောင်အတွက်သဘာဝကျကျဒီလိုပါပဲဖြစ်ထုတ်လုပ်နေသည်။ polypropylene အချို့ရှိရာ application များအတွက်သုံးနိုငျ လငျး၏အပြောင်းအရွှေ့အရေးကြီးသောသို့မဟုတ်ရှိရာကဗေဒတန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မားသော transmission ဆန္ဒရှိလျှင်ထို့နောက်တူသောပလတ်စတစ် acrylic သို့မဟုတ် Polycarbonate ပိုကောင်းရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြသည်။
polypropylene ပလတ်စတစ်အပူတုံ့ပြန်မှုလမ်းကိုအတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်တဲ့ ( “thermoset” ကိုဆန့်ကျင်အဖြစ်) “thermoplastic” ပစ္စည်းအဖြစ်ခွဲခြားထားပါသည်။ Thermoplastic ပစ္စည်းများသူတို့ရဲ့အရည်ပျော်မှတ် (polypropylene ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အကြမ်းဖျင်း 130 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) မှာအရည်ဖြစ်လာသည်။ thermoplastics အကြောင်းကိုအဓိကအသုံးဝင် attribute ကိုသူတို့အအေး, သူတို့ရဲ့အရည်ပျော်မှတ်မှအပူများနှင့်သိသိသာသာညံ့ဖျင်းခြင်းမရှိဘဲနောက်တဖန် reheated နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအစားကိုမီးရှို့၏, polypropylene တူသော thermoplastics သူတို့ကိုအလွယ်တကူဆေးထိုးပုံသွင်းပြီးတော့နောက်ပိုင်းတွင်ပြန်လည်အသုံးပြုခံရဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့, liquefy ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, thermoset ပလတ်စတစ်သာ (ပုံမှန်အားဖြင့်ဆေးထိုးတန်ဆာလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း) တစ်ချိန်ကအပူနိုင်ပါသည်။ ပထမဦးဆုံးအပူပြောင်းပြန်မရနိုငျသောဓာတုပြောင်းလဲမှုအတွက်ရရှိလာတဲ့ (က 2-တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း epoxy ဆင်တူ) တင်ထားရန် thermoset ပစ္စည်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သင်တစ်ဦးမြင့်မားသောအပူချိန်တစ် thermoset ပလပ်စတစ်အပူတစ်စက္ကန့်အချိန်ကြိုးစားခဲ့လျှင်ရိုးရှင်းစွာရှို့မယ်။ ဒါဟာဝိသေသ thermoset ပစ္စည်းများပြန်လည်အဘို့ဆင်းရဲသားတို့ကိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုမှန်ကန်စေသည
Chancon-GratingThai ၏ Home Page | >> မူလစာမျက်နှာကုမ္ပဏီလင်ကွန်း chat – ထိုင်းကုမ္ပဏီဆန်ခါ
လိုင်းတပ်ဆင်စမ်းသပ်ဖြတ်ဖို့ထုတ်ကုန် features တွေစောင့်ကြည့်ပန်းကန်ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်ပါ & ပြန်ကြားရေး || ဆက်သွယ်ရန်အီးမေးလ် အေဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ကို: ဆက်သွယ်ရန် Maps ကိုထုတ်ကုန်များ နောက်ထပ်လမ်းညွှန်မှု ခစျေးနှုန်း-စျေးနှုန်း: စျေးနှုန်းစျေးနှုန်းစျေးချိုတဲ့လေကြောင်းလိုင်း C. စီမံကိန်းများအားလုံးသည်အဆိုပါကိုးကားစရာ: Customer များ။ applications ကို ဝယ်ဖို့ကဘယ်လို ဃစားနပ်ရိက္ခာ၏ Glass ကို Fiber စစ်ကူဗီနိုင်းဗဓေလသစ်စေးဟာအဆင့်အတွက် FRP ဖန်မျှင်ထည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို features အီးအဆိုပါန်ဆောင်မှုများ, ခြစ်: ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်း, ခွန်အားတပ်ဆင်ရန်နှင့်စမ်းသပ်ဖို့ – ဓာတု အက်ဖ်ရောင်းဝယ်ရေးအရောင်း Wanted: မေးပါ။ အရောင်း ်ထမ်းခေါ်ယူမှုအရောင်း
ရေကန်ပတ်လည်မှာဖိုင်ဘာဖန်ပလပ်စတစ်ဆန်ခါ Gully ခြစ် || သံမဏိ။ အဲဒီမဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်ထူထောင်ရေးအတွက် embedded ဆန်ခါထောင်ချောက်အပျက်အစီးများ
ကျေးရွာအုပ်စုရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါ 1. ပလတ်စတစ် polypropylene ခြစ်။ ထူသောပလပ်စတစ်အဆိုပါ PP အားဖြည့်
ချထားတဲ့သံမဏိချိတ်ဆက်သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိရဲ့ချောသံမဏိဆန်ခါပန်းကန်ဆန်ခါ 2. ။ ရေကျမ်းပိုဒ်အဘို့ပြွန်
ဖိုင်ဘာဖန်ဆန်ခါရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါ3FRP ဖန်မျှင်ထည်မှို။ အပင်များတွင်အထပ် Mat လမ်းကြောင်း
4. ကို ABS ရေကူးလျှံ သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ်အချပ်ရေပိုလွှဲအစွန်းရေကူးကန်ကို ABS, PVC
5. Drive ကိုအဝေးပြေးလမ်းမခြစ်ကွက်ထောင်ချောက်ဖုန်ယိုစီးမှု, အမှိုက်သရိုက်, အလမ်းဘေးတလျှောက်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းခြမ်းထွက်ခွာမည်။ (ဘေးထွက်, ထောင်ချောက်ဆင်, အရွက်ဖို့)
6. စောင့်တပ်ဖွဲ့, သစ်ပင်, ဆန်ခါ, frame ကိုဘောင်ကင်သစ်ပင်၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်မျက်နှာဖုံး Paver ။ တည်ဆောက်လက်စသတ်နှစ်ခုလုံးကိုအတူ။
Manhole Cover || drapes ရေကန် scum ပိုက် Raa ရေဆိုးကိုဖုံးလွှမ်း။ ဘိုသံအဖုံးကိုနှင်ထုတ် Glass ကိုဖိုင်ဘာပိုက်ထုပ်
7. FRP Manhole Cover အဖုံးဖုံး manholes, ပိုက်, ဖိုင်ဘာဖန်ပေါင်းစပ်စေး (noncorrosive အခြားရွေးချယ်စရာမြင့်မားသောတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိသံမဏိ)
သံများအတွက် 8. Cast အဆင်သင့်ကျဇယား Manhole သည့်အဖုံး (က Round ဆကျသှယျရနျ / Square ကိုဒီ) ဦးထုပ်။ မျက်နှာဖုံး manholes ကိုပိတ်ပါ, ပိုက်ပြီးပုံသွင်းလွယ်သံရေကုသမှုစနစ်ကန့်ပစ်
9. FRP စိန်ထိပ်တန်း (အထူးဖြတ်ကိုဖုံးလွှမ်း ) ယင်ကောင်၏အရွယ်အစားလျှော့ချဖို့ရေတွင်းပိုက်မျက်နှာဖုံးဖိုင်ဘာဖန်ထုပ်။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ || ဖုံးစလစ်မျက်နှာပြင်။ နှာခေါင်းအစွန်းတိဖုံး panel ကိုလှေကားဖိုင်ဘာဖန်ဖုံးအုပ်ထားပါ။ ကလစ်ကိုင်ဆောင်သူထိန်သိမ်းသော့ခတ်
10. ဥသေတ္တာမျက်နှာကျက်မျက်နှာပြင် Panel ကိုလိုက်ကာကင်မျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက်အလင်းကိုသေတ္တာအဖုံးမီး slat ။ လေဝင်လေထွက်လေထု filter ကို
11 မျက်နှာကျက် Trellis အရိပ်ကင်မြင်ကွင်းတစ်ခုမျက်နှာကျက်ကုလားကာမြို့ရိုးကို။ အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။ Awnings, မျက်စိကန်း slat
12. PegBoard ပြရန် Tools များစင်ပေါ်ပျဉ်ပြား Winnipeg ပေါက်မြို့ရိုးကိုဆွဲထားသိုလှောင်မှု tool ကိုပျဉ်ပြား Hooks
13. FRP လှေခါးထစ်ကိုနင်းနှာခေါင်းအဆင့်ဖုံးကာကွယ်ပေးသူဖုံးနှာခေါင်းအစွန်းတိဖုံး panel ကိုစလစ်လှေကားဖိုင်ဘာဖန်
14. HDG ။ ကလစ်ချုပ်ကိုင် panel ကိုဇယားကွက်သော့ခတ်ကလစ်သော့ခတ်ညှပ်ဆွဲထားဆန်
© 2019 My blog • Powered by GeneratePress